ကျနော်တို့တွင် Move သင့်ပါ? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါသည်ဤအထူးသဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးဤမျှလောက်များစွာသော၏အာရုံကိုဖမ်းထားပြီးအဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားမိသူအများအပြားရှိပါတယ်သိ. အချို့သောအနက်ရောင်ရှေးရှေး Trayvon Martin ကနှင့်အတူစာနာဒါကြောင့်အမြန်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်အခြားသူများကတွေးမိ, မိမိ၏ကိစ္စရပ်များကိုခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း. နောက်ဆုံးတော့, ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူအားမျှရှိခဲ့သည်ကျနော်တို့ဖြစ်ပျက်အတိအကျအဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူး. မှန်ရဲ့နေစဉ်, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတပြင်လုံးကိုမြဲပေးနေတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံကိုရှာဖွေခဲ့. ငါလူတိုင်းအဘို့ကိုမပွောနိုငျ, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် Trayvon နှင့်မာတင်မိသားစုနှင့်အတူကိုယ်ချင်းစာကိုတွေ့အဘယ်ကြောင့်ငါမူကားသင်ပြောပြနိုင်.
ငါစတိုးကနေအိမ်ပြန်လမ်းလျှောက်လူငယ်တစ်ဦးအနက်ရောင်ဆယ်ကျော်သက်အကြောင်းကိုနားကြားရတဲ့အခါ, သူကယူဆသောသူသည်သူ့ကိုအကြောင်းကိုဘာမှ သိ. ရှေ့တော်၌ပြစ်မှုဆိုင်ရာခဲ့သည်, ငါပြန်ပြောပြနိုင်. သငျသညျနိုင်မည်မပြုစေခြင်းငှါ. ဒီတစ်ခါလည်းသင်တို့သည်နောက်အကြောင်းပြချက်များအတွက်လုံခြုံရေးအစောင့်တစ်ဦးဦးစီးဌာန store မှာပတ်ပတ်လည်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ဖူးပါဘူး. ငါ့မှာရှိတယ်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးအဆင်ပြေစတိုးဆိုင်စာရေးထားခဲ့ဖို့သငျသညျမှာဆူညံအော်ဟစ်ခဲ့ဖူးပါဘူး, သင့်ရဲ့တင်ပါးပေါ် BlackBerry သင်နှင့်အတူသူ့ကိုပစ်သတ်ဖို့စီစဉ်တဲ့သေနတ်ကြောင်းယူဆ. ငါ့မှာရှိတယ်.
ဒီတစ်ခါလည်းသင်လမ်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြီးင့်ကလူကပြုံးပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ဖူးဘူး, သူတို့ကိုမျက်လုံးချင်းရှောင်ရှားရှိသည်ဖို့သာ, သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကို clutch, နှင့်လျင်မြန်စွာကွယ်ပျောက်လမ်းလျှောက်. ငါ့မှာရှိတယ်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးသည်မြို့ရိုးဆန့်ကျင်တွန်းခဲ့ဖူးပါဘူး, သေနတ်ပြောင်းမှာကျင်းပ, နှင့်ရဲများကလက်ထိပ်ခတ် (သငျသညျကာကွယ်ပေးရန်ထင်ကြသူ) သငျသညျ "ကျနော်တို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြတဲ့တရားခံများကဲ့သို့ကြည့်ရှုကြောင့်တည်း။” ငါ့မှာရှိတယ် (ငါကတရားခံများကဲ့သို့ဘာမျှမကြည့်ရှု). ဤဖြစ်စဉ်များအားလုံးသည်သိသိသာသာငါ့အသက်ကိုခြိမ်းခြောက်အသေးစားနှင့်သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှနေကြတယ်. အများဆုံး, အားလုံးမဟုတ်လျှင်, ငါ၏အအနက်ရောင်မိတ်ဆွေလည်းအလားတူအခြေအနေများအားဖြင့်ဖြစ်ရပြီ. ထိုအမရေမတွက်နိုင်တဲ့တခြားသူတွေကိုအများကြီးကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ကြ, အများကြီးပိုဆိုး.
သငျသညျအရာ၏ဤအမျိုးကြုံတွေ့ဖူးပါဘူးဆိုရငျ, ဤကိစ္စတွင်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဒါကြောင့်နက်ရ​​ှိုင်းစွာပဲ့တင်ထပ်နေသင်သည်အဘယ်ကြောင့်နားမလညျစေခြင်းငှါ. သို့သော်လည်းငါသည်မိမိအဇာတ်လမ်းကြားတဲ့အခါ, ငါသည်ငါ့ပုံပြင်ကိုနားထောငျ. ငါ့အဘရဲ့ပုံပြင်. အကြှနျုပျ၏သားရဲ့ပုံပြင်. ငါက Mr ပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်မျှစိတ်ကူးရှိသည်. Zimmerman ကလုလင်ကိုအကြောင်းယူဆချက်ကိုဖန်ဆင်း, ဒါပေမဲ့အငြင်းပွားမှုမပြုမီ, ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. ထူးခြားသောအလျှင်းမရှိ၏. ဒါဟာနေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်.
ပရိုဖိုင်းကိုမှန်ကန်ဖ​​ြစ်ပါသည်, ထိုသို့မကြာခဏလူမျိုးရေးင်. အချို့လူများကသူတို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဇာတ်ကောင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ၏ဆုကြေးဇူးကိုရှိထင်. ရုံနက်ပြာရောင်ဝတ်စုံနှင့်တံဆိပ်တူဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဆိုလိုသည်, မှောင်မိုက်အသားအရေနှင့် hoodie နည်းလမ်းနေသော်လည်း. အဘယ်သူမျှမစကားလက်ဆုံဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုစိတ်ကူးယဉ်ရက်ပ်စာရွက်တွဲနေသည်. အကြမ်းဖက်ရန်ဇာတ်ကောင်ယူဆနေသည်. သူတို့ကတီဗီမှာမြင်လူဆိုးဂိုဏ်းပုံရိပ်အကြောင်းစဉ်းစား, သူတို့၏မိဘများအကြောင်းကိုသူတို့ကိုကပြောသည်ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်, ဒါမှမဟုတ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောရာဇဝတ်မှုသူတို့မျက်မြင် - သူတို့ပင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါ်ကြောင်းအိတ်ကိုအပေါငျးတို့သထားပါ. ကျနော်တို့ကိုသူတို့စိတ်ပူပန်ခြင်းခံရဖို့ထွက်လှည့်ကြပါလျှင်ပင်တစ် person- အကြောင်းကိုတခုခုဖြစ်နေတာကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့ကောက်ချက်ဆွဲရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဘယ်တော့မှ.
ယူဆချက်ဤမျိုးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်များနှင့်အယူမှားကြသည်. ဘုရားသခင့တန်ဖိုးနှင့်ထိုက်တန်နှင့်အတူသူ၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီအားလုံးလူသားတွေဖန်ဆင်း. သို့သျောလညျးကိုအားလုံးကိုအပွစျရှိဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်သင့်အဖြစ်ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်ဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်. ကျွန်တော်တို့ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတစ်ငါ​​တို့အပြစ်များကိုဖွင့်နိုင်, ခရစ်တော်ယုံကြည်စိတ်ချ, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်အားဖြင့်မှန်စေ. ဒီအမှန်တရားတွေမှလျှောက်ထားရပါမည်သည့်လူဒါပေမယ့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကရွေးခြယ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်း. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကပြောပါတယ်, "ငါသည်အဖိုးတန်နှင့်ကောင်းမွန်သောရယ်, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်လူဆိုးဖြစ်ကြသည်။”
ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ဒီမောကျမာပုန်ကန်မှုသညျဘုရားသခငျရဲ့လူမှအကျိုးစီးပွားဖြစ်သင့်. ကျနော်တို့ကလျစ်လျူရှုမနေသင့်, ငါတို့သည်လည်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးရန်ဝံ့မဖြစ်သင့်ပါဘူး. ဧဝံသညျယရှေုလူမျိုးကြီးဝါဒနှင့် Non-လူမျိုးရေးခွဲခြားသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုနှစ်ခုလုံးအတွက်သေဆုံးသို့ရောက် လာ. ဖြစ်ပါသည်. ယခင်ကရန်ကိုယ်တော်၌မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသည်, နှင့်အတိအကျတူညီကျေးဇူးတရားမှအကြိုးခံစားရ. အဘယ်သူသည်တက် step လိမ့်မည်, ဤကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, နှင့်သမ္မာတရားကိုကြားပြောစေခြင်း? သငျသညျအပြေးပြိုင်ပွဲဤကိစ္စတွင်အတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ဖြစ်စေမ, သငျသညျနေ့စဉျနေ့ကယှဉ်ပြိုင်ကျွန်တော်တို့ကို၏ဤမျှလောက်များစွာသော၏ဘဝအသက်တာ၌အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်များကိုမငြင်းဆိုနိုင်.
ဒါကြောင့်ငါတို့သည်အဘယ်သို့တုံ့ပွနျသငျ့? ဒီတစ်ခါလည်းငါတို့သည်တလုံးတသဘောအရအပေါ်လှုံ့ဆျောပေးသငျ့. ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်ကိုရပ်တန့်ကျနော်တို့အကြောင်းကိုသေချာမင့်ဥစ္စာအကြောင်းကိုငြင်းခုံသင့်တယ်. ကျနော်တို့ထိုညဉ့်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းအသေးစိတ်မသိရပါဘူး; မဟုတ်ရင်ငါတို့သည်သက်သေခံအဖြစ်ကိုခေါ်ခဲ့ကြပေသည်. ငါတို့သည်စီရင်ချက်ကြိုက်ဖြစ်စေမ, ဒါကြောင့်ငါတို့လက်ထဲကင်.
ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့ငြင်းခုံရပ်တန့်သင့်တယ်, ဆုတောင်းစတင်. မိသားစုများအဘို့ဆုတောင်းကြလော့. ဘုရားသခငျသညျစုံလင်သောတရားမျှတမှုကိုဆောင်ကြဉ်းရန်သူ၏သားတော်ကိုပေးပို့ဖို့သူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုစောင့်ရှောက်မယ်လို့ဆုတောင်းပါ. သခင်ဘုရားသည်မိမိတို့အမှုကိစ္စငြင်းခုန်ရန်ရှေ့နေများကမလိုအပ်ပါဘူး, သူတင်ပြသက်သေအထောက်အထားမလိုအပ်ပါဘူး. သူကဂျူရီလူကြီးကိုယ်တော်ကိုသူတို့ရဲ့ရှုထောင့်ပေးရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ရှိပါတယ်. သူအပေါငျးတို့သရှုမြင်, အားလုံးသိတယ်, ပြီးပြည့်စုံတရားမျှတမှုနှင့်အတူတရားသူကြီးတွေ.
သို့သော်အခြားသဘောအရ, ကျွန်တော်တို့အများဆုံးကျိန်းသေအပေါ်မရွှေ့သင့်တယ်. ကျနော်တို့ဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာပုန်းကွယ်သောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအကြောင်းပြောနေတာကိုရပ်တန့်မနေသင့်. သင်ကကြုံတွေ့ဖူးပါ, ဒါကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ်သောသူတို့အားကူညီ. သူတို့ကိုးရိုးကားရားသငျသညျတဆင့်သွားပြီင့်အဘယျသို့နားကိုရှာကွအဖြစ်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူလူနာဖြစ်. ထိုအခါလက်ျာအနုတ်ကျပုံစံကျေပွန်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုသက်သေပြကြပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး. Trust မှခရစ်တော်, ဘုရားသခငျသညျသူ၏အတူကပိုကြည့်ရှုရန်သင့်ဇာတ်ကောင်ပုံသှငျးမယ်လို့ဆုတောင်းပဌနာ.
သငျသညျလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများလက်ခံရရှိအဆုံးအပေါ်ဖြစ်ဖူးပါဘူးဆိုရငျ, ရှိသောသူတို့နှင့်အတူစာနာ. သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. သင်သည်သူတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်နှိမ်လျှင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမချစ်နိုင်. လူပဲညည်းညူနှငျ့ "မျိုးနွယ် card ကိုကစားကြသည်ဟုယူဆဘယ်တော့မှပေးပါ။” သူတို့ကိုနားလည်ရန်ရှာခြင်းငှါ, ကိုအချို့သောကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်မှန်များတှငျနထေိုငျနှင့်ကွဲပြားခြားနားစမ်းသပ်မှုတွေခံဖို့ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုလေးစား.
jonathansampson • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:09 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
T.L., ငါသည်သင်တို့အခြို့သောကြမ်းတမ်းသောပစ္စည်းပစ္စယမှတဆင့်ရောက်ခဲ့ဖူးကြောင်းစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမဲ့ဒီအထူးသဖြင့်အမှု America မှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတစ်ခုရောင်ပြန်ဟပ်မှုမဟုတ်ခဲ့. ဂျော့ခ်ျနောက်ပိုင်းတွင်အတွက်သည်အထိ Trayvon ရဲ့လူမျိုးရေးနဲ့တောင်သေချာမဟုတ်ခဲ့ 911 ခေါ်ဆိုခ, Trayvon ကသူ့ဦးတည်ချက်ဆီသို့လမ်းလျှောက်စတင်သောအခါအ. ကျနော်တို့တိုက်ခန်းအဆောက်အဦးများအကြားနှင့်နောက်ကွယ်မှလမ်းလျှောက်ကြောင့် Trayvon သံသယဖြစ်ဖွယ်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်, ပြတင်းပေါက်သို့ရှာနေခံရဖို့ထင်ရှားကျော်ကြားသော. သတိရ, ဒီအသိုင်းအဝုိင်းချိုး-ins နှင့်ဖောက်ထွင်းတစ်ဦး string ကိုရှိခဲ့ပါတယ်. Trayvon သံသယဖြစ်ဖွယ်ကြည့်ရှုဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သူဒေသခံလမ်းပေါ်-မီးခွက်အလင်းအတွက်လမ်းဘေးအပေါ်လမ်းလျှောက်ခဲ့, ဂျော့ခ်ျတစ်ခုမျက်စိ batted မဟုတ်ဘူး.
ငါလုလင်တယောက်သည်အသေခံသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ခံစားရသည်; ငါမူကားဤကိစ္စတွင်၏ရလဒ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတစ်ခုဥပမာအားဖြင့်အဖြစ်ပုံဖော်ခံအဖြစ်နောက်တော်သို့လိုက်ထားပါတယ်သောသူအပေါင်းတို့အားဖြင့် ပို. ပင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားရတယ်. Baltimore ၌ငါးအနက်ရောင်ဆယ်ကျော်သက်မနေ့ကသေနတ်မှာဟစ်စပန်းနစ်လူကိုကျင်းပခြင်းနှင့်သူ့ကိုရိုက်နှက် “Trayvon သည်။” အပြစ်ရှိမဟုတ်၏စီရင်ချက်သည် လာ. ကတည်းက LAPD အသေးစားအဓိကရုဏ်းတုံ့ပြန်ခဲ့ကြ. ဒါဟာအတုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုစက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့လူတွေကိုနာကျင်ရဲ့, သူတို့ကိုကူညီခြင်းမဟုတ်.
အဘယ်အရာကိုငါ့ကိုလည်းနှောင့်အယှက်ကဒီပစ္စည်းပစ္စယရုံအနက်ရောင်လူတွေကိုဖြစ်ပျက်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ. ကျွန်မအလယ်တန်းကျောင်း၌ငါ့အနက်ရောင်ရွယ်တူများကအလွန်ဆိုးရွားစွာဆက်ဆံခဲ့သည်. နှိမ့်ချ Tripped bleachers, အနိုင်ကျင့်, နှင့်လှောင်ပြောင်. ကိုယ့်လအနည်းငယ်အကြာငါက Black မိန်းကလေးများ Code ကိုများအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းရာတစ်ခု All-အနက်ရောင်-အထီးကောလိပ်ကျောင်းဝင်းလည်ပတ်ခဲ့. ့ကားကိုမှလျှောက်လှမ်းဖို့ကြိုးစားနေငါကသူတို့ကျောင်းဝင်းအပေါ်ပိုင်မထင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကောလိပ်ကျောင်းယောက်ျားလေးများအနေဖြင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့သည်.
ဤနေရာတွင်ဂျော်ဂျီယာ့လအနည်းငယ်အကြာတစ်ဦးကမိခင်တစ်ဦးအားဖြင့်ချဉ်းကပ်ခဲ့သည် 17 အဟောင်းကိုတနှစ်နှင့် 14 အသက် ... နှစ် (နောက်တဖန်, အနက်ရောင်နှစ်ဦးစလုံး) ခြေထောက်မှာသူမ၏ပစ်ခတ်သူကိုမနက်9နာရီမှာ, နှင့်သူမ၏ 13 မျက်နှာအတွက်တစ်လအဟောင်းကလေး. အဲဒီလူတွေကိုအချိန်များတွင်ထုတ်မထင်မှတ်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်. ကအဝတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်? ဒါကြောင့်လူတွေထွက် freaks သောဟစ်ဟော့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်? ဖြစ်နိုင်အောင်. (စစ်မှန်တဲ့လျှင်ဝမ်းနည်း, ဒါပေမယ့်နားလည်နိုင်).
ထိုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲ, ငါငါတို့ငယ်ရွယ်သားသမီးများ၏အသက်ကိုကယ်တင်ကူညီပေးသည်ကြောင်းအဖြေတစ်ခုအဘို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆုတောင်း, မသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲ၏. ငါသည်သင်တို့အခြို့သောကြမ်းတမ်းသောအဆတဆင့်ရောက်ခဲ့ဖူးကြောင်းနောက်တဖန်စိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုဒီ Trayvon / Zimmerman အမှုအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမကူညီဘူး, အဲဒါကိုကြည်လင်.
YOURSTRULY • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Excellent ကအချက်နှင့်ကောင်းစွာထား. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတစ်ခုလုံးအသစ်သောအရာဖြစ်လာသည် “ကို” နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကွဲပြားခြားနားဖြစ်စဉ်းစားပါသူတွေကိုအကြားဖြစ်ပျက်. တစ်ဦးဝတ်စုံကိုအတွက်ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် Thong Insight web studio ၏အတွင်းမိန်းကလေးတစ်ဦး… ကိုလွှဲဖို့ပတ်လည်နှင့်ခက်ခဲသည်, မရှိတော့ကြောင့်သူမြားကိုအသားအရေရဲ့အရောင်ကန့်သတ်. ကျနော်တို့ကတခြားပိုပြီးဆိုးမျိုးကွဲအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုစကားပြောဝံ့ပါနဲ့. အဘယ်ကြောင့်ဒီတစ်ခု? ကျနော်တို့ကိုခုတုံး လုပ်. နှင့်လူကိုပိုပြီးလုံခြုံမှုသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအထိပိုင်ဆိုင်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်အဖြစ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆက်လက်မဟုတ်ကြောင်းသာမြျှောလငျ့နိုငျ. ပရိုဖိုင်းကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ပင် Trayvon profiles “အဖြူ crackers”. ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမနှစ်ဖက်ယူပေးနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးထောင့်ကိုကြည့်ပါ. တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယကျော်လွန်, အပြစ်ရှိမဟုတ်.
Marvin Lee က McManus • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုနှောင့်အယှက်ကျနော်တို့ George Zimmerman Trayvon Martin ကဒီအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ဤနေအိမ်များ၏ပြတင်းပေါက်သို့ရှာဖွေနေခဲ့ပုံအကြောင်းကိုပြောပြသည်သည့်မုသာစကားယုံကြည်ဖို့ဒါမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်. တစျဖနျ, ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူအားမျှရှိကြ၏သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်မြေတပြင်လုံးပေးနေတာမြင်ကကိုယ်တော်တပါးတည်းသာရှေ့တော်၌အဘို့မှတ်ရလိမ့်မည်. အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုတော်တော်စိတ်ညစ်စရာကြှနျုပျတို့သညျဤဒီအဖြူလူတစ်ဦးဆန့်ကျင်ရာဇဝတ်မှုပေမယ့်ဘာမျှမကျူးလွန်အကြောင်းကိုဒီအနက်ရောင်လူတစ်ပြီးပြီဘာဒီမြေတပြင်လုံးနှင့်အတူနောက်ကျောနှင့်ထွက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်. အဲဒီမှာအားလုံးတန်ဖိုးရှိရှိမဟုတ်ပါဘူး. ငါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လူထုအခြေပြုလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများကအကြောင်းကိုအော်ဟစ်ခြင်းနှင့်မျိုးနွယ်အကြောင်းကိုဒီအောင်နားမထောင်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစား. ငါသည်သင်တို့၏ပြဿနာကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝန်ခံလျက်ရှိသည်ထက်ပိုကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍသဘောပေါက်သူသတင်းမီဒီယာနှင့်မဟုတ်အရပ်ဖက်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများကသို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်အတူဖြစ်သင့်ကြောင်းကိုသင်တင်သွင်း. သင်မြင်တဲ့အတိုင်း, ဒါဟာသူတို့ရဲ့ ratings ဘို့ကောင်းပါတယ်အဖြစ်မီဒီယာအငြင်းပွားဖွယ်ရာအတွက်သီးများစွာသီးတတ်. ငါ check လုပ်ထားနောက်ဆုံးအချိန်, အဓိကမီဒီယာလူနည်းစုကပိုင်ဆိုင်ကြသည်မဟုတ်. ဒါဟာအားလုံးမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးအမြစ်ကြောင်းပိုက်ဆံ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်. ကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်သို့ထိုးသောအန္တရာယ်မှဆန့်ကျင်အဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ဦးကလူတစ်ဦးအမြတ်အောင်ပိုမိုစိုးရိမ်နေကြသည်အဖြစ်လိုက်တဲ့အခါ, ကြောင်းနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ပြဿနာလည်းမရှိ. ငါသညျဘုရားသခငျ၏တစ်ဦးမွေးဖွားနောက်တဖန်ကလေးသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဂုဏ်ယူပါတယ်. ဒါကကျွန်မပြတင်းပေါက်အထဲကအကြောင်းပြချက်ပစ်ကြောင်းပြောမဖြစ်. ဒါကအမှန်တရားကအမြဲမသက်ဆိုင်သင့်ရဲ့လူမျိုးရေးနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ကြောင်းပြောပါရန်ဖြစ်ပါသည်. ထိုလုလင်ကိုဆန့်ကျင်ပြောသည်အဆိုပါခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိ untruths, မသက်ဆိုင်သည်သူ၏အတိတ်၏, နှင့်မမျှတသည်ကိုယ်တော်တိုင်၏စရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့တောင်မှရာခေလသည် Jeantel, ရှိသမျှသောအပြေးပြိုင်ပွဲကိစ္စမသက်သေပြသွားပါ. ဒါဟာ Trayvon Martin ကနှစ်ကြိမ်အသတ်ခံခဲ့ကြပုံရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီစမ်းသပ်မှုကလုပ်ခဲ့တဲ့လမ်းအဆုံးသတ်သောငါ၏နှလုံးမှငါ့ကိုထိခိုက်နာကျင်. အစစ်အမှန်ဝမ်းနည်းသည်သမ္မာတရားဖြစ်ပါ၏, ကလေးတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့်သနားစုံမက်တစ်မရှိခြင်းလည်းမရှိ, မသက်ဆိုင်သူ့ကိုအကြောင်းကိုသင်တို့၏အကြံအစည်၏, senselessly မိမိအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်သူ၏မျိုးနွယ်ဘာအရေးမပါဘူး. စကားမျှသောပမာဏကိုအစဉ်အဆက်ကိုပြန် Trayvon ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်နှင့်တိုင်ကြားမှုများကိုအဘယ်သူမျှမငွေပမာဏသည်သူ၏လူသတ်များအတွက်ခံယူချက်နှင့် ပတ်သက်. ရောက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်. အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆီသို့ပိုပြီးသနားကြင်နာဖြစ်နဲ့ကိုယျ့ကိုယျကိုမေးဖို့ဖြစ်ပါသည်, ငါ့ကလေးကန့်သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဦးကိုခစျြခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကို. မည်သို့ပင်အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်မဟုတ်ခဲ့သူ, သင်ဆဲတူညီသောလမ်းခံစားရမယ်လို့? FL ဥပဒေရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပဒဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မည့်ဟန်ရှိပါသည်မဆိုလိုပါ. ကိုယျတျောသမှဖြစ်ပျက်ရမည်မသတ်ဘာပဲ? ဘုရားသခငျ၏တတရားမျှတမှုကိုအမြဲမနိုင်ပါလိမ့်မယ်. ယခု, ငါပြန်ထိုင်နှင့်ဤ post ကို၏နှလုံးစကားကိုနားထောငျသို့မဟုတ်နားမလည်မည်သူကိုမြင်ရဖို့စောင့်ဆိုင်းလျက်နေကြ၏တုံ့ပြန်မှုနေဆဲအချိုးအစားထဲကလွလျက်ရှိသည်ထင်ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကျောင်းကိုငါ့ကိုကြိုးစားကြည့်မယ့်ငါ.
jonathansampson • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျကိုအဘယ်သူမျှမခံခဲ့ဘူးကြောင်းကိုဝန်ခံ, ဂျော့ခ်ျသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှာဖွေနေ Trayvon အကြောင်းကိုလဲလျောင်းခဲ့ပေမယ့်ပြောပါ. သငျသညျမရှိပါလျှင်, သငျသညျမုသာကိုသုံးသောဂျော့ခ်ျတောင်းဆိုအဘို့အဘယ်သို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိဘူး?
သငျသညျအပြေးပြိုင်ပွဲဤသည်၌အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားသောစိတ်ကူးအဘယ်မှာရကြဘူး? ဂျော့ခ်ျအနက်ရောင်ကလေးများနည်းပြ, ကျောင်းကပွဲတစ်ခုအနက်ရောင်မိန်းကလေးယူ, နှင့်သူ၏ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားလူမည်းများ၏ချစ်ကြည်ရေးနှင့်ရိုသေလေးစားမှုရှိခဲ့သူကောင်းသောဇာတ်ကောင်တစ်ဦးသည်လူဖွစျကွောငျးကိုသက်သေခံသောသူအ.
အကြှနျုပျ၏အမဲသားမီဒီယာနှင့်အတူပါဆုံးဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူသည် Zimmerman တစ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ညာဘက်ပြိုင်ပွဲ-ငါးစာနှင့်အတူတံခါးဝမှထွက်လာသော “အဖြူ-ဟစ်စပန်းနစ်,” လူမည်းများနှင့်လူဖြူများအကြားတစ်ဦးမီးကိုစတင်သကဲ့သို့. နောက်ဆုံးတော့, မည်သည့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာမရှိလျှင်, သူတို့ကြော်ငြာအာကာသရောင်းလို့မရဘူး.
ငါဂျော့ခ်ျနှင့် Trayvon ထိုညနကတဆင့်ပြန်သွားပြီးသွားနိုင်လျှင်သေချာပါတယ်, သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုပြုပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာတကယ်တော့ကြောင်း Trayvon မပြောင်းပါဘူး (မကောင်လေး, ဒါပေမယ့်လူတ) Zimmerman straddling စဉ်သေဆုံး, အကြိမ်ကြိမ်ကွန်ကရစ်သို့သူ၏ဦးခေါင်းကို slamming. ဤသည် Zimmerman ရဲ့ကျောဘက်မှာမြက်ပင်အစွန်းအထင်းဖေါ်ပြခြင်းအထောက်အထားထဲကမွေးဖွားခဲ့သည်, အဖြစ် Zimmerman အောက်ခြေအပေါ်ခဲ့တာကြောင့်မျက်စိ-သကျသခေံသက်သေခံချက်.
ကျွန်မကလေးတစ်ဦး၏အသေခံခြင်းအားဖြင့်ဝမ်းနည်းပါ၏, ဒါပေမယ့်ငါကပိုကလေးသည်နှင့်န်းကျင်ကြီးပြင်းသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အားဖြင့်ဝမ်းနည်းတာ. Jeantel အလွန်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, သူမကအဖြူရောင်လူတွေနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဧရိယာကနေကြွလာ. ဆယ်ကျော်သက်ပုံမှန်အိုးဆေးလိပ်သောက်ရှိရာတစ်ဦးကအရပ်ဌာန, အဖြူကလူကိုခေါ်ထားရာနေရာတစ်နေရာ “crackers”, နှင့်ပိုပြီး. ဤသည် hip-hop လူနေမှုပုံစံစတဲ့သားသမီးတို့အထဲကသတ်ဖြတ်စောင့်ရှောက်ဖို့သွား.
ကျွန်မသူမကြောင့်သူမ၏ရွယ်တူများကနှောင့်ယှက်သူပြန် Chattanooga နှစ်ပေါင်းတှငျနထေိုငျသညျ့အခါငါအနက်ရောင်မိန်းကလေးချိန်းတွေ့ခဲ့သည် “သရုပ်ဆောင်အဖြူ” ပညာရေးလိုက်ရှာအတွက်. ဒီစိတ်ဓာတ်အဘယ်အရပ်ကလာသလဲ? ဒါဟာဆက်ဆက်ငယ်ရွယ်အနက်ရောင်ကလေးများအသက်တာ၌ excel ဖို့ကြိုးစားနေများအတွက်အခြားလူငယ်လူမည်းကလေးများပွုဖြစ်ကြောင်းအဖြူလူမျိုး၏အမှားမဟုတ်ပါဘူး.
ငါကူညီပေးနေ၌ငါ့စိတျအပိုငျးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ. ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်ငါစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ငယ်ရွယ်အနက်ရောင်အတ္တလန်တာအခြေစိုက်မိန်းကလေးများအကြားနည်းပညာနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းများအတွက်မေတ္တာတော်ကိုပြန့်နှံ့ကူညီပေးခဲ့, Black ကမိန်းကလေးများ Code ကိုများကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်အစပျိုးအတူလုပ်ကိုင်. အခုအချိန်မှာထိုအမှုရှိသမျှလေးတွေ Nikki Minaj ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ပြက်လုံးမှတက်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်, နှင့် wannabe-လူရမ်းကားလိင်အကြောင်းကို rapping, ပိုက်ဆံ, နှင့်ဖိနပ်.
အဘယ်အရာကိုရည်ရွယ်ချက်သင်သည် Chattanooga အတွက်အစေခံသောအခါသင်ကအနက်ရောင်မိန်းကလေးရက်စွဲပါကြောင်းကြေညာပါဘူး? ငါ့ကိုသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလေးစားရန်အဘို့အသငျသညျအကြှနျုပျကိုမှကြေငြာရန်မလိုပါ. ဒါကရိုးရိုးမွေးရာပါကြောင်းအရာတစ်ခုခုရဲ့. သငျသညျငယ်ရွယ်အနက်ရောင်လူငယ်ဖြစ်စေအခြားမည်သည့်အဖြူရောင်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာကိုသင်မသတ်မှတ်ပါဘူးကူညီဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကို. ငါယုတ်သို့မဟုတ်မလေးစားဖြစ်ကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့် awfully သံသယရှိသူင်. သငျသညျယနေ့အထိအသုံးပြုတဲ့အနက်ရောင်မိန်းကလေးကအဖြူရောင်လူတစ်ဦးအနေဖြင့်ဖွင့်ခြင်းရှိမရှိလှောင်ပြောင်မဆိုအမျိုးအစားခံရဖို့သာအနက်ရောင်တစ်ဦးချင်းမဟုတ်ပါဘူး, အနက်ရောင်လူတစ်ဦး, အခြားသူသို့မဟုတ်မည်သူမဆို. ယခု, ကျနော်တို့အဲဒီမှာမပွောခဲ့. သင်တို့မူကားတစ်ဦးမုသားခြစ်ရာ, သင်တစ်ဦးသူခိုးကိုအမြဲရှာတွေ့. George Zimmerman အနက်ရောင်မိတ်ဆွေများကိုရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူအပေါငျးတို့အမှုအရာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့, နှင့်အနက်ရောင်ကလေးများလမ်းညွှန်သင်ပြ, နောက်တဖန်, တစ်အချက်ကတော့မဆိုလိုပါ. အစဉ်အဆက်ဟူသောဝေါဟာရကိုအဓမ္မကိုကြား? လည်း, ဒါကြောင့်မိုးရွာသည်နှင့်ငါအိမ်ပြန်ရဖို့ကြိုးစားနေပါ၏လျှင်, ငါမည်သူမဆိုရဲ့ပြတင်းပေါက်အတွက် peeking ခံရဖို့အချိန်မရှိဘူး. ကိုယ့်အသတ်ခံလျှင်မူကားငါထင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသံသယဖြစ်ခဲ့သည်, အဲဒီသံသယကိုဖော်ပြရန်ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးဖို့ရှိသည်ချင်ပါတယ်. ဒါဟာအမှန်တရား embellishing ကိုခေါ်မယ့်. ထိုနေ့၏အဆုံးမှာ, သူသည်ငါ့ကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသည်ပါဘူး. သူလုပ်မှာပါ; သို့သော်, မျက်နှာဘုရားသခငျသညျ, ဟုတ်ကဲ့သူကတရားသေလွှတ်ခဲ့သည်, ငါစီရင်ချက်နှင့်အတူစိတ်ပျက်ခဲ့သော်လည်း, သငျသညျမဟုတ်သလိုအခြားမည်သူမဆိုပြိုင်ပွဲကဒီအဖြစ်အပျက်အတွက်အခန်းကဏ္ဍမကစားခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပယ်သွားကျိုးကြောင်းညီညွတ်နိုင်ပါတယ်; တရားခွင်အတွင်း, မီဒီယာ, ပင်ယခု. ပြိုင်ပွဲအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမကစားခဲ့ဘူးဆိုပါက, ဤအမှတ်ချက်တွေအဘယ်သူအားမျှဤမျှလောက်ကအကြောင်းပြောဆိုမယ်လို့. ထိုမျှမကပဲအနက်ရောင်ကလူကနေ. ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသဘောကျတယ်သူကိုသာအနက်ရောင်ကလေးများင်လျှင်အဖြစ်ကလေးတွေအထိရှာဖွေနေဖြစ်ကြောင်းသင်ရက်ပ် icon များအကြောင်းပြောဆိုကြောင်းငါ့ထံသို့အံ့သြဖွယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. အဖြူရောင်ကလေးများအခြားမည်သူမဆိုထက် Nikki Minaj ရဲ့နဲ့ Lil Wayne ရဲ့ သာ. ကွီးမွတျကိုထောက်ခံသူတွေဖြစ်ကြ. သင်တစ်ဦးသက်တမ်းအကြွေစေ့နိုငျသောအဖြူလေးတွေတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုရှိသည့်အခါ, “wigger”, ဒါကြောင့်ပဲအနက်ရောင်ကလူရဲ့ယုံကြည်သို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရူးပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, နှစ်ဖက်စလုံးတွင်နှစ်ဖက်စလုံးနှင့်မုန်းတီးမှုအပေါ်မိုက်မဲရှိပါတယ်, သင် George Zimmerman တရားသေလွှတ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ညွှန်ပြစေလိုသောအချက်များဆီသို့ပြန်သွားရန်ကြိုးစားသောအခါငါမူကားမနှမြောကျေးဇူးပြုပြီး.
jonathansampson • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:12 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခင်ဗျား, ငါသည်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကနေစကားပြောတယ်. ငါ Tennessee ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ငါ့အဟောင်း၏ပြောသောဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ကျွန်မငယ်ရွယ်အနက်ရောင်ကလေးများအစေခံရန်ဖန်တီးအစပျိုး၌ငါ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရည်ညွှန်းဘာဖြစ်လို့နှင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဝမ်းနည်းစရာငါသည်ငါ၏အပြည့်အဝသက်သေခံချက်ပေးနိုင်တယ်လို့, ဆဲအခြားသူများရုံအခြားအဖြူ-pawn ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်.
ငါသည်ငါ့ဟောင်း disrespected ရရန်သာအနက်ရောင်မိန်းကလေးမဟုတ်ပါဘူးငါသိ၏. အဘယ်သို့ငါထွက်ညွှန်ပြတာပါငယ်ရွယ်အနက်ရောင်ကလေးများပုဂ္ဂိုလ်ရေးထူးချွန်အားပေးမပတ်ဝန်းကျင်မှာဖွင့်လာမယ့်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ထိုသူအပေါင်းတို့အဘို့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး, သော်လည်းငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုအတွက်မသက်မသာဘုံင်.
သငျသညျဂျော့ခ်ျတစ်ဦးအဓမ္မမခေါ်, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, အဘယ်အရာကိုအပေါ်အခြေခံပြီး? သငျသညျဂျော့ခ်ျလဲသိလား? သငျသညျထိုညဉ့်ရှိခဲ့? ဒါဟာဂျော့ခ်ျကသူလူမည်းမိတ်ဆွေများကပြောပါတယ်မယ့်, ဒါကြောင့်နှုတ်ဖြင့်သူ့ကိုချီးကျူးထောပနာသောမိမိရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူမည်းများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသက်သေခံချက်င်. အထောက်အထားအပေါငျးတို့သသူမဟုတ်ပါဘူးအကြံပြုလာသောအခါဒါကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့မိမိအကျင့်စရိုက်အဘယ်အရာကိုအခြေခံခေါ်နိုင်ပါတယ်, နှင့်မည်သည့်အခါမျှ, လူမျိုးရေးဝါဒီ?
ပြိုင်ပွဲတစ်အခန်းကဏ္ဍကပါလျှင်, အထောက်အထားဘယ်မှာကွောငျးဖျောပွထားဘူး? ကြှနျုပျတို့သညျဤတစ်ခုလုံးကိုအမှု၌ရှိသည်ပြိုင်ပွဲ၏တစ်ခုတည်းသောဖော်ပြထားခြင်း Jeantel ၏စကား၌ရှိ၏, အဘယ်သူသည် Trayvon ဂျော့ခ်ျတစ်ဦးကိုခေါ်ဆိုပါတယ် “creepy မြည်းကို cracker,” နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦး “nigger ။” အဆိုပါလူမျိုးရေးခွဲခြားဝေဖန် Trayvon မှ လာ., မဟုတ်ဂျော့ခ်ျ. Jeantel သူမ၏ဧရိယာ၌ထွက်ဆို, သောသူတို့သည်အဖြူရောင်ကလူကိုခေါ်ဘာလဲ.
ငါကောင်းကင်တမန်၏အချို့သောအမျိုးအစားကဲ့သို့ဖြူကလေးများပန်းချီမှမဆိုလိုဘူး. ကျနော်တို့ဒီဥပမာထဲမှာ Trayvon အကြောင်းပြောနေတာနေတာသာရှိသောကြောင့်အနက်ရောင်ကလေးများအပေါ်ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးမှု၏စကားပြောနေပါတယ်. ကျွန်မငယ်ရွယ်အဖြူကလေးများတို့တွင်လူရမ်းကားစိတ်ဓာတ်၏နေမကောင်းပဒေသာပေါ့, အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ. ငါ့သား, အဘယ်သူသည် bi-လူမျိုးရေးဖြစ်ပါသည်, မိမိအဒူးတို့ကိုလှည့်ပတ်သည်သူ၏ဘောင်းဘီနှင့်အတူကြီးပြင်းလာမည်မဟုတ်, အဆမတန်ကြီးမားရှပ်အင်္ကျီ, စျြလြူရှုမှုများနှင့်စိတ်မဆက်သွယ်ကြောင်းနှင့်တစ်ဦးသဘောထားက. ငါအဖြူလေးတွေကြားတွင်မြင်ချင်ကြပါဘူး, အနက်ရောင်လေးတွေ, ဟစ်စပန်းနစ်လေးတွေ, အခြားသူသို့မဟုတ်ဘယ်သူ့ကိုမှ. အစား, ငါသည်ဤမျိုးဆက်သစ်သူ့ဟာသူများအတွက်ပိုကောင်းပြုပါမြင်ချင်.
မင်းကိုချစ်တယ်, အစ်ကို. ငါသည်လည်းသင်တို့၏စိတ်အားထက်သန်တန်ဖိုးထား. ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအတှကျဆုတောငျးနှင့်ဤမျိုးဆက်သစ်ဂရုစိုက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်နှစ်သိမ့်နေပါတယ်, ကျနော်တို့ကပိုအရင်ကထက်အောင်မြင်မြင်ချင်. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
Marvin Lee က McManus • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:12 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယောနသန်, ဒီဘယ်နေရာမှာအစာရှောင်သွား. ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူတစ်ဦးသဘောမတူရှိသည်ဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကသင့်တစ်ခုလုံးကို post ကိုမဖတ်ခဲ့ဘူး. ငါ့ကိုပြော Allow, ငါ George Zimmerman တစ်ဦးအဓမ္မမခေါ်ခဲ့ဘူး. ငါရိုးရှင်းစွာသောစကားကိုကိုးကားလုပ်. သငျသညျဘုရားသခငျ၏နောက်တဖန်မွေးဖွားကလေးက Are? ဒါကြောင့် အကယ်., အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ကျောနှင့်ထွက် bantering နေကြတယ်? အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သက်သေပြဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်. ငါ Trayvon Martin ကန့်အပြေးပြိုင်ပွဲသည်အဘယ်အရာဂရုမစိုက်ပါဘူး, သူလည်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါရသောအခါသူသည်မိမိအသက်တာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ. သငျသညျသူလူငယျတခဲ့သင့်အခြားပို့စ်တွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့. အဘယ်သူမျှမ, သူမဟုတ်ခဲ့. အဖြစ်ဆိုးရွားစွာကျွန်တော် George Zimmerman မိမိအသက်တာအတွက်နောက်ထပ်တရားမျှတကြောင်းဒါကြောင့်သူ့ကိုဖြစ်ချင်တယ်အဖြစ်, သူနေဆဲကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်. 17 အသက်အနှစ်ကလေးတစ်ဦးညီမျှ. သူစိုက်ပျိုးမခံခဲ့ရ. ဒါဟာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း polarization ကိုနှင့်လူမည်းများနှင့်လူဖြူနှင့်အတူဒါဝမ်းနည်းင်နှင့်ဤကဲ့သို့သောပြန်ထိုင်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အကိုမဆိုအသင်းအများဆုံးရမှတ်ကိုအနိုင်ပေးတက် racks. ဒါကပဲလွင်ပြင်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. Trayvon Martin ကအဖြူခဲ့နဲ့ George Zimmerman အနက်ရောင်ခဲ့ပါလျှင်, ငါနေဆဲယခုငါခံစားမိတူညီသောလမ်းခံစားရချင်ပါတယ်. သို့သော်ဝမ်းနည်းဖွယ်အမှန်တရား, George Zimmerman အနက်ရောင်ဖြစ်နှင့် Trayvon Martin ကအဖြူခဲ့, သူတစ်ရက်ဖမ်းဆီးင့်မယ်လို့၌ဤတစ်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်ဖြစ်ရပြီလို 1, မိမိအမြေပြင်ရပ်နေသို့မဟုတ်မနှင့်စီရင်ချက်အများဆုံးကျိန်းသေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောပါပြီမယ်လို့. သငျသညျငါတကယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူသည်များအတွက်ခံစားရချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဆန္ဒရှိမည်သည့်လူမှုမီဒီယာထွက်ပေါက်ပေါ်မှာငါ့ကိုမိတ်ဖွဲ့ဖို့အခမဲ့ခံစားရ; သို့သော်, ဤအချက်မှာ, ဒါဘယ်နေရာမှာမဆိုမသွားသောကြောင့်ငါပြန်နှင့်ထွက်အမှုကိုပြုတယ်. ငါသော်လည်းသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတန်ဖိုးထား.
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Marvin, သင်သည်သင်၏ပို့စ်များကိုဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်… ဆဲကစားရန်ကြိုးစားနေစဉ်သငျသညျအစအဦးအနေဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပါပြီ “တဘက်ဘက်မပါသော” ကဒ်. သငျသညျမုသာကိုသုံးသောနှင့်လူသတ် Zimmerman ကိုခေါ်ပြီးတော့တစ်ဦးအရပ်ဘက်စကားလက်ဆုံသူသည်သင်၏အဖြူအစ်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်. တဦးတည်းအဘို့, Zimmerman တစ်ဦးဟစ်စပန်းနစ်ဖြစ်ပါတယ်။. ငါတဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြူသမ္မတအိုဘားမားကိုပဌနာစကားကိုကွားဖူးဘူးနှင့်တစ်ဦးတည်းကဒီအချက်သည်သင်၏ဘက်လိုက်မှုကိုပြသ. အကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်စစ်မှန်တဲ့ပြဿနာဆင်ခြေဖုံးဆန့်ကျင်တကယ်အတွင်းစိတ်မြို့အခါမီဒီယာတစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲစစ်ပွဲသို့ဤမှုတ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ. subdivisions အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်အိမ်များသို့မဟုတ်န့်သတ်ထားထားပြီးလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအကြားလမ်းလျှောက်တူသောအချို့အပြုအမူတွေရှိပါတယ်. မဆိုရပ်ကွက်အတွင်းလက်ပတ်နာရီကိုလူတစ်ဦးကဒီလိုက်တယ်အပြုအမူဖြစ်တွေ့ပြီမယ်လို့. ထိုနောက်ဖြစ်ပျက်အဘယ်သူမျှမတဦးတည်းကောင်လေး မှလွဲ. ရှိခဲ့သည်နှင့်ဂျူရီအားလုံးအထောက်အထားကြည့်နှင့်သူ့ဇာတ်လမ်းကိုသူ့စီရင်ချက်မချရန်လုံလောက်သောတက်ကျင်းပကြောင်းအုပ်ချုပ်အဖြစ်အစဉ်အမြဲအခြေအတင်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်.
Marvin Lee က McManus • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:13 နံနက် •
Nathanial, ငါမည်သူမဆိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်. ငါရိုးရှင်းစွာအကြှနျုပျ၏ထင်မြင်ချက်များ shared. သူတို့ခွန်အားဖြစ်ကြ၏သော်လည်း, သူတို့သတ္တုတွင်းများမှာ. သငျသညျဆိုသညျကားရန်အဘို့အဒါဟာပိုပြီးသင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်
“သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြသည်တူသောငါခံစားမိ”. မှာအားလုံးငါကိုဖြတ်ပြီးလာပုံကိုသိရန်နှင့်ငါသည်ယောနသန်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ခဲ့ပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်များကွာခြားကိုမရှုထောကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်များပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေဆဲစကားပွော. ဘက်လိုက်မှု၏စကားပြောသော, ဥစ္စာကိုလည်းအလွန်သိသာဖြစ်ပါသည်. George Zimmerman ရဲ့ဟစ်စပန်းနစ်ဖြစ်ခြင်းကဒီပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်. မဟုတျကွောငျးသက်သေနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြပါဘူး? ကအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပြိုင်ပွဲအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအကြားပေါ်ပေါက်မပါဘူးဆိုရင်ပြိုင်ပွဲအပေါ်အခြေမခံတစ်ဦးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်? သမ္မတအိုဘားမားရဲ့အမွေအနှစ်ကဒီချည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြပါဘူး? အစဉ်မပြတ်ငါကသည်အဘယ်အရာသည်မိမိတိုင်းရင်းသားမိတ်ကပ်အသိအမှတ်ပြုပါတယ်. ဝမ်းနည်းစရာ, လို့သူ့အသားအရေရဲ့အရောင်၏သူ့ကိုအနက်ရောင်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်သောသူတို့အားရှိပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့, ငါ George Zimmerman မုသာကိုသုံးသောနှင့်လူသတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်, စစ်မှန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များနှစ်ဦးစလုံး. အဆိုပါဂျူရီတရားသေလွှတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုဖြစ်စေတဦးတည်းအယူမှားစေပါဘူး. ထိုနေ့၏အဆုံးမှာ, သငျသညျအိမ်မှာရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်သောအချက်အတိအကျကဘာလဲ? ငါမည်သူမဆိုတိုက်ခိုက်ခြင်းငါသော်လည်းသကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလျှင်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး. ငါသည်ဤချည်အပေါ်အခြားလူတိုင်းအတွက်ငါငါမသိသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ခြင်းများအတွက်အပြစ်တင်ခံရခြင်းမရှိဘဲရှိပါတယ်နည်းတူကျနော့်အမြင်ပြောဆိုရန်ခွင့်မပြုနော်?
pepjrp • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခငျသညျမနိုင်ပါလိမ့်မယ်, သင်မူကား, လူမျိုးရေးခွဲခြားသရုပ်ဆောင်ထားပါသည်. မာတင်အနက်ရောင်ကြောင့်သင့်အနေဖြင့်အမှုအတွက်အချက်အလက်များလျစ်လျူရှု. ဒါကသာအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်. မာတင်မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့ပျောက်ကွယ်ပြီးနောက် Zimmerman တိုက်ခိုက်ခဲ့. အဘယ်သူမျှမလူသတ်မှုဖြစ်ပျက်, ပြိုင်ပွဲရောင်စုံမျက်မှန် thru ဒီမြင်သောသူ 1000 ရဲ့ 10 ရဲ့များမှာသကဲ့သို့သငျသတငျးရနေကြတယ်.
Marvin Lee က McManus • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:15 နံနက် •
အဘယ်သို့ငါငါ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘဲ Hilary ဖြစ်ရှာတွေ့သငျသညျကိုတောင်ငါ့ကိုမသိဘဲငါ့အကြောင်းကိုတစ်ယူဆချက်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဤနေရာတွင်အခြားဘလော့ဂ်တွင် (Trayvon ပြီးနောက်, ဖလော်ရီဒါရဲ့အခြားသင့်ရဲ့မြေပြင်နှိပ်စက်ခံရသူရပ်များအတွက်တရားမျှတမှုရှိလိမ့်မည်?) Disqus အပေါ်, တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုခေါ်တော်မူ “nigger” အမြင်ငါ၏အမှတ်သူတို့ထံမှကွဲပြားလို့. ကျွန်မတုံ့ပွနျခဲ့? အဘယ်သူမျှမ. ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? ငါဘယ်သူလဲဆိုတာသိနှင့်ငါကိုယ်စားပြုအဘယျသို့သောကြောင့်. သငျသညျခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုလျှင်သကဲ့သို့သင်တို့ရေပန်းစားသညျဘုရားသခငျကိုရည်ညွှန်းကြောင်းငါ့ထံသို့ထညျ့ဒါဟာင်. ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, ငါရိုးရှင်းစွာသူကံကောင်းတဲ့အဲဒီညအသတ်ခံကတည်းက Trayvon Martin ကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်သတ်ဖြတ်ခံရဖို့ဆက်လက်ပါ၏. သူလည်းအနည်းငယ်အဖြူသည်ဆိတ်သငယ်ဖြစ်လျှင်ငါအတိအကျတူညီသောလမ်းခံစားရမယ်လို့နှင့် George Zimmerman အနက်ရောင်ခဲ့ကြသည်. ဒါဟာ၏ခေါ်ဆိုမှုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်. သင်မြင်တဲ့အတိုင်း, George Zimmerman လူအသက်ကိုသတ်သော. သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကစတင်ခဲ့သည့်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွါးမှုကိုနောက်ထပ်လူ့ရဲ့ဘဝ devalued. မည်သို့ပင်သည်မိမိ၏အပြစ်ခံရ “လူသားရဲ့” ဥပဒ, ဘုရားသခငျ၏တရားကပြောပါတယ် “ရမည်မသတ်”. သူဘာလုပ်ခဲ့လဲ? မြေတပြင်လုံးအခွအေနေတားဆီးခဲ့ကြနိုင်သည့်အခါသူအသတ်ခံရ. သင်သည်အဘယ်သို့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုခေါ်ငါ Trayvon ရဲ့ဘဝအပေါ်နေရာတန်ဖိုးအပေါ်အခြေခံပြီးကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ထက်ပိုပြီးအချည်းနှီးဖြစ်၏. ငါ George Zimmerman မှာရူးသွပ် Am, အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး, သူသည်မိမိတရားသူကြီးရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်. ငါရပ်သင့်မြေပြင်ဥပဒေမှာကမောက်ကမငါ, ဟုတ်ပါတယ်. ကအနက်ရောင်အမျိုးသမီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မပြုခဲ့ပါလျှင်, Marissa အလက်ဇန်းဒါး, အဘယ်သူသည်သူမ၏ခင်ပွန်းမှာသတိပေးရိုက်ချက်များပစ်ခတ်, နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးအတွက်ရလဒ် 20 သူ့အဘို့တစ်နှစ်ထောင်ဒဏ်, ဒါကြောင့်ဖြစ်စေ George Zimmerman ဖို့လျှောက်ထားခဲ့ကြမဖြစ်သင့်. သငျသညျအကြှနျုပျ၏အချက်အလက်များလျစ်လျူရှုသာသူလူမည်းကြောင့် Trayvon Martin ကိုခုခံကာကှယျအကြောင်းကိုဘာမှယူဆရန်အဘို့အကြှနျုပျကိုသင့်ရဲ့ဘက်လိုက်မှုနှင့်မွေးရာပါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်သင်၏ပြိုင်ပွဲ-based ယူဆချက်နှင့်ဆက်စပ်ပြသ. ဒါဟာသင့်ရဲ့အထင်အမြင်သေးအတွက်နောက်ထပ်သိသာင် “10ပြိုင်ပွဲရောင်စုံမျက်မှန် thru ဒီမြင်သောသူ 1000 ၏ 's”. သော်လည်းငါ့ကိုရယ်မောအောင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
pepjrp • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:16 နံနက် •
ငါတို့အန္တရာယ်လျှင်ခရစ်ယာန်များအကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်တစ်ဦးဘဝကိုယူခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်… ထိုသို့ Zimmerman ရဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ပုံ. ဒါဟာအစငျသညျ Zimmerman ကြောင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုမပေးမညျဖွစျကွောငျးပေါ်လာသော. ဒါကြောင့်အခြေပြု Race မပါရှိဘူးဆိုရင်, သို့ဖြစ်. အဘယ်သို့ငါတောင်းပန်, ဒါပေမယ့်သင်ကမပေးကြောင်းအလွန်နည်းပါး၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏. သို့သော်သင်သည်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါအွန်လိုင်းနှင့်အတူပြောပြီကြောင်းလုံးနီးပါးကိုအခြားသူများမဟုတ်ကြ, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုသင်လေးစားမှုကိုပေးမည်. ဒါပေမယ့်သင်ကမြင်နေသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်နားထောင်ခြင်းမပါဘဲအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအချို့ untruths ယုံကြည်ရှင်းပါတယ်. ငါ၏အတိုး။ လေးစေခြင်းအတွက်လာဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်. ငါတတျနိုငျသသကဲ့သို့ငါအဖြစ်အများအပြားအချက်အလက်များရရန်အချိန်သုံးစွဲသည်အထိငါမယုံကြည်မှုတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားခဲ့. ဒါဟာငါရှာဖွေတွေ့ရှိသောအရာကို surprising ခဲ့သည်. ယခု, ငါအများအပြားမှာ Zimmerman စီရင်ချက်ရှုံ့ချဖို့ Marissa အလက်ဇန္ဒားကိစ္စတွင်အသုံးပြုနေသည်သိမြင်. ငါသည်ဤတစျခုလုပျအဖြစ်ယခုငါကအကြောင်းသလောက်မသိရပါဘူး, ငါမူကားအလက်ဇန်းဒါးတစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သိလား3သူမဆင်းလှည့်နှစ်တွင်အသနားခံသဘောတူညီချက်. သေး, ငါမည်သူမဆိုရဲ့ပို့စ်များအတွက်တကယ်တော့ကိုဖတ်တော့မှ. သူမသွားကြောင်းအပြီးသူမထွက်ခွာသွားနှင့်ပင်ပြန် လာ. ရှိသည်ဟုနိုင်သက်သေခံချက်လည်းရှိပါသည်, ဒါပေမယ့်ငါသေချာသည်မသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကတရားစွဲဆိုမှုရဲ့အမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်. သို့သော် Trayvon Martin ကလည်းစွန်ပြန် လာ. ခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ဖို့ကြီးမားတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. အဆိုပါရန်ဖုန်းပေါ်မှာ Zimmerman ကပြောပါတယ်ဘယ်မှာမိနစ်ရှိခဲ့သည် 911 မာတင်သည်အဘယ်မှာရှိသူမသိရပါဘူး dispatch. ဒါပေမယ့်သင်ကသိရန်မကြိုးစားခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မသိ, သငျသညျပွုခဲ့? ငါ၏မှတ်ချက် “10ပြိုင်ပွဲရောင်စုံမျက်မှန် thru ဒီမြင်သောသူ 1000 ၏ 's” စစ်မှန်တဲ့ထက်ပိုအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိ. Zimmerman ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်သူကိုလူဖြူများများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လုံးဝနီးပါး Zimmerman ခံစားရသူကိုအဘယ်သူမျှမလူမည်းဒါကသင်လိုအပ်ရှိသမျှကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားအထောက်အထားပင်ဖြစ်သည်အပြစ်မဲ့ရှိစေခြင်းငှါနေကြတယ်.
Marvin Lee က McManus • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:16 နံနက် •
ငါ့ကိုမျက်နှာသာမကရပ်တန့်ပေးပါ. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်, သငျသညျ untruths ယုံအကြောင်းကိုကြိုးစားငါ့ကိုသင်ကြားဖို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့သိသင့်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် George Zimmerman ရဲ့ပါးစပ်ထဲကထွက် လာ. , အရာအားလုံးကိုအမှန်တရားခဲ့ယုံကြည်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်. ငါရှိသောကြောင့်နောက်တဖန်ကြောင်းမထိမည်မဟုတ်, သာဘုရားသခင်ကသူ့တရားသူကြီးဖြစ်ပါသည်. ပိုငျသညျဤအမှုနှင့် ပတ်သက်. ဘက်မလိုက်နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားအသံဖို့ကြိုးစား, ကရရှိသွားတဲ့အတွက်ပိုမိုဆိုးရွား. တဖန်, သငျသညျငါ့အဘို့ငါစကားကိုနားထောငျဘယ်လောက်ဤကိစ္စတွင်သိယူဆနုတ်ထွက်. ငါဖြစ်၏အလွန်ကောင်းစွာဖတ်ပါ, ပညာတတ်, ကိုယ်အဘို့စဉ်းစားနိုင်သူလည်းတစ်ဦးချင်းစီ, ဆိတ်ကွယ်ရာစိတ်ခံစားမှုကနေ. သင်၏အသက်တာအန္တရာယ်လျှင်ကပြောပါတယ်ရှိရာကျမ်းစာထဲမှာငါ့ကိုပြောပါ, သင်သည်အခြားတဦးတည်းယူနိုင်ပါသည်. ကိုယ်တော်သည်အတိအကျကြောင်းနည်းလမ်းမသတ်ရ. ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အခင်းဖြစ်ပွားရာအပေါ်မလာဖူးသောကြောင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ခဲ့ဟောင်းသေတမ်းစာသတ်ဖြတ်မှုများနှင့်ငါ့ကိုနှမြောကျေးဇူးပြုပြီး. အဆိုပါ Marissa အလက်ဇန်းဒါးအမှု, အရေးမပါဘူး, အသနားခံသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်မ, သူမကသူမ၏ဘဝကိုအန္တရာယ်ရှိကြ၏ခံစားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်, သူမကသူမ၏မြေပြင်ရပ်တည်ရန်နေ့စဉ်ညာဘက်ခဲ့. သငျသညျဗြောင်ကျကျလူမျိုးရေးခွဲခြား overtones သို့ချည်ထားသောဥပဒကိုထောကျပံ့ကြောင့်ခုခံကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်, နောက်တဖန်, မပေးကောင်းတစ်ဦးကြည့်. လည်း, သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုအန္တရာယ်လျှင်ကမျြးစာကိုညွှန်ပြခံစားရတယ်ဆိုရင်သင်ဟာအခြားတဦးတည်းယူနိုင်ပါသည်, သငျသညျဆေးပညာလိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းကိုယ်ဝန်ဖျက်ချအကြောင်းကိုဘယ်လိုခံစားရ. သိရန်ရုံစပ်စု. တစျဖနျ, ထိုနေ့၏အဆုံးမှာ, သင့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏နှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကြသည်မဟုတ်, သတ္တုတွင်းများမှာမ. သာကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်, စင်ကြယ်သောလူသားဆန်တဲ့ရှုထောငျ့မှမိုင်းရလဒ်, သင်တို့အဘို့ အကယ်. သင်ဤကိစ္စတွင်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်ခံစားရကြောင်းအမျက်ဒေါသနှင့်စိတ်ပျက်ထဲကရိုးရိုးများမှာ. ခြားနားချက်ကိုကြည့်ပါ?
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:16 နံနက် •
သင်ရုံသင့်ရဲ့မသိဘဲသို့မဟုတ်အသိပညာ့ယေဘုယျမရှိခြင်းပြသ… သင့်ရဲ့မြေပြင်ကိုတောင်ကာကွယ်ရေးအားဖြင့် Zimmerman အမှု၌အသုံးပြုသောဘယ်တော့မှခဲ့သည်ရပ်, သူကပင်ထိုတရားမရှိဘဲအပြစ်မဲ့ခဲ့သည်. ထို့အပွငျထိုတရားလျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်2သို့ 1 အခြားသောအာဖရိကအမေရိကန်များဆန့်ကျင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ဖို့အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေရဲ့မျက်နှာသာအတွက်လူဖြူပညတ္တိကျမ်းကို အသုံးပြု. ထက်.
Antoine Mason ဆို • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:17 နံနက် •
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:17 နံနက် •
Marvin Lee က McManus • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:18 နံနက် •
အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်သွား SYG ဥပဒဆန္ဒရှိချင်ဘယ်လောက်, တမင်ရည်ရွယ်ပြီးဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ရရှိလာတဲ့ဘာသာစကားအနီးကပ် SYG verbiage တူ. SO သီအိုရီ SYG မဖြစ်၏မခံခဲ့ရလို့, ဒီဆုံးဖြတ်ချက်၏အခြေခံမဟုတ်ခဲ့ဟုမဆိုလိုပါ. ထို့အပွငျ, သငျသညျအထောက်အထားသူတို့နှင့်အတူထ back နိုင်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်ငါ့ကိုသင့်ရဲ့စာရင်းဇယားနှမြောကျေးဇူးပြုပြီး. နောက်တစ်ခေါက်, သင်အမှန်တကယ် SYG အာဏာရနောက်ဆုံးရလဒ်အတွက်မဆက်ဆံကစားသည်ဟုယုံကြည်လျှင်သင်မသိဘဲနေသောကြောင့်, တစ်စုံတစ်ဦးကမသိဘဲကြောင်းယူဆချင်သည့်အခါသင်၏ဘာသာစကားစဉ်းစားပါ. ထိုသို့ဝေးသင့်ရဲ့တက်လုပ် stats အဖြစ်, အောက်ပါတို့မှတစ်ခုခုကိုဖတ်ရှုပါ…
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:22 နံနက် •
သင်အမှန်တကယ်ပဲကျပန်းဘလော့ဂ်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲ post ခဲ့ပါ?
ကာကွယ်ရေးအောင်မြင်စွာ 55 ထိုအချိန်ကာလ၏ရာခိုင်နှုန်းကို, အဆိုပါကဲ့သို့တူညီသောနှုန်း
အဆိုပါ Tampa Bay က Times သတင်းစာကထိန်းသိမ်းနေတဲ့ဒေတာဘေ့စတဲ့နေ့စဉ် Caller ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်နှင့်အညီ. ထို့အပြင်, ဖလော်ရီဒါအတွက်သားကောင်များ၏အများစုအမှုပေါင်းအဖြူပါပြီ "သင်၏မြေပြင်ရပ်".
အာဖရိကန်အမေရိကန်များဖလော်ရီဒါလူဦးရေမှာသူတို့ရဲ့ရှိနေခြင်းမှာနီးပါးနှစ်ကြိမ်နှုန်း "သင်၏မြေပြင်ရပ်" ကာကွယ်ရေးကိုအသုံးပြု, မှာစာရင်းဝင်ခဲ့သော 16.6 ရာခိုင်နှုန်း 2012.
ထို့အပွငျ, ကိုယ့်အတွက် New York မှာနေတဲ့အမှု၏ကိုဖတ် 2009: http://rochester.ynn.com/content/top_stories/490926/jury-finds-roderick-scott-not-guilty/
Marvin Lee က McManus • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:22 နံနက် •
သငျသညျကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျးမှားဖို့မကြိုက်ဘူးထက်တခြားခဏသင့်အကြောင်းဘာမှယူဆဖို့မသွားငါနှင့်သင်လည်းအငြင်းပွားဖွယ်ဥပဒခုခံကာကွယ်ဖို့ကိုချစ်. သင်ကဝန်ခံသို့မဟုတ်မနှင့်သင့်ဇာတ်ကြောင်းကိုထောက်ပံ့သောကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များရှာဖွေချင်တယ်ရှိမရှိ, မည်သူမဆိုလုပ်နိုင်အဖြစ်, SYG ဥပဒေများ, ဤကိစ္စတွင်အတွက်သို့မဟုတ်မမဖြစ်၏ရှိမရှိ, built-in ပါပွီလူမျိုးရေးမညီမျှမှု. ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူဤဟောပြောချက်ဆက်လက်၏လုံးဝရည်ရွယ်ချက်ရှိ. အဘယ်ကြောင့်? သငျသညျကိုမေးစေခြင်းငှါ. ဒါဟာလုံးဝဘာမျှမပြီးမြောက်မယ့်. သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောင်းလဲသွားမသည်ငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏မဟုတ်ပါ. ငါမနိုင်ဒါမှမဟုတ်သင်လေးစားကြဘူးဆိုလိုကြောင်းမ? အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး. ဒါဟာငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအသေမြင်းရိုက်နှက်ငြီးငွေ့ဖြစ်၏ဆိုလိုတယ်. မြို့ပြဟောပြောချက်အမှန်တကယ်ဤလူမြိုးချို့တဲ့ရသောအမှုသည်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဤငါတို့ဘုရားသခင့အောက်မှာတမျိုးတည်းဖြစ်ဖြစ်ဘို့အလို့ငှာသွားကြဖို့ရှည်လျားသောလမ်းရှိသည်နောက်ထပ်သက်သေဖြစ်ပါသည်. ငါသူ၏မေတ္တာသည်သင်၏စိတ်နှလုံးကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်သတ္တုတွင်းနှင့်ဤဘလော့ဂ်အပေါ်သို့ထိ မိ. လဲစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်အခြားမည်သူမဆိုစိမ်ဆုတောင်းပဌနာ. အလွန်ကြီးစွာသောညနပေိုငျးဖူး.
ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့တုံ့ပြန်မှု skirted တွေ့မြင်. ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာဘုရားသခင်သည်သင်၏ဖယ်ရှားပေးသင်တို့အဘို့ဆုတောငျးမညျ “လူမျိုး” သင့်ရဲ့အငြင်းပွားမှုများကိုထိခိုက်ကြောင်း blinders. ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအမြဲအခြားသူများကိုဦးတည်အားလုံးလူမျိုးထဲကနေမတည်ရှိပါလိမ့်မယ်ကိုသိပေမယ့်အဲဒီမှာပြိုင်ပွဲကျော်လွန်ပြောင်းရွှေ့ပြီထွက်အချို့ရှိလူဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရှိသမျှသောအဖြစ်အပျက်အမြဲအသားအရေရဲ့အရောင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့မရှိပါဘူး. သက်သေအထောက်အထား Zimmerman တစ်ရာဇဝတ်မှုများ၏အပြစ်ရှိခဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါထောက်ခံခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခုနီးပါးအားဖြင့်အကြီးအကျယ်သြဇာလွှမ်းမိုးထားပြီးသူမည်သူမဆိုနဲ့အတူငြင်းခုန်အားဆက်လက်ဦးမည် 100% အတွင်းကြည့်ရှုဆွဲသူတို့ကိုပိုပြီးငွေရှာအဖြစ်၎င်းတို့၏ Anti-သေနတ်အစီအစဉ်တွန်းမယ်လို့တစ်ခုခုသို့ဤပုံပြင်ကိုဆေးထိုးခြင်းမှမှားယွင်းသောစိတ်ရင်းနှင့်အတူအဖြူရောင်မီဒီယာ. သူတို့ဟာဗွီဒီယိုကို doctored, အသံတိပ်ခွေများနှင့်အခြားဇာတ်လမ်းများအာဖရိကအမေရိကန်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတက် rile ဖို့နဲ့ကိုယ်ကတစ်ဦးလုပ်ကြံထင်တယ်. ငါ Zimmerman အသရေဖျက်မှုနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဘို့မိမိတို့ဘောင်းဘီကိုချွတ်တရားစွဲမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
Marvin Lee က McManus • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:23 နံနက် •
သင်ငါကိုင်ထားသည့်ထင်မြင်ချက်များကိုကိုင်ထားသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ယူဆနေချိန်တွင်ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျ၏မကျြစိကိုမှအပြေးပြိုင်ပွဲ blinders ဖယ်ရှားပေးဆုတောငျးလကျြနေစဉ်, ဆုတောင်းပဌနာဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့မျက်နှာကျက်အတိတ်လုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်ကျေးဇူးပြုပြီး. ငါအမှနျ reply ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားမိခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကျွန်မစိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်ဘယ်မှာအကြောင်းပြောနေတာဖွင့်အဘယျသို့အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်သည့်အခါငါသည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်မှု skirted. သင်သည်မေတ္တာတရားကိုတစ်ဦးဆုတောင်းပဌနာမွှေပါနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအားလုံးကိုမုန်းလို့မရဘူး. သင့်ရဲ့ယူဆချက် Trayvon Martin ကအနက်ရောင်ကြီးနှင့်ငါပြုမည်လမ်းကိုရှင်းလင်းစွာမှားယွင်းနေသည်ဟုခံစားရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ရုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်း. ငါရှိသောကြောင့်ထိုနေ့၏အဆုံးမှာသင်၏သို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုမည်သည့်နောက်ထပ်ကြောင်းထင်မြင်ချက်ခုခံကာကွယ်ဖို့မသွားပါ၏, သင်ဆဲသင်ပြုသောလမ်းခံစားရနှင့်အကြောင်းခွေုံဖြစ်သွားကြသည်. သင်ပင်ဉာဏ်ပညာကိုက George Zimmerman ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာညဦးယံအချိန်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့ဘုရားပေးကျောင်းအုပ်ကြီးကြောင်းကိုသင်သည်ကိုယ်အဘို့ကိုသိရတဲ့အခါမှာသင်သောလမ်းကိုဖြတ်ပြီးလာရန်ကြိုးစားရန်အဘို့အဒါဟာယုံကြည်သူအဖြစ်စော်ကားင်, ကြှနျုပျတို့သညျဤဆွေးနွေးမှုရှိခြင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူး. သငျသညျငါ့မိတ်ဆွေကိုတွေ့မြင်, စာတနျကိုသွေးခွဲရန်ကြွလာ, သူဆက်ဆက်ဤကိစ္စကိုနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်. လူငယ်တစ်ဦးသည်လူရဲ့ဘဝခေါ်ဆောင်သွားကြောင့်ငါသည်ငါ့ထင်မြင်ယူဆကိုင်–point-blank, PERIOD! သငျသညျငါအနက်ရောင်နှင့် Trayvon Martin ကိုဖြစ်ကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနက်ရောင်ကြောင်းယူဆအတွက်ဒါကျဉ်းမြောင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းပါပဲဆိုတဲ့အချက်ကို, ငါသည်ဤလမ်းခံစားရတယ်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်ဝတ်ထားပါတယ်နေချိန်မှာပြိုင်ပွဲ blinders ငါ့မျက်စိကနေဖယ်ရှားခံအကြောင်းပြောဆိုရန်အဘို့အကြှနျုပျကိုမှရယ်စရာကောင်းသောဖြစ်ပါသည်. အဲဒီအစားတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်ဆုတောင်း, သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့စတင်ရန်သညျဘုရားသခငျကိုမေးချင်ပေလိမ့်မည်. သူသည်သင်ထုတ်ဖော်ပြသသောအရာကိုမှာသင်ကတအံ့တသြစေခြင်းငှါ.
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:23 နံနက် •
သင်၌ဆုတောငျးလနဲ့စတင်, ဒါနှင့် ပတ်သက်. ဆုတောင်းရန်အဘယ်သို့သောအကြောင်းငါ့ကိုသင်ကြားကြဘူး. ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်နှလုံးစစျဆေးဖို့လိုအပ်စဉ်းစား, ငါသည်ဤကိစ္စတွင်အဖြူပေါ်တွင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ပေါ်တွင်အနက်ရောင်ခဲ့လျှင်ဒီကဒေသခံသတင်းအတိတ်နှင့်လူအများစုရဲ့စိတ်ထဲသို့ရာ၌ခန့်ထားပြီမယ်လို့သံသယဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုခဲ့သိသာခဲ့သည်. သင်အချက်အလက်များရင်ဆိုင်ရချင်ကြပါဘူး အကယ်., သင်၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့် hoody ဝတ်ထားအဖြူရောင်ဆယ်ကျော်သက်သေနတ်နှင့်လုံးဝအားလုံးစွဲချက်အပေါ်အပြစ်ရှိကြောင်းမတှေ့ခဲ့သူနယူးယောက်ရှိအနက်ရောင်သည်လူအပါအဝင့်အမြင်ကိုထောက်ပံ့သောအမှုများစွာရှိပါတယ်. တက်ဖေါ်ပြခြင်းမရှိ, အမျိုးသားရေးမီဒီယာရှိခဲ့သည်, ဆန္ဒပြပွဲများတောင်းဆိုမျှအဖြူပြိုင်ပွဲ baiters. ဤဇတ်လမ်းမာတင် Zimmerman ငါသည်လည်းသင်တို့၏အမြင်များအများအပြားထောကျပံ့ပေးလိမ့်မည်ဟုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးမည်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်ဒုတိယမာတင်သူ Zimmerman မှအပြစ်ပြုနှင့်လမ်းဘေးဆန့်ကျင်သူ၏ဦးခေါင်းကိုရိုက်နှက်နှင့်သူ၏မျက်နှာကိုလာကြတယ်သွားခဲ့ပါသည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, သူကသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရဖို့သူ့ကိုယ်သူထူထောင်. ကာလ။. ဇာတ်လမ်း၏အဆုံး… ပြိုင်ပွဲကိုထုတ်ပစ်ခြင်းနှင့်သောလွင်ပြင်နဲ့ရိုးရိုးအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်.
ဝိုး. ဒီတိုင်းပြည်အတွက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအပြေးပြိုင်ပွဲဆက်ဆံရေးနေဆဲအံ့သြစရာမဟုတ်ပါရှိပါတယ်. ဒါဟာငါထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်ဘယ်လိုကပြောသည်သို့မဟုတ်င့်သောအရာကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စသိသာထက်ပိုဖွင့်, သငျသညျအကြှနျုပျ၏တုံ့ပြန်မှုနှင့်ငါ့ခံစားချက်တွေကိုယဘေုယမှအကြောင်းအရာများဖြစ်ကြသည်. သူကပြောပါတယ်ဘဲလျက်, သင်၏ပဌနာအချိန်ကိုခံစားခြင်းနှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအသက်ကို. ငါကအခြားအခြမ်းပေါ်တွင်သင်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
နီကိုးလ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:24 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောလူမှုရေးမတရားမှု defining အတွက်လက်ကျန်ငွေရရှိသဘောတူ. သို့သော်, သူဟာလူမျိုးရေးအမှတ်အသားကိုအသုံးပြုတော်မူရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်အနက်ရောင်ယောက်ျားလေးများအပေါ်တောင်းဆိုတဲ့သမိုင်းရှိပါတယ်ရှိရာအစဦး၌အသံရှိ၏. ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းသောအချက်မကျမည်အကြောင်းဒါပေမယ့်ဖြစ်ပါသည်.
jonathansampson • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:24 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
နီကိုးလ်, ဂျော့ခ်ျကသူ့ကိုတစ်ဦးကိုခေါ် “goon,” နှင့်တစ်ဦး “f * cking ပန့်ခ်။” Jeantel အဆိုပါရပ်တည်ချက် ယူ. နေချိန်မှာသူမက Trayvon နှင့်အတူဖုန်းပေါ်မှာဖွစျကွောငျးကိုသက်သေခံကြသောအခါမည်သည့်လူမျိုးရေးစကားလုံးများ၏တစ်ခုတည်းသောသက်သေအထောက်အထား လာ. ,, Trayvon ဂျော့ခ်ျတစ်ဦးကိုခေါ် “creepy မြည်းကို cracka,” နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦး “nigga”.
ဂျော့ခ်ျဆရာ (အနည်းဆုံးနှစ်ခု) အနက်ရောင်ကလေးတွေ, ကျောင်းကပွဲတစ်ခုအနက်ရောင်မိန်းကလေးယူ, ပင်ရပ်ကွက်အတွင်းလက်ပတ်နာရီကိုသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ၌မိမိရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူမည်းများ၏ထောက်ခံမှုခဲ့. Trayvon လူမျိုးရေးအရ profiled ခဲ့ကွောငျးလုံးဝသက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည်, သို့မဟုတ်ဂျော့ခ်ျလူမျိုးရေးခွဲခြားကြောင်း.
pepjrp • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်သည်သင်၏ပစ္စည်းပစ္စယကိုသိရအဖြစ်ဂရိတ်အလုပ်. အရမ်းဆိုးမှသာရှိပါတယ် 1 သငျသညျ Bean နှင့်နီကိုးလ်နှင့်အတူလုပ်ခဲ့တယ်တူသောဤအမှု၌အမှန်တရားအပေါ်ပညာပေးထွက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အနက်ရောင်လူများသန်း. ဤမျှလောက်များစွာသောပြိုင်ပွဲမုန်းတီးမှုယုံကြည်ချင်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းအတွက်လုံလောက်သောကြောင့်ပြန့်နှံ့လို့မရဘူးဘယ်လောက်အံ့သြဖွယ်.
ပဲ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟမ်။. ငါကထင် “coon” goon မဟုတ်. ဒါကလူမျိုးရေးအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်.
ယခုမည်သို့ပင်ဖြစ်စေဤအမှုအဘယ်အရာကိုမ? ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ့်တဖန်သာရှုမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်များအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်?? ငါသည်ဤဖိုရမ်တွင်လဲလှယ်အပေါ်မည်သူမဆိုကြည့်ဖို့သေးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအရာတစ်ခုခုများ.
jonathansampson • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဆိုပါဆွေးနွေးငြင်းခုံ coon နှင့် goon အကြားခဲ့ - က c ၏ခြားနားချက်နှင့်ဆ. အကြမ်းအားဖြင့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု၏ဂျော့ခ်ျရဲ့မိတျဆှေ (နှင့်အနက်ရောင်, ကြောင်းအရေးပါလျှင်) အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းခဲ့သည်ထင်၏ “goon,” သူကသူတို့ရဲ့ 40 ရဲ့ထက်အသက်ငယ်ဘယ်သူ့ကိုမှသို့မဟုတ် 50 ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုမကြားထားပါတယ်ဖျော “coon” တစ်လူမျိုးရေးအမှတ်အသားအဖြစ်. ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတစ်ဦး derogative အဖြစ်အသုံးပြု coon မကြားဘူး; ငါသာအစဉ်အဆက်ကရက်ကွန်းဝံတစ်ဦးကိုကိုးကားအဖြစ်အသုံးပြုကြားဖူးတယ်.
သငျသညျအခြားအရာအားလုံး၏အလငျး၌ဒီတစ်ခုစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးအသံကလစ်ဆန်းစစ်လိုက်တဲ့အခါ, ဒါကြောင့်သူကပြောသည်ပိုသဘာဝကျပါတယ် “goon”. နောက်ဆုံးတော့, ဂျိုးမှာ Oliver (ဂျော့ခ်ျရဲ့အနက်ရောင်မိတျဆှေ) ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းသူဂျော့ခ်ျလူမျိုးရေးခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုမယ်လို့ဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးကပြောသည်. ဂျော့ခ်ျကျောင်းကပွဲတစ်ခုအနက်ရောင်မိန်းကလေးယူ, နှင့်လူငယ်လူမည်းကလေးများနည်းပြ. သူကသူတို့ရဲ့အသားအရေအရောင်များ၏အကောင့်ပေါ်မှာသူထက်လျော့နည်းအဖြစ်တခြားဘယ်သူ့ကိုမှရှုမြင်ကြောင်းမျှအရိပ်အယောင်ရှိပါတယ်.
ချာ့ချ်ကလူအပေါငျးတို့သကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုတက်လုပ်ထားသောကြောင့်ဤအငြင်းအခုန်ကအရေးကြီးတယ်, အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်. ဤကဲ့သို့သောထိုသို့သောကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်းမြင်နိုင်ခန္ဓာကိုယ်၌ကြီးသောကွဲပြားခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်, နှင့်ကဲ့သို့သောငါတို့ရှိသမျှသည်သမ္မာတရားကိုထွက်အလုပ်လုပ်စိတ်ဝင်စားဖြစ်သင့်၏, အကြောင်းပြချက်နှင့်သက်သေအထောက်အထားအပေါ်အခြေခံပြီး, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်အဖြစ်ဒါ.
အဘယ်သူမျှမ, သူကအအေး fu **** ဆကပြောပါတယ်. Google က. အသံကိုနားထောင်. အက်ဖ်ဘီအိုင်ကဆိုပါတယ်ခဲ့ရာခဲ့ဖော်ပြထား. မာတင်တို့ကလွဲပြီးဘယ်သူမျှမလူမျိုးရေးခွဲခြားစကားလုံးများရှိခဲ့သည်.
Antoine Mason ဆို • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျ Trayvon လူမျိုးရေးခွဲခြားတစ်ခုခုကဆိုပါတယ်ရှိရာအသံများ? ငါကြားချင်ပါတယ်.
pepjrp • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:26 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးမုသာကိုသုံးသောရာခေလသည် Jeantel တောင်းဆိုနေကြပါတယ်? သို့မဟုတ်သင်သူမ၏သက်သေခံချက်လက်လွတ်ခဲ့ပါ?
ပဲ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:26 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီတစ်ခါလည်းသူထို့နောက်လူမျိုးရေးသက်တမ်းမပြောခဲ့ပါဘူး. ငါသည်သူ၏စိတျထဲတှငျအဘယျမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ Zimmerman တစ်လူမျိုးရေးခွဲခြားခဲ့စဉ်းစားကြဘူး. သူဟာသို့သော်လုပ်ခဲ့တယ် “လူမျိုးရေးအရပရိုဖိုင်းကို” Trayvon. ထိုအကွောငျးရငျးမြားစှာအတှကျသူ့ဟာသူအတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်…
ထို့ကြောင့်, ကျနော်တို့ကိုဆွေးနွေးရန်လိုအပ်ပါတယ်…1. ကြှနျုပျတို့မညျသို့အနက်ရောင်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ရာဇဝတ်မှုနှုန်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ကြဘူး? ဤမျှလောက်များစွာသော၎င်း၏တစ်ဦးဆိုသည့်အတိုင်းလူတွေတောင်မှဒီအကြောင်းဘာမှလုပ်ဖို့ဂရုမစိုက်ပါနဲ့ “အနက်ရောင်” ပြဿနာ? 2. ကျွန်တော်တို့ဟာအရောင်အပေါ်အခြေခံပြီးအချို့ကျပုံစံသို့လူတွေကို pigeonholing ကိုဘယ်လိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်? ဒါဟာမီဒီယာ Is? အဘယျသို့သောဤစာရင်းဇယားနှင့် ပတ်သက်., တကယ်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? 3. ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပိုပြီးစည်းလုံးနိုင်ပါတယ်? မြင်ကွင်းတစ်ဦးချင်းစီကိုအခြားသူများမှတ်ကိုကြည့်ပါ? ဒီတစ်ခါလည်းလူတွေကိုသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဆွေးနွေးရန်ဘယ်မှာပိုပြီးဖိုရမ်များရှိ?
ငါဆွေးနွေးမှုရှိသည်ဖို့လိုခငျြ, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတိုက်ခိုက်နေကိုကူညီမယ့်မဟုတ်ပါ. ကဲ့ရဲ့ပေါ၏အချက်ဆိုတာဘာလဲ? အဆိုပါ 1960 အထိဆောင်ခဲ့. အဆိုပါတချို့မျှတမှုအဖြစ်အနက်ရောင်ရာဇဝတ်မှုနှုန်းပေါ်အနက်ရောင်ထွက်ညွှန်ပြ။. အဘယ်ကြောင့်လူတွေဒီလုပ်နေတာ? ကိုယ့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ညှဉ်းဆဲ?
ခရစျယာအဖြစ်, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဤကဲ့သို့သောခက်ခဲအခြေအနေများ၌စည်းဝေးကြမှမည်သို့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်? ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုမျက်စိထဲကအစက်အပြောက်ကောက်မယရှေု၏ဥပမာကိုသုံးနိုင်သည်- ဒါပေမယ့်ကိုယျ့ကိုယျကိုဆနျးစစျအကြှနျုပျတို့သညျဤလောက၏ပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်ဖြစ်စေကြောင်းကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအားလုံးလုပ်နေကြပါလျှင်မေးရန်?
pepjrp • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:27 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မှားယွင်းနေနီကိုးလ်… ပြိုင်ပွဲ hustlers နှင့်လစ်ဘရယ်မီဒီယာများကပိုပြီးမုသာစကားနှင့်တိ. ဒါဟာအလွန်များလူမည်းယုံကြည်ဖို့ပျော်ရွှင်ထက်ပိုသမျှသောမုသာစကားကိုတရားလှနျဖို့အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်. နီကိုးလ်, သင်အချက်အလက်များမသိရပါဘူး. သူတို့ကိုလေ့လာသင်ယူ ကျေးဇူးပြု..
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:27 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
နီကိုးလ်, သင်ရုံးတင်စစ်ဆေးကိုနားထောင်ခဲ့ဘူး? တစ်ခုတည်းသောလူမျိုးရေးစကားလုံးများဖုန်းပေါ်မှာသူ့ကိုစကားပြောခဲ့တဲ့သူ့မိတ်ဆွေသည်နှင့်အညီမာတင်၏နှုတ်ထဲကလာမယ့်ခဲ့သည်.
lewrites • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:27 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ပထမဦးစွာပယ်, ငါမမလေးစားတဲ့ဆိုလို…ငါအမေရိကန်ဇာတိ / အဖြူရယ်. သို့သော်လည်းငါသည်သာအစဉ်အဆက်ကြားဖူးတယ် “goon” အနက်ရောင်လူတွေကိုရည်ညွှန်းအတွက်. ထိုသို့ဝေးယောနသန်သည် Thompson ကပြောနေဘာအဖြစ်…သူတို့ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကြားနှင့်အနက်ရောင်လေးတွေဆရာသူတွေကိုလူသိများပါတယ် “civilize” သူတို့ကိုသို့မဟုတ်ပဲသူတို့အခြားပြိုင်ပွဲကူညီခြင်းဖြင့်နေ့ကို၎င်းတို့၏ကောင်းသောလုပ်ရပ်လုပ်ချင်သောကွောငျ့.
ငါမာတင်ဟုသူကပြောသည်ဘယ်သို့ဆိုမှညာဘက်ခဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး. ဝေးကနေ. ငါနှစ်ဖက်စလုံးကဤကိစ္စတွင်အတွက်မှားယွင်းတဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ထင်နှင့်ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ကအမှန်တရားကိုသိကြလိမ့်မည်မယုံကြည်ကြဘူး. နောက်ဆုံးတော့, ကလူအများကြီးကိုလူတိုင်းကသူတို့ဇာတ်လမ်းကိုယုံကြည်အောင်နေဖြင့်လူသတ်မှုနှင့်အတူကွယ်ပျောက်ရနိုင်ပါပြီ…ယောက်ျားတစ်ယောက်တစ်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူဦးကိုသူ့အဘို့နှင့်အိပ်ကြ၏သူ့ကိုစှပျစှဲမှနျကနျကွောငျးရာခခြေကျြပေးရတယ်သောငါ၏အအိမ်ပြန်ပြည်နယ်အတွက်အမှုရှိခဲ့သည်. နောက်ဆုံးတွင်လူအထွက် လာ. ထိုအမှန်တရားပြောပြခဲ့ပါ, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုသူအပြစ်ခံခဲ့ရလို့ပြောနေတာနဲ့လူကသူ့ကိုအကြောင်းကိုဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပစ္စည်းပစ္စယသူတို့မရိုးမသားဖြစ်ခြင်းမဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါကပြောပါတယ်. ငါသည်လည်းသူမရိုးမသားဖြစ်ခြင်းခဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, ဖြစ်စေ.
ကြှနျတေျာ့အိမျပွပြည်နယ်အတွက်နောက်ထပ်အမှုညီလာခံ၌အခြားသောကျောင်းနှစ်ခုယောက်ျားတွေအားဖြင့်အသေသတ်ခြင်းကိုရိုက်နှက်ခံရမယ့်ဘောလုံးကစားသမားပါဝင်. မျက်စိသကျသခေံအကောင့်နေသော်လည်း, အဲဒီနှစျခုအမြိုးသားတစျဦး Scott အခမဲ့ချွတ်တယ်, အခြားတဦးတည်းလူသတ်မှုများအတွက်အသနားခံသဘောတူညီမှုရနိုင်ခဲ့တယ်. သူသည်မိမိနောက်ကျောကသူတို့ကိုလှည့်ခဲ့စဉ်ကလူသည်ဤနှစ်ခုသည်လုလင် sucker ဒီကောင်လေးလာကြတယ်မျက်မြင်, သူသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်ခဲ့သေးပါဘူးသူတို့ကသူ့ကိုရိုက်နှက်ဆက်လက်, သတိမေ့သော, သူတို့ကဒီတခါကြားနေရသည်ကြားလျှင်ထို့နောက်သူတို့ခွဲ. ထိုအခါသူတို့ကိုတစ်ဦးလမ်းလျှောက်ဖို့စီမံ.
တရားစနစ်ကြီးမားပေါက်တွေရှိပါတယ်, တစ်စုံတစ်ဦးကတရားသေလွှတ်ဖြစ်ပါတယ်ရုံဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအပြစ်မဲ့နေမဆိုလိုပါ. သို့သော်ငြားလည်း, နောက်ပိုင်းမှာအပြစ်မဲ့ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်ကြောင်းအပြစ်ရှိကြောင်းသက်သေပြခြင်းနှင့်ပင်ကွပ်မျက်ခံရသူကလူအများကြီး. သာလူနှစ်ဦးထိုညဉ့်ဖြစ်ပျက်သေချာဘို့အသိရကြ
jonathansampson • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အစဉ်အမြဲငါမကြားဘူး “goon” အနက်ရောင်ကလူများအတွက်လူမျိုးရေးအမှတ်အသားအဖြစ်အသုံးပြု. ရုံမြို့ပြအဘိဓါန်စစ်ဆေးပြန် သွား. ၎င်း၏ထိပ်တန်းအဓိပ္ပာယ်မဆိုအတွက်ပြိုင်ပွဲဖော်ပြမထင်ထားဘူး.
တစ်ဦးက “Goon” စကားမပြောနိုင်သောတစ်စုံတစ်ယောက်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ကြီးမားသော. မာဖီးယားခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပေးပို့စေခြင်းငှါ, “goons” အထဲကသူတို့ရဲ့လေလံလုပ်ဖို့. ရုံငါအင်္ဂလိပ် check လုပ်ထားနှံ့နှံ့စပ်စပ်ဖြစ်, ထိုသို့လည်းမဆိုလူမျိုးရေးအသင်းအဖွဲ့များစာရင်းပြုစုမထားဘူး. သင်္ဘောသားက attributes, ကြွက်သားတစ်ဦးချင်းစီ, နောက်ပိုင်းတွင်သမိုင်းအတွက်သက်ငယ်ပြစ်မှုမှ.
သငျသညျခငျြသောကွောငျ့အဘယျသို့ငယ်ရွယ်အနက်ရောင်လေးတွေလမ်းညွှန်သင်ပြအကြောင်းကိုသင့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကြောင့် “သူတို့ကို civilize,” ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြိုတင်စီရငျခကျြအပျေါအခွခေံလူတွေကစိတ်ရင်းမယူဆနိုင်သည် - ကရိုးရိုးတရားမျှတမယ့်. ဂျော့ခ်ျအနက်ရောင်ကလေးများနည်းပြ အကယ်., ငါသည်သူ၏စိတျအပိုငျးအပေါ်အချို့သောထောက်ပံ့ငွေပူးပေါင်းကြံစည်မှုယူဆစရာအခြေခံများ, သူအမှန်တကယ်သူတို့ကိုဂရုစိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဖွင့်ယူဆရန်ရှိသည်.
အဆိုပါ Zimmerman အမှု၌အောက်ဆုံးလိုင်းအထောက်အထားဂျော့ခ်ျအောက်ဆုံးအပေါ်ခဲ့တာကိုပြသသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. Travyon ရဲ့လက်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှုပ်နေခဲ့သည်ခဲ့ကွောငျးကိုပြသ. ဂျော့ခ်ျရဲ့ဦးခေါင်းကိုဆိုးဆိုးရွားရွားနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှင့်ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်. သူကပင်ရှေ့နေရှိခြင်းမတိုင်မီသမဝါယမခဲ့သည်, ပင်ဖြစ်ပျက်ပွနျလညျသရုပျမှရဲထွက်တာ. detect ထပ်ခါထပ်ခါသည်သူ၏ပုံပြင်ကို ယူ. ,, အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်, လှည့်စားခြင်းနှင့်ကိုတွေ့သောသူတစုံတယောက်မျှ၏အရိပ်လက္ခဏာကိုရှာဖွေနေ. တိုင်းအတိုင်းအတာဖြင့်ဂျော့ခ်ျကြီးမြတ်ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်မှုများအတွက်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပုံ, သို့မဟုတ်သေသည်တိုင်အောင်. ကျနော်တို့မဟုတ်ရင်အကြံပြုစရာအခြေခံများ.
ငါကလူကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုနှင့်ဝေးရသဘောတူ, အခြားလူများမတရားပြစ်မှုအပြစ်ပေးနေစဉ်သူတို့မကျူးလွန်ခဲ့ဘူး. ငါဟောင်းဂျော့ခ်ျသက်ဆိုင်စဉ်းစားကြဘူး; အထောက်အထားအပေါ်အခြေမခံ. လူဖြူများနှင့်လူမည်းဖြစ်စေတဲ့လုံးသူ့ကိုအသေသတ်ခြင်းကိုဆန္ဒရှိမှ - သို့သျောလညျးငါအခုသူကမ္ဘာကြီးဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားအဖြစ်သူ့ကိုဖျောစဉ်မိမိကိုမိမိနဲ့သူ့မိသားစုကိုကာကွယ်ရန်ဖျောက်ရန်ရှိခြင်းကြောင့်အဆုံးစွန်သောမထင်ကြဘူး.
စနစ်ထဲမှာတွင်းရှိပါတယ်; ကြောင်းငြင်းခုန်မည်မဟုတ်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မတရားဖမ်းဆီးသူတို့အားတွင်း၏ရလဒ်အဖြစ်မည်သည့်ရလဒ်ကိုရသည်ဟုအဘို့အဘယ်သူမျှမအခြေခံများ – မဟုတ်အထောက်အထားအချို့ကိုအမျိုးအစားမပါဘဲ, သို့မဟုတ်အစိုင်အခဲဆင်ခြင်ခြင်း. ဤကိစ္စတွင်အတွက်အရာအားလုံး, ကျနော်တို့စိစစ်ရေးလမှတဆင့်ခဲ့ဖူးတဲ့အချက်အလက်များ၏အားလုံး, ဂျော့ခ်ျထိုညဉ့်အကြောင်းကိုရိုးသားခဲ့အကြံပြု. မျက်စိ-သကျသခေံသက်သေခံချက်သည်သူ၏ပုံပြင်ကိုထောကျပံ့. နားသကျသခေံသက်သေခံချက်သည်သူ၏ပုံပြင်ကိုထောကျပံ့. အဆိုပါအချက်အလက်များသည်သူ၏ဇာတ်လမ်းနှင့်ကိုယ်ကို misalign ပါဘူး. ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ, အကြောင်းပြချက်လေးစားမှုထဲက, ဘုရားသခင်အဘို့မဆိုထပ်မံထင်ကြေးများနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုကြိုတင်ယူထား.
သငျသညျအပွစျမဲ့အသေသတ်ခြင်း၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အမှုကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်, ယောဟနျသ Spooner ထက်မထပ်မံကြည့်ရှု. မိမိအ 70 ရဲ့တစ်ဦးကလူကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျယ်ပြန့်နေ့အတွက်နှစ်ကြိမ်လူငယ်တစ်ဦးအနက်ရောင်ကလေးကသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်. သိမှတ်ကြလော့ “အဖြူအခွင့်ထူး” သူ့ကိုကာကွယ်ပေးမည်မဟုတ်, သူကစိတ္တဇတောင်းပန်တက်အနာ. ဒါကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများအတွက်ကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာပါလိမ့်မယ် – အဆိုပါ Zimmerman ရုံးတင်စစ်ဆေးမဟုတ်ပါဘူး. အလင်း-skin ဖြစ်ခြင်းကိုသင်လူသတ်မှုနှင့်အတူကွယ်ပျောက်ရကြကုန်အံ့မပါဘူး.
lewrites • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်မှန်ပါတယ်, ကျနော်တို့ဘာမှမယူဆနိုင်ပါတယ်, ကျနော်ကျိန်းသေသဘောတူ. အဘယ်သို့ငါပြုပါဖို့ကြိုးစားနေတာပါမာရ်နတ်ရဲ့ထောက်ခံသူ play ဖြစ်ပါသည်. ငါအလင်းခွငျးခံရသညျ့ဖြစ်ခြင်းလူသတ်မှုနှင့်အတူအဝေးသငျသညျမရပေသိကြ (မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုသတ်ဖြတ်ကောင်လေး၏အမှု၌, ကောင်လေးအဖြူခဲ့သည်, ဘောလုံးကစားသမား၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, အားလုံးပါတီများအနက်ရောင်ခဲ့ကြသည်).
ဒါပေမယ့်စဉ်းစားရန်အကွက်ပြင်ပလုံးဝမဟုတ်ဘူး…ကောင်းစွာ…box ကိုပြင်ပတွင်. ငါအသက်ရှင်သည်အဘယ်မှာရှိငါန်းကျင်စကားကိုနားထောငျသောအရာကိုအများကြီးကြောင်း site ပေါ်တွင်တက်နေရာချင့်အဘယျသို့ကနေဒါကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်မြို့ပြအဘိငါတကယ်သတင်းအချက်အလက်အများကြီးဘို့မသွားဘူး. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငါ၏အဒေသကွဲပြားခြားနားသောစကားများကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့. အခြို့သောလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လက်မအထိအလယ်မှာလက်ချောင်းညီမျှသည်လိုပဲ.
ငါလိင်အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်ထိုသို့သောအမှုကိုပြုပါမည်ဟုသံသယရှိခဲ့ကြပေသည်ဘယ်သူကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအားဖြင့်လူငယ်တစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်အဖြစ်စော်ကားခဲ့သည်. A ကောင်းဆုံးတွင် track record, ကောင်းသောမိဘများ, ထင်ရသောအကောင်းတစ်သူတစ်ဦး. လူတိုင်းသလောက်ယူဆ…မှန်သော? တစ်စုံတစ်ဦးကဒါသည်ကောင်းလိုလျှင်, ဘယ်လောက်သူတို့ကငါ့ကိုရန်လိုတစ်ခုခုလုပ်ပေးနိုင်?
လုံလောက်အောင်ပြောရန်, ဤကိစ္စတွင်ကောင်းသောဆွေးနွေးမှုအချက်များတက်တတ်၏, မသက်ဆိုင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအတွက်လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေမ၏. yeah, မီဒီယာပေါ်မှာတိုက်ကျွေး, ထိုသို့သူတို့ပြုကြောင်း sickening ခဲ့သည်. ကျွန်မကောလိပ်တစ်ခုကမီဒီယာကအဓိကခဲ့, ကျနော်တို့ဘက်မလိုက်ဖြစ်ရန်သွန်သင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေပိုကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဖြစ်စေခြင်းငှါကော်ပိုရေးရှင်းမှထွက်ရောင်း, ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့င်.
ငါနှစ်ဦးစလုံးမိသားစုများဘို့ဆုတောင်းကြလော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ, ငါနောက်ဆုံးတရားသူကြီးဖြစ်သညျဘုရားသခငျမှ up ပြုလုပ်ထားခဲ့ပါ, အဆုံး၌ရှိသောကြောင့်, သူကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရာအရပ်သူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်. ငါမဆိုမလေးစားတဲ့စေသောလျှင်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, တယောက်ကိုမျှငါမတွေ့ဓိပ်ပာ.
pepjrp • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Goon ဆိုအယူအဆအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမလူမျိုးရေးအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်. အားလုံးသင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌.
Antoine Mason ဆို • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
pepjrp • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မီဒီယာသင့်ရဲ့ပုံပြင်အကြောင်းကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး, သငျသညျက Black မဟုတ်သောကြောင့်,. လူဖြူများနှင့်အစွမ်းကုန်ဂျက်ဆင်နှင့် Sharptin တူသောလူမျိုးရေးခွဲခြားခေါင်းဆောင်များများအတွက် Cross-ဆံပင်၌ရှိကြ၏.
သူ Zimmerman မာတင် profiled နှငျ့သငျအမှုဆောင်ထွက်ကျန်ကြွင်းသောဖြစ်ရပ်မှန်များပေးသောပြောကြသောအခါမှားယှငျးစှာပြိုင်ပွဲအတွက်ယူဆောင်ဒီစာရေးဆရာအဖြစ်အတိအကျမှန်ကန်သငျသညျ. လူတွေတာဝန်မဲ့သတင်းပို့တဲ့အခါမှာလူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုများကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်. သူလည်းထွက် left သို့မဟုတ် home သွားသည့်အခါမာတင်ဟာလမ်းဘေးစင်္ကြံပေါ်လမ်းလျှောက်မပြုခဲ့ကြောင်းကိုသိမထားဘူး, သူကိုက်မှတဆင့်မိမိကိုမိမိအပေါ်သို့သံသယဆောင်ခဲ့အိမ်များနှင့်တံခါးများအနေဖြင့်အနည်းငယ်ခွကေိုဖြတ်. Zimmerman ဟာအသက်ရှင်ကြောင်းအစီရင်ခံ 911 အော်ပရေတာသူမာတင်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်မျက်စိအဖြစ်. သူမာတင်သွားကြောင်းနှင့်သူသူ့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းတိုက်ရိုက်အစီရင်ခံတင်ပြသကဲ့သို့. မိနစ် သွား. အဘယ်ကြောင့်ဒီအလုံးကိုအရေးကြီးသောအချက်ကိုကွန်ရက်များနှင့်ထုသဖြင့်ချန်လှပ်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အဘယ်ကြောင့်မာတင်ပြန်လာခဲ့ပါ? သူအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်တစ်ဦးကတကယ်တော့, ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းအနက်ရောင်ထုအားဖြင့်၎င်း, သင်တန်းထဲကထွက်ခွာ, ဂျက်ဆင်နှင့် Sharptin ကဲ့သို့ပြိုင်ပွဲ hustlers.
BQPhotography • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
gdoggydog05 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:31 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ပြဿနာဖြစ်ပါသည်, လည်း, အဘယ်သူမျှမကလူလူတိုင်းများတွင်ဖမ်းယူနားဆင်သောအရေးကြီးသောတစ်ဦးအဖြစ်ဤကိစ္စတွင်ရွေးချယ်ဖို့အဘို့လည်းလူမျိုးရေးခွဲခြားကြောင်းဝန်ခံမည်အကြောင်း, နှင့်တခုတခုအပေါ်မှာအမြင်ရှိပါတယ်, ပြိုင်ပွဲများ၏အခြေခံပေါ်မှာ. ကိုယ့်အထက်သင်တို့၏အကြံအစည်တန်ဖိုးထား, ဒီငါကိုဖတ်ဘူးသောလျော့နည်းမသိဘဲပို့စ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်အဖြစ်, ငါမူကားတစ်ဦးအဖြူဖြစ်ကြောင်းကို 26 အဆိုပါ suborbs နဲ့ကျွန်မထံမှနှစ်အရွယ်အထီးလည်းဤကိစ္စတွင်ဖွငျ့ဝမျးနညျးပြီ. ဒါဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်အသက်ရှင်သေးသထေူသောကိုကိုမဖွင့်. ဤကိစ္စတွင်အားလုံးမှာလူသိများသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုယင်း၏စင်ပုံစံမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဖြစ်တယ်. အနက်ရောင်ကောင်လေးသသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤအမှုနှင့် ပတ်သက်. စကားပြောနေကြသည်. ကျနော်တို့ကအနက်ရောင် trajedy ယူဆခဲ့ကြ (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုမကြာခဏဖြစ်ပျက်, နှင့်ကြေကွဲဖွယ်င်, ဤနေရာတွင်ပေမယ့်ငါ့အမှတ်) နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဖြစ်ဆိုးအပေါငျးတို့သညျအခွားထောင်ပေါင်းများစွာထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ဖြစ်. အဖြူရှေးရှေးသတ်ဖြတ်အနက်ရောင်လူများနှင့်ပင်လူမျိုးရေးအရလှုံ့ဆော်သူတွေကို၏ trajedies အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ကျော် glazed ကြသည်မဟုတ်ကြောင်း, နှင့်လည်းဒီ, ပုံမှန်အရာဖြစ်လာ. အဆိုပါ Wisconsin ပြည်နယ်တရားမျှတမှာ, ငါကဖြစ်ယုံကြည်, လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအာဖရိကန်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များဖွင့်လုပ်မယ့် flash ကိုလူအုပ်စုလူဖြူသာဆန့်ကျင်တရားမျှတပြီးညှိနှိုင်းတိုက်ခိုက်မှုလုယှက်, အချို့ကိစ္စများတွင်သူတို့မျက်နှာများတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုများလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်, နံပါတ်များနှင့်အတူဒေသခံနေအိမ်များနှင့်စီးပွားရေးသို့လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ခိုးယူခြင်းနှင့်အင်အားနှင့်အတူခြိမ်းခြောက်, နှင့်မျှမတို့မီဒီယာလွှမ်းခြုံ. အဖြူဆယ်ကျော်သက်တစ်စုလူမည်းပစ်မှတ်ထားလျှင်သင်စိတ်ကူးရနိုင်ပါသလား? မီဒီယာရွေးချယ်, နှင့်သင်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်, သငျသညျကိုသာအာရုံစိုက်ပါလျှင် “တစ်ခုသာအနက်ရောင်လူတစ်ဦးနားလညျနိုငျ” ဤကိစ္စတွင်၏ဘေးထွက်, အနက်ရောင်အဖြစ်ဆိုးအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကြောင်း, အခုတောင်မှ, အစွမ်းကုန်စဉ်, တရုတ်, လူဖြူ, အလားတူဖက်ရှင်ဦးသေဆုံးနေကြတယ်. ဤကိစ္စတွင်အနက်ရောင်အချို့ကိုမျိုးသင်္ကေတဖြစ်လိမ့်မယ် “တိုကျပှဲ,” ကိုယ့်ကိုနားလည်. ဒါပေမဲ့ဒီကဖြေရှင်းပေးဖို့လမျးမ. ငါသည်ဤရုံကိုအကြားရှိတွင်းနက် widens တဲ့မျက်နှာအဘို့ကိုသိရ. သငျသညျငါက profiled ခံရဖို့ဘယ်လောက်နားလည်မယ့်အဖြူသောသူကဲ့သို့ငါ့ကိုပြောနှင့်ပြီ, ဒါပေမယ့်တကယ်ကိုယ့်သူအပေါငျးတို့အတူတူနည်းလမ်းတွေ profiled ခဲ့သည်, လုလင်တယောက်အဖြစ်. ငါသဘောတူတယ်, မိုက်မဲအရောင်အသားအရေနှင့်အတူ moreso ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ “လူငယ်” များလွန်းကြောင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါတယ်. သငျသညျဈနားလည်ဘယ်တော့မှပြောပါ, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကငါ့ကိုငါ့အလိုရှိသမျှအနက်ရောင်ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိုတွေ Martin အာရုံစိုက်လာသောအခါနဲ့တူခံစားမိစေသည်ဘာကိုနားလည်ဘယ်တော့မှ, ပင်နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအလားတူ trajedys ၏သူတို့သည်ရာပေါင်းများစွာကိုပိုမိုအရေးကြီးသောအဖြစ်ဤ trajedy ရွေးချယ်ဖို့ပထမဦးဆုံးရာဌာန၌မှားယွင်းသည်ဟူသောအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုကြဘူး. ငါသည်အပြစ်ရှိ၏ယုံကြည်ကြဘူး. ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးအမြင်မယ့်. အပွစျရှိအတွေးအခေါ်တွေအချို့ကိုမျိုးကနောက်ကွယ်မှတယောက်ကိုတယောက်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုရှေးခယျြမဆိုဥပမာအားဖြင့်ကြောင်း. ထိုအခါငါယုံကြည်တယ် ” သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဖိနပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်” သာလူမျိုးအကြားကြောင်းတွင်းနက် widens နှင့်တစ်ဦးမမျှတကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအကြှနျုပျကိုကောလိပ်မှမသွားရန်အဘို့အလိုကဘာလဲဆိုတာသိသလား, ငါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 8 ပတ်ပတ်လည်ကိုတင်သောခမ်းနား, ငါ၏အစက်အပြောက်များနှင့်ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရတဲ့အတူတူပင်တန်းနှင့်အတူအာဖရိကအမေရိကန်များကြည့်နေစဉ်? သငျသညျဖြစ်ကောင်းမ. အကြှနျုပျ၏အချက်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျဆိုသညျကားဘယ်အချိန်မဆိုကြောင်း “သငျသညျငါ့အရောင်ဖြစ်တူကဘာလဲဆိုတာမသိရပါဘူး,” သငျသညျတန်ဖိုးရှိရှိဘာမှလုပ်နေကြသည်မဟုတ်, ငါသည်သင်တို့၏အရောင်ဖြစ်ဘယ်တော့မှနိုငျသောကွောငျ့. ငါလူမည်းလူမျိုးအကြားနက်ရှိုင်းသောသွေးခွဲစေသောကိစ္စများမှနည်းတူပင်မျက်စိကန်းဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်. အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေကဒီ Travon မာတင်အရာကိုကြည့်ခြင်းနှင့်တဦးတည်းအရာစဉ်းစားနေကြတယ်, White လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုစဉ်းစားနေစဉ်. “ဒါကြောင့်ပဲနှင့်ညာဘက်အရေးကြီးသောအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရဖို့ဤကိစ္စတွင်အဘို့ဖြစ်၏, နှင့်ကျော်ကြားသော, လူအပေါင်းတို့သည်အရာကြွင်းလေထက်ပိုကြီး, ပြိုင်ပွဲများ၏အခြေခံပေါ်မှာ?” ငါသည်ဤဖော်ပြထားခြင်းတအာဖရိကန်အမေရိကန်ခရစ်ယာန်ကြည့်ဖို့ရှိသေး. ထိုအတကယ်တော့အရာကိုမသိဘဲနေစေကြောင်းလျစ်လျူရှုရန်. လူမည်း profiled ဖြစ်ကြောင်းတချို့အမှန်တရားရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး display ကိုအပေါ်တစ်ဦးအမှုထားရန်ရွေးချယ်ခြင်းမှားယွင်းနေသည်, နှင့် travon ခဲ့လိုပဲအသတ်ခံနေကြသောအခြားလူမျိုးမှမလေးစား.
ဒေဗောရ Bilbo-ရှာဖန် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Gdoggy, သငျသညျပြောဆိုကြပြီအရာအားလုံးကိုသဘာဝကျပါတယ်. ငါကအနက်ရောင်ငါသည်လည်းသူတို့၏အကျင့်စရိုက်နဲ့ကြင်နာမှုမဟုတ်သူတို့၏အသားအရေရဲ့အရောင်အဘို့လူတွေကိုကြည့်ဖို့ကြီးပြင်းသူနှစ်ဦးသားတို့၏မိခင်ဖြစ်၏. အကြှနျုပျ၏သားအဖြူမိန်းကလေးငယ်များရက်စွဲပါပါပြီ, ဟာဝယေံမိန်းကလေးငယ်များ, စသည်တို့ကို. နှင့်အစဉ်မပြတ်ငါငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ့်သောသူသည်ဘုရားသခင်တဆူတည်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးတရားမျှတတဲ့ကြောင့်ငါနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာရှိခဲ့သူတို့ကိုပြောပြသည်. က Man Babel များ၏မျှော်စင်မှာရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့ဒီသွေးခွဲဖန်တီး. ဤသည်ကဆိုပါတယ်ခံရ, တရားခွင်တွင်. ဟုတ်ကဲ့, Trayvon ရဲ့အမှုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကမလြှော့လူများပေါင်းစပ်တဲ့ preference ကိုနှင့်ကိစ္စတွင်ထိုဆွဲအာရုံစူးစိုက်မှုကိုခဲ့သည်. အဘယ်အရာကိုအချို့အနက်ရောင်လူတွေနားမလည်ကြဘူးအနက်ရောင်ကလူလည်းလူမျိုးရေးခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့ပြိုင်ပွဲအပေါ်အရာရာအပြစ်မဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုစေရန်ရှိသည်. ဒါဟာတစ်ဦးတည်းအပြေးပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်. မဟုတျပါဘူး, သူတို့ကသူ့ကိုပြောပြသည်အခါ George Zimmerman ပတ်သက်. ရဲတပ်ဖွဲ့နာခံခြင်းမရှိပါ “မလိုက်နာရန်။” အခုကအနုတ်ကောက်ချက်အချို့ကိုအဆုံးမှာရှိတဲ့ရပ်သင့်မြေပြင်ဥပဒေနှင့်သူ့ကိုကာကွယ်ပေးသည့်အလွန်ဥပဒေကသူ့မနာခံမှုကနေရေးဆွဲခဲ့ကြ. ငါ Trayvon ရဲ့မိသားစုအဘို့ကြီးသောကိုယ်ချင်းစာခံစားမိ, အထူးသဖြင့်သူ့မိခင်ကိုသူတစ်ဦးအနက်ရောင်ကောင်လေးခဲ့သည်မဟုတ်သောကြောင့်, ဒါပေမဲ့သူတစ်ဦးမိခင်ရဲ့ကလေးကြောင့်! ရာဇဝတ်မှုနေပါစေကကတိပြုတဲ့သူကမှားပေမယ့်သူတကယ်လမ်းဘေးအပေါ်လမ်းလျှောက်မယ့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည်? Zimmerman ဆောင်ရွက်ရန်လည်းအမြန်ခဲ့သည်, သူ Trayvon ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုခဲ့ကြသည်ဘယ်အရာကိုမြင်မှအနည်းငယ်ပိုရှည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြသင့်တယ်, သူဟာ window တွင်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်သူ့ကိုအောက်ပါရှေ့တော်၌တံခါးကိုချိုးဖို့ကြိုးစားသွားခဲ့လျှင်. Bottom Line George Zimmerman ဥပဒေစိုးမိုးမှုတိုက်ရိုက် COMMAND မနာခံ IS! ယင်းသင်္ချာလုပ်ပါ.
gdoggydog05 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင့်ရဲ့နားလည်သဘောပေါက်ငါ၏အမှတ်ချက်များအတှကျကြေးဇူးတငျ. သင်တို့ကဲ့သို့အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေကနေနားထောငျခ, ငါ့ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးမ. ကိုယ် George Zimmerman မိုက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်သဘောတူ. သူရဲများကအဘို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြသင့်တယ်, နေပါစေသူရပ်ကွက်အတွင်းသို့ကျိုးပဲ့နေတဲ့ထားခဲ့ပုံကိုအမျက်ထွက်….ဟုတ်ကဲ့သင်မှန်များမှာ. အဘယ်သူမျှလျော့နည်း, တစ်ဦးတည်းကြောင့် command ကိုမနာခံမှုအတွက်, ကိုယ့်ကိုသူအသက်အဘို့အကဉျြးထောငျကိုသှားသငျ့တယျလို့ထငျသို့မဟုတ်လူသတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရ dont. ကျနော်တို့ကတစ်ဦးချင်းစီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ရမယ်. မဟုတ်သေချာပေါက်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်. ငါ့ကိုသငျသညျဥပမာတစ်ခုပေးပါစေ. ကိုယ့်စိတ်တွင်တရားမျှတမှုကိုစောင့်ရှောက်ထင်ကြောင်း ok ဥပမာနှစ်ခုကို. တဦးတည်းအမှု၌, လူတအမှိုက်သရိုက်များ…. သူက၎င်း၏မှားယွင်းတဲ့သိတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုယခုအချိန်တွင်အတွက်, ပြတင်းပေါက်အထဲက McDonalds ထံမှသူသည်မိမိအ milkshake ပစ်လမ်းဆင်းကားမောင်းနေစဉ်….. နောက်ပိုင်းမှာ, တစ်ယောက်ယောက်က milshake ရှုမြင်, ယင်း၏တစ်ယုန် rabitt ထင် (ကိုယ်ကဤဥပမာရယ်စရာဖြစ်ကြောင်းသိကြ, ငါနှင့်အတူအဘွားလ) နှင့် swerves, ကား wrecks နှင့်ကွယ်လွန်. လူ၏အပြစ်ရှိဘာလဲ? လူသတ်မှု? …. သူကအမှိုက်သရိုက်များထိုက်သောအဘယ်သူမျှမ. လူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်လူသတ်မှုမှဦးဆောင်. အပြစ်တရားသည်ခရစ်တော်အားဖြင့်အသေသတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲရှင်. သို့သော်ဤနေရာတွင်မွကွေီးပျေါမှာ, ကျနော်တို့ကရာဇဝတ်မှုနှင့်အညီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြသည်, အမိန့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်. အိုကေ, ဒီနေရာမှာတစ်ဦးပြောင်အရေးယူပိုကြီးတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ရှိရာအခြားအလားတူဇာတ်လမ်းရဲ့. သူမ၏အပြီးရှာနေတူသောအရေးကြီးသောတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းအာရုံစိုက်အပေါ်ခက်ခဲအလုံအလောက်လုပ်မလုပ်ပါဘူးတဲ့သူတစ်ဦးကပျင်းရိသူတစ်ဦး2နှစ်အရွယ်သား…. ကားကိုပြေးဆင်းကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုနှင့်အတူကားထဲတွင်သူမ၏မွေးကင်းစကလေးရှိပါတယ်… ဗိမာန်တော်၌သူမ၏ဆဲလ်ဖုန်းမေ့လျော့….. ဖုန်းခေါ်မှတဆင့်လာ, သူမခေါ်ဆိုမှုအပေါ်တစ်နာရီအပေါ်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ထွက်ကြွလာနှင့်သူမ၏ကလေးကအသေဖြစ်၏. ၏သူမကအပြစ်ရှိသည်အဘယ်သို့? ရုံပျင်းရိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်စိတ်? ကောင်းစွာ, သူမ၏ကလေးသည်မိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်လို့မရဘူး. သူကကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. သူမသည်သူမတာဝန်ယူခဲ့သိတယ်နှင့်သူမ၏နွှဲလုပ်ရပ်သူသေဆုံးစေသော. ဤသည်လူသတ်မှုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကလေးသည်သူမအပြစ်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ် it.Only အတွက်မဆက်ဆံခဲ့. အိုကေ, Zimmerman တရားမျှတမှုအဆီးအတားများအပြစ်ရှိဖြစ်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့အခြားအမှုအရာတို့ကိုသငျ့သညျ …. ဒါပေမဲ့, travon သူ့ကိုလှည့်သူ့ကိုနှိပ်ခဲ့သည်၎င်း၏စစ်မှန်သောလျှင်, ပြီးတော့သူကသူ့ကိုသေနတ်နဲ့ပစ်. George Zimmerman ရဲမနာခံထိုက်သော. ဒါပေမယ့်ပါဝင်အခြားအခမဲ့အလိုတော်ပါတီလည်းမရှိ. Travon ခဲ့ပါလျှင်, ပွောဆို,3ရွေးချယ်မှုများ….. ပွေးသှား (သူလုနီးပါးကျိန်းသေပိုမြန်ခဲ့….. အတွင်းပိုင်းသို့သွား….. သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းဒေါသထွက်နေတဲ့ဖြစ်သူသူ့ကို hassling ခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်ဂျော့ခ်ျထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်. သူကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမသိရပါဘူး. အဓိကကဒါပဲလေ. သူဝေးရဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ Zimmerman ကျမရောက်ရခဲ့လျှင်, ယင်း၏လူသတ်မှု. သို့သော်လျှင် travon, မာနထောင်လွှားအတွက်, ရန်လိုဖြစ်ချင်ခဲ့တယ် (ကိုယ်ကဒီနားလညျနိုငျ….ယခင်တုန်းက, ဤအမှုသည်ငါ့ပါပြီမယ်လို့ )…. ထိုအချက်မှာ, သူလည်းနောက်ဆုံးရလဒ်သို့ကစားမယ့်အခမဲ့အလိုတော်ဆုံးဖြတ်ချက်. အဆိုပါပြဿနာကိုကျနော်တို့အရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်သူတွေရဲ့တဦးတည်းကိုသိ dont ဖြစ်ပါသည်. ငါတို့သည်ငါတို့၏မုသာစကားကို၏တွန်းအားတွေရှိအပေါ်အခြေခံပြီးလူတွေကိုအားသွင်း Start အကယ်., လူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ….ကိုယ်မင်းကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ကွယ်ပျောက်သော့ခတ်သင့်ကြောင်းကိုရှာဖွေမယ်လို့ထင်ပါတယ်. ဂျော့ခ်ျ zzimmerman ရဲနှင့်အတူ obstructing ထိုက်သော….နှင့်ပိုပြီး၏အပြစ်ရှိကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာဖြစ်ခြင်းမပါဘဲ, ကိုယ့်ကိုအဘယျသို့မသိရပါဘူး.
ပဲ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Zimmerman တရားစွဲဆိုတဲ့မဟုတ်ငါဒေါသကိုတကယ်အကြောင်းကိုခဲ့သည်ထင်ဘာလဲ. ငါကအနက်ရောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသော်လည်းငါ့ထောက်ခံမှုမှာအားလုံးပြိုင်ပွဲအပေါ်အခြေမခံ. ယင်းလူမျိုးလှည်ကြသည်မှန်လျှင်ငါခံစားမိလိမ့်မယ် 100% အတိအကျတူညီသောလမ်း. ဆိနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးသေနတ်နှင့်အတူလူသ.
ငါသည်လည်းသင်ဘေးသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးသူများမှာအခါထင်ပါတယ်။. သငျသညျအခြို့သောဒီဂရီမှ culpable များမှာ… ကိုယ့် FL သူ့ကိုစစ်ကြောတော်မူနိုင်ကြောင်းအချို့သောဥပဒရှိခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒရှိ, Z ကိုထိုညဉ့်ဒုက္ခကိုရှာဖွေနေထွက် သွား. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
တစ်ဦးရဲ Trayvon ချဉ်းကပ်လျှင်ငါအမှန်တကယ်ယုံကြည်, Trayon စိတ်ဆိုးသော်လည်း, ယနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မယ်. ငါဒါစိတ်ဆိုးဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခန့်မှန်း. ကိုယ့်တူမှကျင်းပလျက်ရှိသူ၏အသက်တာကိုဆုံးရှုံးသူတစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်အဖြစ်ဤအခြေအနေကိုကြည့်ရှု, လျှင်မပို, တစ်ဦးသောသူကဲ့သို့တာဝန်.
pepjrp • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင့်အနေဖြင့်အချက်အလက်များဖြစ်စေ bean ကိုမသိရပါဘူး. သမ္မာတရားကိုရယူပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပိုကောင်းခံစားရပါလိမ့်မယ်.
Rita • ဒီဇင်ဘာလ 9, 2014 တွင် 2:24 ညနေ •
SB, အစဉ်အမြဲငါမြင်ကြပြီအရှိဆုံး ofniesfve ဖြစ်ပါတယ်သမျှသော youtube ကိုချွတ်. သူမသည် Sharpton နှင့်ဂျက်ဆင်ကဲ့သို့လူမျိုးရေးခွဲခြားဖြစ်ပါသည်. ငါဒါကြောင့်အနက်ရောင် SOB တစ်ကောက်ပြိုင်ပွဲအပေါ်အနိုင်ရအစဉ်အဆက်ကတည်းကငါ့တိုင်းပြည်၏ embarassed ခဲ့ဖူးဘူး!သူမဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာ AF1 ပယ်သူတို့အား leggings ငါအခွံမာသီး f'king go.
သူစကားနားမထောင်ဘဲနေ၏! အဆိုပါအချက်အလက်များ Get. သင်သည်ထိုသူတို့အားလုံးမသိရပါဘူး.
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သူတို့ကသငျသညျသူ့ကိုနောက်ကိုလိုက်ရန်မလိုပါဟုဆိုသည်… တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်အမိန့်ပေးစေခြင်းငှါမထင်ထားဘူး. ထို့အပွငျ, တခုတခုအပေါ်မှာအော်ပရေတာ 9-1-1 အဆုံးစွန်အခွင့်အာဏာရှိသည်ပါဘူး. ဒါဟာယောက်ျားလေးသေဆုံးခဲ့ရသည်ကြောက်ရွံ့ခဲ့, ဒါပေမယ့်ငါသည်သင်တို့၏ကောင်းစွာဆောင်ခဲ့ယောက်ျားလေးများအစဉ်အဆက်က Mr တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ဟုသံသယ. Zimmerman နှင့်လမ်းဘေးဆန့်ကျင်သူ၏ဦးခေါင်းကိုရိုက်နှက်နှင့်သူ၏နှာခေါင်းကိုဖဲ့. သူကသူတို့သူတို့မေးမွနျးခဲ့ကြလိမ့်မယ်, သူတို့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြန်ဖြေနိုင်တယ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့တစ်တွေ Gates အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အိမ်များအကြားပြေးကြ၏နှင့်ဘဝအပေါ်သွားသည်.
pepjrp • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဒေဗောရ, ဖွစျနိုငျသကဲ့သို့သငျသူတို့ကသူ့ကိုပြောပြသည်အခါ George Zimmerman ပတ်သက်. ရဲတပ်ဖွဲ့နာခံခြင်းမရှိပါဟုပြောသည်သောအခါအသင်မူကားမှား “မလိုက်နာရန်။” သူမည်သူမဆိုစကားနားမထောင်ဘဲနေ၏. Youtube ကိုအပေါ်အသံကိုနားထောင်! သူက OK ကိုကဆိုသည်ပြန်သည်သူ၏ထရပ်ကားမှလမ်းလျှောက်စတင်. သူမာတင်အောက်ပါအခါသူအသက်ရှူထဲကခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူက OK ကိုကဆိုသည်ပြီးနောက်, သူရဲများကများအတွက်လိပ်စာအကြောင်းပိုမိုမေးခွန်းများကို၏စုံတွဲတစ်တွဲဖြေကြားခြင်းနှင့်မိနစ်တစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်ထွက်သွားသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းမာတင်သည် သွား. အဘယ်အရပ်သူမသိကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်အဖြစ်ထို့နောက်သူကဖွင့်ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းမိုးသည်းထန်စွာအသက်ရှူရပ်တန့်. မာတင်သာဖြစ်ခဲ့သည် 50 သူ့အိမျကနေကိုက်, ဒါပေမယ့်သူကမြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်ပြန် လာ.. Bottom Line သင့်ရဲ့မှတ်ချက် George Zimmerman ဥပဒေစိုးမိုးမှုတိုက်ရိုက် COMMAND မနာခံ IS လုံးဝ nonfactual သည်နှင့်သင်မုသာစကားပြန့်နှံ့ဖို့လိုလားတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏မျိုးများကဲ့သို့မထင်ကြဘူး. 1000 ရဲ့ရှိသည်နှင့် 1000 ရဲ့တခြားသူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုသင်လိမ်ညာခဲ့ကြ! Listen နှင့်သုတေသနနှင့်သင်ငါသမ္မာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောသူဖြစ်ကြောင်းကိုထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်! နှင့်နည်းပညာပိုင်း, အဆိုပါ 911 အော်ပရေတာ Zimmerman အားဆို၏ “ကျနော်တို့ကလုပ်ဖို့သင်လိုအပ်ပါဘူး”. Zimmerman OK ကိုကဆိုသည်နှငျ့သငျသူအပြေးရပ်တန့်ကြောင်းကြားနိုင်သည်. အဆိုပါအချက်အလက်များဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမုသာစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူး Get.
အင်ဒရူး Keeter • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Zimmermann နဲ့ Martin အကြားဒါဟာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကြောင့်တစ်ခုခုခဲ့သည်
အပြစ်ရှိသော. ထိုညဉ့် Trayvon ပစ်ခတ်ခဲ့သည်
သက်သေပြနိုင် Zimmermann အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမလူမျိုးရေးကိုရှိခဲ့သည်. ယေရှဲ Jackon နှင့်အတူမီဒီယာ, အယ်လ်
Sharpton, သမ္မတအိုဘားမားကသမ္မတ, သစ်က Black Panther ပါတီနှင့်အခြားကြီးမားသောအချိန်
Trayvon Martin နှင့်ဂျော့ခ်ျ Zimmermann လွဲပြီးဘယ်သူအားမျှမအမှန်တကယ်အဘယ်အရာကိုသိလျှင်ဖြစ်ပျက်
ဖြစ်ပျက်. ဤရွေ့ကားလုပ်ရပ်များမုန်တိုင်း created
နာကျင်နေကြတဲ့သူတွေကိုနှစ်သိမ့်သောဘုရားသခငျကိုခြေလှမ်းကြောင်းစမ်းသပ်မှုနှင့်မေးဖို့, ဒေါသထွက်, နှင့်
ဒါကြောင့်အဲဒီ biased မီဒီယာဘူတာရောင်းချနိုင်ပါတယ်အရှိဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရလိမ့်မယ်
Fox ကသတင်းများအပေါ်ရုံးတင်စစ်ဆေး, CNN က, MSNBC နှင့်အခြား affiliates စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရနိုင်အောင်
ဒါကြောင့်သူတို့ကအမြတ်အစွန်းအတွက် raking စောင့်ရှောက်နိုင်.
ကျနော်တို့ကို TV ပိတ်ထားကြှနျုပျတို့မကျြစိကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အသင်းတော်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်. ကျနော်တို့ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ပါလျှင်, ဗာဂျီးနီးယား, နယူးယောက်,
montana, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, စသည်တို့ကို… ကျွန်တော်ဖလော်ရီဒါဘယ်မှာ Trayvon အတွက်ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲပစ်လို့မရဘူး
ပစ်ခတ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းပြုမူလမ်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အကြောင်းကိုငါတို့သားသမီးသင်ပေး, ယရှေုသညျ, နှင့်
ခေါင်းဆောင်များ, အစိုးရအရာရှိများ, ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲများ, အုပ်ချုပ်ရေးမှုး, ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်များအတွက်ရပ်တည်ကြောင်းစသည်တို့ကို
တန်ဖိုးများနှင့်သူတို့နေဆဲရှိသူတို့ကခြိမ်းခြောက်ကြသောအခါဆင်း back မည်မဟုတ်
တူညီသောကိစ္စများမှသည်. ငါအဖြူရောင်ပေါ့ 28
ကလူတက် rile နှင့်လူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုများကိုကျော်သူတို့အားလုံးကိုစိတ်ဆိုးရဖို့လိုလား. အခြားသူတစ်စုံတစ်ဦးက၎င်းတို့၏ပို့စ်တွင်ကပြောသည်, ငါမူကားပါလိမ့်မယ်
က. Gdoggydog05 အကြောင်းအကြီးပွိုင့်လုပ်
တူညီတဲ့အရာကဲ့သို့အမြန်အစားအစာသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အသွား. ကျွန်မအသက်ငယ်စဉ်အခါငါလူမျိုးရေးအရ profiled ခဲ့သည်
တစ်ဦး McDonalds မှာအလုပ်, ပြီးတော့ငါ့ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားပြိုင်ပွဲခဲ့ကြသည်သူနှစ်ဦးလေးတွေရဖို့ကြိုးစားနေ
သင့်ရဲ့အပွစျကိုအဘယ်ကြောင့်အသားအရေအရောင်ကိုယ်တော်နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်? လူမျိုးရေးကိုဤလောက၏ဖြစ်ပါသည်, စာတန်
ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသညျယရှေုကိုပြန်ယူပြန်ကြွလာချိန်အထိ. ထို့နောက်သည်အထိကြှနျုပျတို့သညျဤကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျရမည်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့
ဤလောက၏အပြေးပြိုင်ပွဲအထက်တွင်ကိုယျ့ကိုယျကိုချပြီးထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအရာတို့ကိုအသက်ရှင်. ငါတို့ရှိသမျှသည်ရုန်းကန်မှုများမှတဆင့်ကျော်သွားကြပြီ. တချို့ကခဲ့ရုန်းကန်မှုများမှတဆင့်ကျော်သွားကြပြီ
ပစ္စည်းပစ္စယသူတို့ကျော် get ဘယ်တော့မှနိုင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သမျှသောဤလူတို့အားဖြစ်ပျက်ခံစားရ
ကျွန်တော်တို့ကိုရောကျပါစေနဲ့သူရုန်းကန်မှုများအားဖြင့်ငါတို့အားလမ်းပြလိမ့်မည်မဟုတ်. Zimmermann အရာ vs ဒီအ Trayvon ရန်လိုအပ်ပါသည်
တူညီတဲ့စီရင်ချက် သိ. အဘယ်သူကိုမျှမပါဘဲရောက်ရှိပြီမယ်လို့. ကျနော်တို့မီဒီယာခွင့်ကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်
shope • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:50 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
လူဖြူအဘယ်သူမျှမဖွင့်အကြောင်းမရှိများအတွက်လူမည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါပြီ. အဆိုပါ KKK ကိုသတိရပါ?
မက်တီ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:51 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အရာအားလုံးကဒီမှာကဆိုပါတယ်နှင့်အတူငါလုံးဝသဘောတူနေစဉ်, ငါကဤကိစ္စတွင်အတွက်အချက်အလက်များနှင့်မကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနောက်လိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ထင်. ဒေသခံရဲနှင့် FBI ကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဤကိစ္စတွင်တစ်ကဏ္ဍမှပါမဆုံးဖြတ်ထားကြပါပြီ. သူတို့က Zimmerman သည်သူ၏မျိုးနွယ်အပေါ်အခြေခံပြီးမာတင် profiled မအထောက်အထားများကိုတွေ့ရှိရ. သူတို့က Zimmerman သံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုပေါ်အခြေခံပြီးမာတင် profiled ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရ. ပြိုင်ပွဲမာတင်ဘာနှင့်အတူရဲကမေးမြန်းသောအခါ Zimmerman သာတုန့်ပြန်. သူကတက်မခေါ်နဲ့သူလူငယ်တစ်ဦးကအနက်ရောင်လူကိုအောက်ပါခံခဲ့ရသည်မပြောခဲ့ပါဘူး. ငါကလူမျိုးရေးကိုမဟုတ်ခဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး. ဒါပေမယ့်သက်သေအထောက်အထားတွေကိုပြဌာန်းခွင့်လုပ်ခွင့်ပြုမထားဘူး. ဒါဟာလဲဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးသောအခါ, ဆင်ကန်းတောတိုးအချက်ကိုမရှိသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိသည့်အခါကလူမျိုးရေးခဲ့ယုံကြည်ဖို့ရှေးခယျြမှုလူမျိုးရေးစေသည်. ပြိုင်ပွဲတရားခွင်တက်မလာဘဲ. အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှု Zimmerman လူမျိုးရေးခွဲခြားစိတ်ရင်းထဲကသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့လျှင်, သင်ထလာကြပြီမယ်လို့စဉ်းစားကြဘူး? အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုဟာသူတို့ရဲ့အခြမ်းအပေါ်ဂျူရီလူကြီးရရှိရန်လိုအပ်…တစ်လူမျိုးရေးခွဲခြားကြောင်းလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ရပြီလိုအဖြစ် Zimmerman ပန်းချီ.
သငျသညျအကွောငျးပွောကိစ္စကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုမှန်ကန်နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရုပ်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်. ကိုယ့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ငြင်းခုံတယ်, အထောက်အထားကထောကျပံ့ပေးပါဘူးတဲ့အခါလူမျိုးရေးခွဲခြားကိစ္စကြောင့်ပန်းချီအန္တရာယ်နှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်.
ရှမွေလသည် Coleman • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:51 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်ပြီးလေးစားခရီးစဉ်, သင့်ရဲ့ဂီတနှင့်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုငါမူကားလုံးဝကိုအောက်တွင်ယောနသန်သည် Sampson နှင့်အတူသဘောတူ….
Glen Beck Got အကြောင်းကိုပြောဆိုသောအမှုအားလုံး 000000000 မီဒီယာအာရုံစိုက်မှု…. အဘယ်ကြောင့် ??/ BEC ငါတို့သည်ခမည်းတော်ဘုရားမာရျနတျအောက်ပါသူတစ်ဦးလစ်ဘရယ်မဟုတ်တဲ့ခရစ်ယာန်နိုင်ငံရှိ…. ငါတို့သည်မိနစ်အစဉ်အဆက်ပြိုင်ပွဲကဒ်ကစားသူတစ်ဦးကသမ္မတပြီ .. အဘယ်ကြောင့် ? သူလိုလားသောအရာကိုရဖို့ …. မဟုတ်တရားမျှတရေးတို့အတွက်မဟုတ်အမှန်တရားများအတွက်….
အဖြူရောင်သောသူကဲ့သို့ငါ့အစ်ကိုသူအဖြူခဲ့သေနတ်အချက် BEC မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။. အဖြူရောင်သောသူကဲ့သို့ငါ့အဘနှင့်သူ့ကောလိပ်မိတျဆှေအထဲကသက်သေခံခဲ့ကြခြင်းနှင့်မြို့၏ဧရိယာ၌ဖြစ်လို့ယူဆတယ်မလူမည်းတွေ BEC အဖြူယောက်ျားလေးများတစ်ဂိုဏ်းအားဖြင့်ဝိုင်းလို့။. ငါ့ညီအစ်ကိုတို့မိတ်ဆွေတစ်သုတ်နဲ့သူတို့ကိုသွားပါစေပစ္စတိုတယ်။. ငါ့အဖေသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏စကား, လူတို့သညျတောငျးဆို ” ဗိုက်ဆာနေလား” နှငျ့ဘုရားသခငျသူတို့သည်ငါ၏ခမညျးတျောကယ်တင်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမစားဖူး သိ.…….
ငါကအနက်ရောင်သည်လူကိုမဖြစ်ကြောင်းကိုငါမူကား Trayvon အဘို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားရနှင့်အစစ်အမှန်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုလည်းမရှိသည့်အခါမျှမ…
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ဟာယိုစီးဆင်းသည်။. ရောမ 1. ဘုရားသခငျသညျစာရိတ္တပျက်ပြားမှုစိတ်ထဲကျွန်တော်တို့ကိုတက်ပေးတော်မူပြီ…. အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်မြင်ကြပြီလာမယ့်အရာကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်အချည်းနှီးဖြစ်၏။. မာကု, ငါ၏ရပ်ကွက်အမရေိကခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်တရားမဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်ငါတို့သည်လမ်းခရီး၌အသတ်ခံကြလိမ့်မည်သွားသောလမ်းအတွက်ဆက်လက်ပါ။.
Dave • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:51 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဆိုတာကိုသတိရဖို့ကခရစ်ယာန်တွေအဖြစ်ငါတို့အဘို့အကောင်းထင်ရာတစ်ခုမှာကျနော်တို့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု / မတရားမှုကိုကာလကိုမုန်းသင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုပုံစံသို့မဟုတ်ဖက်ရှင်ကလာသို့မဟုတ်အရောင်ကြောင့်ဆီသို့ဦးတည်ညွှန်ကြားထားရဲ့. Trayvon ကိုရည်မှတ်ဤကိစ္စတွင်နဲ့တူသောအရာတို့ကို ပတ်သက်. ဝမ်းနည်းဖွယ်အရာကွာဟချက်ကိုမကြာခဏကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာနေသည် & ပိုခြေလှမ်းများမဟုတ်ဘဲက forward ထက်နောက်ပြန်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်ပုံရသည်, သဘာဝကနှစ်ဖက်တာမှအများကြီးကို default ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (ဥပမာအားဖြင့်အရောင်) မဟုတ်ဘဲတရားမျှတမှု / မတရားမှုကိုအပေါ်အခြေခံပြီးနှစ်ဖက်ရွေးချယ်ရာတွင်ထက်. ဘုရားသခငျ၏နိုငျငံတျောသညျမှန်ဘီလူးငါတို့သည်ဤလောကကိုတွေ့မြင်ဝတ်ဆင်နေတဲ့လမ်းကိုပြောင်းလဲရမယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အပြေးပြိုင်ပွဲအညီသရုပ်ဆောင်ကျော်တရားမျှတစွာသရုပ်ဆောင်အကြောင်းကိုဖြစ်ရန်ရှိသည်. ကျနော်တို့တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်အမျက်ဒေါသကမီးလောင်ရာခံရကျော်သနားခြင်းကရုဏာမေတ္တာရှင်အကြောင်းကိုဖြစ်ရန်ရှိသည်.
ဤသည်နောက်ဆုံးတွင်တစ်လူမျိုးရေးပြဿနာမဟုတ်ပါ. ဒါကအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများမှာသူ့ဟာသူပြသတဲ့လူ့အပြစ်တရားပြဿနာ, တစ်ခါတစ်ရံတွင်နှစ်ဖက်ယူခြင်းအားဖြင့်ပြိုင်ပွဲအပေါ်အခြေခံပြီး. အားလုံးကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးအသွင်မြင်လာအောင်ထံမှပြည်သူ့ & တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အသွားအလာကိုယ်ရေးအချက်အလက်. ကျနော်တို့ကအခြို့သောအရောင်တက်မသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည် (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထက်ကွဲပြားခြားနားသော) ရန်သူအဖြစ်. အပွစျရှိနှလုံးသားများအသွင်မြင်လာအောင်အတူတစ်ဦးချင်းစီ. ဒါဟာအတွက်လူမျိုးမဟုတ်ဘူး & သူတို့ကိုယ်သူတို့၏နောက်ဆုံးတွင်ကြောင်းကိုပြုပါ. ကျွန်တော်မေ့လျှင် & နိုငျငံတျောသညျနိုငျငံသားမြား၏ခန့်မှန်းထားသည်သောအရာ၏အလိုင်း၏အောက်တွင်နေထိုင်လျှက်, ကျွန်တော်မျိုးနွယ်အပေါ်အခြေခံပြီးလိုင်းများဆွဲပါလိမ့်မယ် & ရုံဆူညံသံမှဖြည့်စွက်တက်အဆုံးသတ်.
ကျွန်တော်ဘက်မှာစစ်တိုက်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာတရားမျှတမှုဘို့စစ်တိုက်စေခြင်းငှါ, မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာကျွန်တော်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်သူတို့အဘို့, ဒါပေမယ့်မသက်ဆိုင်လိုအပ်၌နေသောသူတို့အဘို့. စာတနျသ & သိန်ရန်သူများဖြစ်ကြသည်. ထိုသူတို့ကလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာယေရှုရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြ & လွတ်သင်ျခြိုငျး. ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအဆိုအခြားကျော်အရောင်အနီရောင်များကသတ်မှတ်စေခြင်းငှါ, စင်ကြယ်သောကိုဆေးကြောသည်ဟုခရစ်တော်၏အသွေး၏အရောင်.
နီကိုးလ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျနော်ကျိန်းသေပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးတွင်အပြစ်ဖြေကိစ္စကိုကြောင်းသဘောတူ, ကငြင်းပယ်ခံရဖို့မဟုတ်ပါ. ဒါပေမယ့်တိကျတဲ့အပြစ်တရားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ defining ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်သူတို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီပေးသည်. လိင်လူကုန်ကူးမှုအမြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပြစ်တရားစွဲဖြေရှင်းရန်ထက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောတပ်မက်ခြင်းကိစ္စကိုပေမယ် ယူ.. ကမျြးစာကိုအဖြစ်ကောင်းစွာထိုကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ချက်များများစွာသောဥပမာရှိပါတယ်. လူအပေါငျးတို့လှုပ်ရှားမှု့ခရစ်တော်ထံသို့လူတွေကိုညွှန်ပြဆီသို့အလုပ်လုပ်သင့်တယ်, တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်တဲ့အဖြေ.
ပဲ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မခရစ်ယာန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်၏, အနက်ရောင်ဒုတိယ- သို့မဟုတ်ရိုးသားဖို့တတိယသို့မဟုတ်ပဲခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို. သူကအနက်ရောင်ကြောင့်ငါ Trayvon နဲ့သူ့မိသားစုကိုမထောကျပံ့, ဒါပေမဲ့သူတစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်သောကြောင့်. လာကြတယ်များအတွက်တစ်ဦးကသေဒဏ်ခက်လွန်းငါ့နှလုံးသို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ရန်, ငါ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်တစ်ဝါကျဖြစ်ပါသည်. Trayvon အသက်တာ၌သင်ယူဖို့သိပ်ခဲ့… ကျနော်တို့အဘို့မျက်စိနှင့်မျက်စိအဆုံးသတ်မဟုတ်, ယေရှုနှင့်အတူတစ်ဦးသွားတရားမျှတမှုသွား? Trayvon လက်ရုံးဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်တွင်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြလို့မရပါ? အဘယ်ကြောင့်သူ၏စိတ်နှလုံး? ကိုယ့်အသက်တာ၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ဒါဝမ်းနည်းမိပါတယ်, သူဘာအရောင်ကအရေးမဟုတ်ဘူး- ကလေးအသေဖြစ်၏. ကျွန်မကိုလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်ထင်, Zimmerman ပိုပြီးတာဝန်ရှိပါတယ် (ငါ့မျက်မှောက်၌) အခြေအနေကအေးဆေးစောင့်ရှောက်ရန်. ယခု, သူလုပျခဲ့? သူသည်လက်ပတ်နာရီကိုခဲ့တာတဲ့ဖော်ရွေလမ်းအတွက်ဆက်သွယ်ပြောဆို? ဘုရားသခငျသာသိတယ်. သာသညျဘုရားသခငျစစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုကိုဆပ်လိမ့်မယ်.
“ငါသိသမြှတို့အိမ်မှာငါမနေသည်နှင့်ဤ [ကမ္ဘာ] ငါပိုင်ဘယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။”
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:56 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျသူ၏စိတ်နှလုံးများအတွက်ရည်ရွယ် Zimmerman ယူဆနေကြသည်? ငါ Zimmerman အထဲက, မိမိဦးနှောက်ကိုရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေသောဆယ်ကျော်သက်မသတ်မှပိုမိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်ဟုသေချာဖြစ်ကြောင်းကို.
ပဲ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:56 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဆိုပါကျည်ဆန်စိတျနှလုံးအမှတဆင့်ဖြောင့်သွား၏, ဒါကြောင့် Zimmerman ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုခဲ့ယူဆရန်ခိုင်လုံသောပါလိမ့်မယ်.
မိမိအ preference ကိုသူအမှန်တကယ်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုမပြောင်းနိုင်ခဲ့သည်ဘာပဲ. ငါကိုထိခိုက်စေတဲ့ခံခဲ့ရလျှင်တော်တော်လေးသေချာဖြစ်ကြောင်းကို, ငါသေနတ်ခဲ့ (မဖြစ်နိုင်ဖြစ်သော), ငါသည်သူ၏အစာအိမ်ရိုက်ကူးမယ်လို့, လက်, ခြေထောက်- တစ်နေရာရာမှာအခြားဆိတ်ကွယ်ရာသူ၏စိတ်နှလုံးထဲကနေ.
Tylor • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေရဲ့ပြဿနာကိုဆွေးနွေးဆက်လက်ပါစေ, ဟုတ်ကဲ့. ဒါပေမယ့်မဟုတ်မမှန်ဤကိစ္စတွင်နှင့်အတူလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပေါင်းသင်းခြင်းကိုရပ်တန့်. သက်သေအထောက်အထားဘယ်သူမှစုဆောင်း၏တစ်နှစ်အကြာတွင်အစဉ်အဆက် Zimmerman ရဲ့အတိတ်၌ဖြစ်စေထိုညဉ့်အပေါ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၏အထောက်အထားမဆိုဖျက်စီးကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်. ရဲ့သရဲတစ္ဆေလိုက်ဖမ်းကိုရပ်တန့်ပါစေနှင့်စစ်မှန်သောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက် – မီဒီယာလူမျိုးရေးလိုမုနျးတီးနှိုးဆော့်သူတို့ရဲ့ ratings တိုးမြှင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆိတ်ကွယ်ရာကိုက်ဖြတ်ရန်ဤကိစ္စတွင်တစ်လျှောက်လုံးပြသမျိုးများကဲ့သို့.
တိုနီ Cline • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
African-Americans တွေတက်စေသည့်အခါတစ်ဦးအနက်ရောင်သည်လူကိုအခြားလူမျိုးထက်အန္တရာယ်ပိုကြောင်းယူဆပါကလူမျိုးရေးခွဲခြား Is 12.6% လူဦးရေရဲ့ဒါပေမယ့်ကျူးလွန် 49.7% လူသတ်မှု၏, အဖြစ်ကောင်းစွာမုဒိမ်းမှုအလွန်အချိုးအစားမညီမျှမှုရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်, စော်ကားမှု, လုယက်မှု, နှင့်သည်အခြားရာဇဝတ်မှု FBI က DUI မှလွဲ. ခြေရာခံ? ကြောင်းလူမျိုးရေးခွဲခြား Is, သို့မဟုတ်ပါကသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးအသိဉာဏ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရုံဖြစ်ပါသည်? ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမတည်ရှိပါဘူးကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး; မ, လူအပေါင်းတို့နှစ်ဖက်ပေါ်. သို့သော်, ကစာရင်းအင်းပိုပြီးအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းလူတွေန်းကျင်မလုံခြုံခံစားရသူကိုလူတိုင်းကတစ်လူမျိုးရေးခွဲခြားကြောင်းပြောနေထက်စကားလက်ဆုံဖို့ပိုရှိပါတယ်.
ဝါရှင်တန်ဒီစီဧဝံဂလေိ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
“ချစ်သူတို့, ကိုယ်ကိုကိုယ်လက်စားချေဘယ်တော့မှ, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်အမျက်တော်မှသူကစွန့်ခွာ, ကျမ်းစာလာသည်ကားများအတွက်, "လက်စားချေသည်ငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏, ငါပြန်ဆပ်ပါလိမ့်မယ်, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ "ဟုအဆိုပါဆန့်ကျင်ရန်,, "သင်၏ရန်သူသည်ဆာမွတ်လျှင်, သူ့ကိုအစာကျွေး; သူကရေငတ်လျှင်, သူ့ကိုသောက်တစ်ခုခုပေး; ဒါကြောင့်သင်သူ၏ခေါင်းပေါ်၌မီးခဲကိုပုံထားလိမ့်မည်။ "အဆိုးအားဖြင့်အရှုံးမယူကြခြင်းဖြင့်အဘို့လုပ်နေတာ, ဒါပေမယ့်အကောင်းအားဖြင့်အဆိုးကို။” ~ ရောမ 12:19-21
ကို C. • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါတကယ်သင်ကပြောသည်ဘာမှသဘောမတူကြဘူး, အထူးသဖြင့်လူတွေကနေ့ကအချိန်လေးထိုနေ့ရက်ကာလ၌အဆိုပါသံသယ၏အကျိုးခံစားခွင့်မပေးသောအခါကဘယ်လောက်ရုပ်ဆိုးနှင့်အတူ. သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့သိရအချို့ရဲများကအတူမိတ်ဆွေများကိုဖူးဘဲလျက်, သူတို့ထဲကအချို့, အဆိုပါသံသယများအကျိုးအတွက်ဦးသေဆုံးသူတို့အားဆည်းပူးခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ပေးခြင်း. ဤလောက၏တခါတရံဒါကျိုးခြင်းနှင့်လည်ချောင်းနာဖြစ်ပါသည်, ရပျလုံးကိုကျော်အပြစ်ရှိတယ်နှင့် junk နှင့်အတူ. သာယရှေုသညျထဲကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်.
ငါသည်သင်တို့ကြောင့်ပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြောင်းကိုမုန်း. ထိုအခါငါအချို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာပရိုဖိုင်းစူပါရုပ်ဆိုးကြောင်းကိုမုန်း, ရွားလှလိုအပ်ချက် (မ Zimmerman အမှု၌). လွန်းက၎င်း၏ခက်ခဲ, လုနီးပါးဖွင့်လှစ်ဟောပြောကြောင်းပုံရိပ်များ၏မျိုးကူးပြောင်းကြောင်းမီဒီယာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူ, ကြူးကျြောသော, မာနထောင်လွှားမတရားမှုကို. နှင့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အဓမ္မ၏ဤယဉ်ကျေးမှု၏ချွတ်ငွေရှာလူတွေရှိပါတယ်. ထိုသို့အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တူရဲ့အဘယ်အရာကိုဖွင့်နားမလညျတဲ့သူဤမျှလောက်များစွာသောလူများကအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ဓိပ်ပာယျကို သိ. အကြောင်းကိုလျော့နည်းဂရုမစိုက်နိုင်.
ငါဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ဤမျှလောက်များပြားသောကမ္ဘာကြီးကိုထက်ကြောင်းကိုချစ်. ကိုယ့်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကိုပိုမိုမကြာခဏငါတို့အားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာပြသမည်ဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒရှိ, မဟုတျဘဲကျွန်တော်တို့ကိုရှိနေသော်လည်း.
ဂရိတ်ပစ္စည်းပစ္စယမစ္စတာ. Lee က. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!
apallo95 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဟာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်စဉ်ကလူအများကြီး Zimmerman ကိုယ်တော်တိုင် Latino ခဲ့ကွောငျးမေ့လျော့ဟန်. ရုံဤကိစ္စတွင်ဆွေးနွေးတင်ပြသည့်အခါစိတ်တွင်ထားသင့်ကြောင်းတစ်တကယ်တော့ကဲ့သို့ရှိကြောင်းထုတ်ချပြီး
Lizzie • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေ၏အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရှိသည်ဖို့ယုံကြည်, ကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမပြောများအတွက်အသွင်မြင်လာအောင်ထိခိုက်စေသည်ဟုဘဝတွေကိုနထေိုငျသူမြားရိုးသားအနက်ရောင်ယောက်ျား, အပြစ်ဖြေရာထိုပြဿနာဖြစ်ပါသည်, မပေးပြိုင်ပွဲ. ငါကအနက်ရောင်ယောက်ျားမိန်းမတို့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ခေါ်ခြင်းအခွင့်ထူးခံဖူးသောသူနှင့်လမ်းညွှန်နီးပါးအပေါင်းတို့၏အလွန်မြင့်အမြင်ရှိ. ငါအရာအားလုံးထက်ထက်သူတို့ရဲ့မျက်နှာသာအတွက် biased ခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိပေါ့… ရောက်ရှိဖို့မှတ်တမ်းကိုဤအတွက်ကြီးမားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးဆံပင်ရွှေရောင်မိန်းကလေးများအတွက်ကျေးဇူးတော်၌ကြီးထွားလာနှင့်၎င်းတို့၏ဂီတအားဖြင့်အကျယ်ဆောခံရ. သင်သည်အဘယ်သို့လုပ်နေတာအလွန်အသုံးဝင်သည်.
lynn • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အာမင်အာမင်!! ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏မေတ္တာတော်နှင့်အတူကိုချစ်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုနှစ်ဦးစလုံးမိသားစုများအတွက်ဆုတောငျးရမညျ. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုမှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်ကြှနျုပျကိုမွငျဖို့အတှကျကှေဲဖှယျဖြစ်ပါသည်. ဒီမျှဝေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
Michael • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့၏ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးမတိုင်မီငါသည်စောစောယနေ့ညနေပိုင်းတွင်ဒီရေးသားခဲ့သည်, ငါလုံးဝလမ်းဖြင့်ရရာ, ငါဝေမျှမယ်လို့ထင်
ဒါကြောင့်အမှု၌သင်တို့ Zimmerman အခြားနေ့ကအပြစ်ရှိကြောင်းကိုမရှာတွေ့ခဲ့သည်ကိုကျောက်အောက်မှာပုန်းအောင်းခဲ့ကြ. တချို့ကချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြလိမ့်မည်, အခြားသူတွေပုပ်ငိုကြွေးမည်. ဤသည်အာဏာရတိုင်းပြည်နှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်ပင်ဘုရားကျောင်းကိုခှဲဝေထားပါတယ်. ငါမီဒီယာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေဖြင့်ယနေ့မှတ်ချက်ဖတ်နေခဲ့သည်, နှင့်သူတို့၏မှတ်ချက်များကိုတကယ်ငါ၏အသွေးအနာစိမ်းလုပ်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါသည်ဤအတှေးအများကြီးပေးထားတော့, ငါသည်ငါ၏ထင်မြင်ယူဆကြ, ဒါပေမဲ့ဒီ post ကိုငါအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူးသို့မဟုတ် Zimmerman ရဲ့ aquital စဉ်းစားကြဘူး. ယရှေုသညျသူခိုးခိုးယူဖို့လာသူကပြောပါတယ်, သတ်ပစ်ဖျက်ဆီး….(ယောဟနျသ 10:10) တိုင်းတစ်အသံတိတ်လူသတ်သမားဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကျနော်တို့သညျယရှေုကိုချွတ်ကြှနျုပျတို့မကျြစိကိုယူတဲ့အခါမှာငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌စိုက်ပျိုးကြသည်ခါးမျိုးစေ့ကနေပေါက်နှင့်ကျွန်တော်သတိထားမဟုတ်လျှင်ထွက်လာကြလိမ့်မည်. လုကာ 6:45 ကပြောပါတယ် “သူ၏စိတ်နှလုံး၌ကောင်းသောဘဏ္ဍာကိုထဲကသူတော်ကောင်းသည်ကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဘော်တတ်၏; နှင့်မကောင်းသောအဘဏ်ဍာတိုကျထဲကမကောင်းသောအလူသည်မကောင်းသောအရာကိုအဘွားတတ်၏; သူ၏နှုတ်သည်မိမိနှလုံးအပြည့်ရှိသည်သောအရာထဲကနေပြောတတ်. ”
ယရှေုကမိမိဝန်ကြီးဌာနကစတင်အခါ desciples politcal လှုပ်ရှားသူအဖြစ်ယေရှုကိုမြင်လျှင်. သူတို့ကရောမမြို့အစဉ်အဆက်ယုဒလူတို့အားပြုသမျှသောအမှု၌ လိုက်. တိုက်မှသညျယရှေုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ညာဘက်တိုင်းတာမှားခဲ့ကြ. ကသိမ်းပိုက်နှစ်ပေါင်းများစွာ rectifying အဓိပ်ပာယျဆိုရငျသူတို့ကဖြစ်နိုင်သညျယရှေုအချို့သောရောမတို့၏ဦးခေါင်းကွဲအက်နှင့်အတူအဆင်ပြေခဲ့ကြ. သို့သျောလညျး နေ့မှစ. တစျခုသညျယရှေုမေတ္တာနှင့်ကျွန်သည်ပါးပျဉ်းကိုဟောပြောကြ၏. တစ်ချိန်ချိန်တပည့် probablly သညျယရှေုဘရုစ်လီဘယ်သူ့ကိုမှသွားမခံခဲ့ရထွက်နေသေးတယ်. ငါသူတို့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကြောင့်ထင်သောအရာကိုအံ့ဩခြင်း? ဂျူးလူမျိုးကိုတစ်ဦးအလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းပိုက်ဆက်ဆံခဲ့. တကယ်တော့ငါသညျယရှေု၏အချိန်မှဓမ်မဟောငျးကမျြး၏နောက်ဆုံးစာအုပ်အနေဖြင့်ယုံကြည်တူတစ်ခုခုခဲ့သည် 400 အနှစ်. သိမ်းပိုက်ခံရခြင်းမှမကျေနပ်မှုများနှင့်ခါးသီးမှုအဲဒီမျိုးစေ့ကိုငုံဖူးနှင့်သူတို့တောင်မှရဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြသည်. မေရှိယကိုနောက်ဆုံးမှာလာခဲ့ကြောင်းနှင့်ထိုသို့တပ်များဝိုင်းရံကြဖို့ရန်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်, ကောက်ဆွအထဲကလက်နှင့်ရဲတိုက်မုနျတိုငျး. သို့သျောလညျးသူတို့သညျယရှေုကိုထုတ်သင်၏အိမ်နီးချင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကိုဟောနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့သင်တို့၌ပြုချင်အဖြစ်အခြားသူတွေတို့၌ပြုခဲ့မီးမီးစဉ်တွင်. အဲဒီအရူးကသူတို့ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့. ယရှေုသညျလက်ဝါးကပ်တိုင်မှဆွဲထားအဖြစ်ဒဏ်ရာစော်ကားမှုကိုထည့်သွင်းဖို့, သူမညျးတျောသညျသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်မယ်လို့ကိုမေးမြန်း, သူတို့အမှန်တကယ်သူတို့လုပ်နေတာခဲ့ကြသည်သောအရာကိုမသိသောကြောင့်,. ဒါကြောင့်ဒီအားလုံးဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?
ယရှေုသညျချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးလှုပ်ရှားသူကြီးနှင့်သူ၏ညီအစ်ကို, ညီအစ်မအဖြစ်ကျနော်တို့ထံအသနားခံနေကြ, ကျနော်တို့အတူတူလုပ်ဖို့မှာထားတော်မူကြသည်မျှ. ထိုနေ့၏အဆုံးမှာမတ်ေတာသညျအစဉျအမွဲဘာမှပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုတစ်ခုတည်းသောအရာသည် ဖြစ်.. ကျနော်တို့ကရဲတိုက်မုနျတိုငျးနိုင်ပါတယ်, ကျနော်တို့လိုချင်အားလုံးကန့်ကွက်, ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကသတိထားနေကြသည်မဟုတ်လျှင်မူကားအစဉ်အမြဲတစ်ဦးက hidden အစီအစဉ်ရှိပါလိမ့်မည်. ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အနာပျောက်စေသောအနှလုံးသားများဒဏ်ရာရခြင်းနှင့်ကျိုးဆက်ဆံရေးမှီဝဲ. ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်, ဆော, အားပေး, နှင့်သက်သာခြင်း. ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အရှုံးခံပါဘူး, သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်, ဒါကြောင့်ကူးပြောင်းနေရာ. ကျနော်တို့သေးစဉ်အပြစ်ရှိသောသူသည်ခရစ်တော်၏သည်သူ၏သွန်းသောအသွေးကိုသေဆုံးအားလုံးမှရရှိနိုင်ခဲ့ကြောင်းမေ့လျော့ဖို့အမြန်များမှာ: ငွေရတတ်သောသူ, ဆင်းရဲသောသူကို, အနက်ရောင်, အဖြူရောင်, (အကြားနှင့်တိုင်းအရိပ်)ဖြောင့်, ဂေး, မိဘမရှိသောသူငယ်, အဆိုပါကူကယ်ရာမဲ့, အိုးအိမ်မဲ့, ညှဉ်းဆဲခံရသောသူတို့ကို, ပယ်ချသည့်, ဘာသာရေး, အစ္စလာမ့်, အကြမ်းဖက်, ကလေးသူငယ်အခဗလက္သူခိုး, ဘဏ်သမ္မတ, ရှေ့နေ, အဆိုပါမီးသတ်သမား, နိုင်ငံရေးသမား, ဆရာဝန်, သည်ကဤမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှုရေးဆွဲထားပါတယ်သောအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, ယရှေုသညျသူတို့အဘို့အသေခံတော်မူ၏. ထို့နောက်သူကခရစ်တော်၏သတို့သမီးအားဖြင့်ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ၏တံခါးဖြစ်ပါစေလုပ်ရမည်တဲ့ဆန္ဒပြမှုလည်းမရှိဆိုပါက, ကျနော်တို့ကိုချစ်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်, ကျနော်တို့အစေခံပါလိမ့်မယ်, ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအဘို့ပြုထားပါတယ်အဖြစ်ကျွန်တော်ခွင့်မလွှတ်ပါလိမ့်မယ်.
အဲရစ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဘယ်ကြောင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်ဖြစ်ပါသည်, ငါအိုငျးရစျအမေရိကန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခေါ်ကြဘူး, ကိုယ့်အမေရိကန်ပေါ့, ငါအိုင်ယာလန်အတွက်ဤအရပ်၌မရှိမွေးဖွားခဲ့သည်. အသားအရောင်ခွဲခြားအုပ်စုများသို့တက်ခွဲဝေစတင်သည်ဘယ်မှာရဲ့ကြည့်ရှုပါ, ထို့နောက်ငါတို့သည်သင်တို့ထက်ပိုကောင်းနေ, စတင်. ဒါကအသားအရောင်ခွဲခြားဝတ်ရည်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု, နှစ်ဦးစလုံးမှားရှိကြ၏, Trayvon, ဇော့ slamming များအတွက်ခဲ့သည်’ မြေပြင်သို့ဦးခေါင်း, သူကမှားဘာမှလုပ်နေတာမခံခဲ့ရလျှင်ပေါင်းအဘယ်ကြောင့်သူ့ကိုလိုက်လျောမည်မဟုတ်? ဂျော့ခ်ျဟာ dispatch စကားကိုနားထောင်နှင့်ရဲများကကိုင်တွယ်ပါစေသင့်. ဒါပေမယ့်အမေရိကန်အလံ၏မီးလောင်ရာ, အာဖရိကမဟုတ်အမေရိကန်, မက္ကဆီကန်အမေရိကန်, အိုင်းရစ်အမေရိကန်, အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်, သို့မဟုတ် Scottish အမေရိကန်အလံ, ကိုယ့်အမေရိကန်, မှားယွင်းနေသည်. ဒါကြောင့်အတိုကောက်အရာရာကာကွယ်သေဆုံးသွားသည်အမေရိကန်၏စိတ်နှလုံးများပေါ်နင်းနဲ့တူရဲ့. ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပြီ Trayvon သတ်ဖြတ်မှုများ၏နာမ၌ဇော့မိသားစုနှင့်မြောက်မြားစွာဖို့သေခြင်းတရားခြိမ်းခြောက်မှုများလမ်းမှား. သခင်ဘုရားသည်သူတို့ကိုသင့်အခြားပါးကိုဖွင့်ကပြောပါတယ်, သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတာဝန်ခံ၌ရှိသောသူလည်းမေ့လျော့ကြပြီ. Trayvon မျှသူတော်စင်ခဲ့သည်, နှင့်ဂျော့ခ်ျမပါလူသတ်ခဲ့သည်, သူတို့အခြေအနေနှစ်ခုစလုံးသားကောင်များခဲ့ကြသည်. အဘယ်သူမျှမတက်ရိုက်နှက်အဘယ်သူမျှမကသူတို့ဘဝမှာပျောက်ဆုံးသွားသင့်ကိုဆည်းပူးခဲ့ကြသင့်တယ်. ဤသည်မှာပါဝါအားလုံးကိုနိုင်ငံရေးကစားခဲ့ကြီးစွာသောလှည့်ဖြားသူလိုခငျြသောအရာကိုတယ်ထားပါတယ်. နေဖို့သင့်ရဲ့စကားလုံးမဟုတ်မီဒီယာအတွက် rooted.
ပဲ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ့်အနေနဲ့အမေရိကန်စဉ်းစားခံရဖို့ LOVE မယ်လို့. မအာဖရိကန်အမေရိကန်. ဒါပေမယ့်လူ့အဖွဲ့အစည်း alas ငါ့ကိုကြောင့်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်. ကိုယ့်အခြားမည်သည့်တစ်ဦးအဖြစ်အမေရိကန်အဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကို. သို့သော်မီဒီယာတစ်ဦးသွေးခွဲ၏ဤမျှလောက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။. လူများကသို့ဝယ်ပါပြီ.
ငါရှိခဲ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်အကိုင်တွေထဲကတစ်ခုသတိရ. တစ်ဦးကအဖြူအမျိုးသမီးလာမယ့်ငါ့ထံသို့ထိုင်ပြောတယ်။. “ဒါကြောင့်သင်ကျနော်တို့ငှားရမ်းထားကြပါပြီပထမဦးဆုံးအာဖရိကန် -American များမှာသိလား?” သူမသည်ပြုံးပြီးဒါဂုဏ်ယူကြည့်ရှု. ဤအတောအတွင်း, ငါရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခံစားခဲ့ရ, ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းသူတို့ရဲ့သူတို့ကိုပြသနိုင်ဖို့အဆင်သင့်တိရိစ္ဆာန်ရုံမှာရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းအချို့မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောမျောက်နဲ့တူ “ပဌမ” အနက်ရောင်န်ထမ်းလုပ်ပေးမယ်လို့. အဘယ်ကြောင့်သူမကြောင်းထောက်ပြငါ့ကိုဒါခံစားရစေရန်ရှိသည်ခဲ့ပါ… သဘာဝထက်သာလွန်သော? ကိုယ့်ကောလိပ်မှထွက်သူမ၏ဒုတိယအလုပ်မှာပုံမှန်ဆိဖြစ်လို, ဒါပေမယ့်အစားငါအကြောက်လွန်ရောဂါရှုပ်ထွေးတွေဖြစ်လာတယ်။.
ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ငါအာဖရိကန်အမေရိကန်ဆိုကြ? ကောင်းစွာ, ငါသည်တရှေးခယျြမှုရှိဘူး?
gabetaviano • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကိုစကားလုံးများကို, ခရီးစဉ်ကို. စိတ်မကောင်းပါဘူးသင်ရှိသည်အခြေအနေများဖြတ်သန်းသွားခဲ့ရတယ်င့်. ငါသည်ဤအကြောင်းကိုအထဲကစကားပြောဘို့သင့်ကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်, နှင့်မရှိသည်ကိုသူတို့အားသတိပေးများအတွက်. အပေါ်စာနယ်ဇင်း!!!
ဒါဝိဒ်သည် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:07 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခဲ့. အိုး, ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်, သငျသညျအနက်ရောင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများမည်သူမဆိုအပြစ်တင်ဖို့ကိုယ်ကျင့်တရားအခွင့်အာဏာရှိသည်ထင်. ကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်အားလုံးလူမျိုးရေးခွဲခြားများမှာ. စိတ်မကောင်းပါဘူး, ကြောင်းအမှိုက်သရိုက်ရှည်လျားအလုံအလောက် stinking ထားပြီး. အမှိုက်သွန်နှင့်ဟုတ်တယ်ပေါ်မှာရွှေ့ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်ဖို့အချိန်.
geebee • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:08 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးသင်သည်သင်၏အသက်တာ၌လူမျိုးရေးကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြ. ငါ, လွန်း, ပဲဟုအဘို့မှာငေးကြည့်နှင့်လျစ်လျူရှုခဲ့ကြ
“မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ” ငါလမ်းပေါ်မှာရှောက်သွားစတိုးဆိုင်စာရေးများသည်သို့မဟုတ်ရှေးရှေးမှ. ငါသည်လည်းခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်ငါရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပိုင်ဘူးပြောသည်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခွင့်ရှိခဲ့ကြပြီ, ငါအဖြူဖြစ်ကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. ငါ့သမီးနှစ်ကြိမ်မဲပေးသူမ၏ညာဘက်ငြင်းဆိုထားသည်, ငါမူကားသူမထင်ကြဘူး “လမ်းနည်းပါး”. ထိုအခါမူကားငါအဘို့အစကားပြောသောအယ်လ် Sharpton နှင့် theNAACP တူသောအမုန်း mongers ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး; ငါ့ကိုအကြောင်းကိုသာ. လူတမျိုးအဖြစ်, ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်, ကျနော်တို့ပြိုင်ပွဲနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်မတူကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. နည်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်စဉ်းစား, ကျနော်တို့ပြန်ဖြစ်ခြင်းမှရရန်လိုအပ်ပါတယ် “ကြီးမြတ်အမေရိကန်အရည်ပျော်အိုး” လူတမျိုးအဖြစ်, နှင့်ဘုရားကျောင်းအဖြစ်ကျနော်တို့လက်ဝါးကပ်တိုင်ခြေမှာအားလုံးတန်းတူဖြစ်ကြောင်းကိုယျ့ကိုယျကိုသတိပေး. ပိုအပြေးပြိုင်ပွဲနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆွေးနွေး, ငါတွေ့ကြုံခံစားပိုမုန်းတီးမှု, အလှည့်အတွက်အရာ, တစ်ဦးရှင်သန်မှုယန္တရားအဖြစ်, ငါ့ကိုကအခြားလူမျိုး၏သံသယဖြစ်ဖွယ်နှင့်သူတို့ကိုဧဝံဂေလိတရားကိုချဲ့ထွင်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိစေသည်. တဖန်သင်တို့တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူရမ်းကားများကဲ့သို့ကုသခံရဖို့မလိုချင်ကြပါလျှင်, သို့မဟုတ်ပညာရှိသကောင်လေး, သို့မဟုတ် redneck, ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်တဦးတည်းတူသောပြုမူကြဘူး.
Leslie Pollard က Stivers • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:08 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤ post ကိုကိုခစျြ. ငါကိုနေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်သောအဖြစ်မှန်သတိရဖို့သင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်ငါ့နှလုံးလပ်ချိန်ကြားနာတန်ဖိုးထား. ငါမကူညီနိုငျ, သို့သော်, သင်နှင့်အခြားသူများကိုဤကိစ္စတွင်ပြောင်းပြန်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများအဘယ်သို့မိန့်တော်စဉ်းစားသောအရာကိုမေးရန်. ဒါဟာအခုအနက်ရောင်အသိုင်းအဝိုင်းလုံးဝအမှု၏အချက်အလက်များလျစ်လျူရှုကြောင်းငါထင် (သငျသညျ YouTube ပေါ်မှာတပြင်လုံးကိုအရာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်) နှင့်ကိုအရာပေါ်အတွက် singling (Zimmerman ပြုလျှင်အဘယ်သူမျှမသေချာဘို့သိတယ်နှင့်တရားခွင်ထဲမှာဇာတ်ကောင်သက်သေအထောက်အထား GZ လူဖြစ်ရမှသူ့ကိုထွက်စေပြီကဲ့သို့လူမျိုးရေးခွဲခြားမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအကြံပြု). Trayvon မြင့်မားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကို (မိမိအမှုစနစ်အတွက်ဆေးခြောက်, ယင်းသူသခှေဲစိတျခွငျးတှငျတှေ့)? အဘယ်အရာကိုမိမိအကျင့်စရိုက်အကြံပြုလျှင်သူတစ်ဦးလူရမ်းကားပါပြီစေခြင်းငှါ,? သူကတကယ်တော့ဂျော့ခ်ျကိုလိုက်နှင့်ပထမဦးဆုံးထိုးနှက်ပစ်ခဲ့ပါလျှင်အဘယ်အရာကို? ဤအမှုအရာတို့ကိုအများကြီးပိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်အရှည်မှာဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းနှင့်သက်သေအထောက်အထားသော်လည်း Zimmerman ပညာရှိရွေးချယ်မှုရာ၌ခန့်ထားပြီနိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည် (မိမိအထရပ်ကားများထဲကလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး, ဥပမာ), သူကတရားမဝင်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး. ကျနော်တို့ဒီမေးခွန်းတွေကိုအားလုံးကိုအဖြေမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်လုလင်တယောက်သည်အနက်ရောင်ကြောင့်သူကြည့်နှင့်လူရမ်းကားများကဲ့သို့ပြုမူလျှင်သူတစ်ဦးအဖြစ် profiled မည်မဟုတ်ပါမဆိုလိုပါ. အဘယ်သူမျှမကဤအကြမ်းဖက်ဆိအသိအမှတ်ပြုဟန် (Sanford ၌သူ၏ဖခင်နှင့်အတူသူတိုက်ပွဲများအဘို့ကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ခိုးယူ, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, စသည်တို့ကို) သိပ်မှားယွင်းနေဆုံးဖြတ်ချက်များလုပ်. ငါသည်သူတို့၏အသိုင်းအဝုိင်းအတွက်အတွင်း thuggery အဆုံးသတ်ဘို့အော်ဟစ်နေတဲ့အနက်ရောင်ယောက်ျားမိန်းမဆီက post ကိုမြင်ချင်. ငါကျွန်တော်တို့ကိုလူနည်းစုကပိုခရစ်တော်နှင့်တူကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်ရွယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ဆုံးမဩဝါဒ ပေး. ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုဖြစ်ချင်တယ်. ကြှနျတေျာ့နှစ်ခုငယ်ရွယ်ယောက်ျားလေးများနည်းနည်းပေါ့ပါး-skin ငါဖြစ်၏ထက်ဖြစ်ကြပြီးငါပြုအတူတူအတွေ့အကြုံများရှိသည်မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်း, ငါသည်သူတို့၏အိတ် clutch သူတွေကိုမှာပြုံးထားရန်သူတို့ကိုပြောပြခြင်းနှင့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စှနျ့ပစျမညျမဟုတျ. ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရှိကွောငျးမငြင်းလိုပါဘူး, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအခုလူမည်းထဲကနေ flagrantly ပိုဆိုးကြောင်းငါထင်. အဖြူရောင်မုန်းတီးမှုမကောင်းသောအများနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်အတူ seethes. လူတွေကသူတို့မုန်းတဲ့အရာလုပ်နေကြ. ချမ်းသာမရှိသော, အဘယ်သူမျှမခွင့်လွှတ်ခြင်း, ကမ်ဘာပျေါတှငျအမှားကိုဖို့ဒါမှမဟုတ်ကအားလုံးကိုရွေးနှုတ်တော်မူမှကိုယ်တော်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ဘုရားသခင်၌နောက်ဆုံးတွင်သစ္စာမရှိသော. တစ်ဦးချင်းစီဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားသူတစ်ဦးဦးကိုခေါ်ဖို့အခွင့်အလမ်းအပေါ်ခုန်. ခရစ်ယာန်တွေကိုခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထဲမှာအမှန်တရားတက်ကိုင်တယ်ပါပြီ. ကျနော်တို့ပြိုင်ပွဲဂိမ်းမကစားနိုင်ပါတယ်, ကျနော်တို့ယဉ်ကျေးမှုပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်းကိုများမှာ–ပိုကောင်းတဲ့အောင်မရ “အနက်ရောင်” ယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ် “အဖြူ” ယဉျကြေးမှု, ဒါပေမဲ့တက်ကိုင်ပြီးနှင့်ချစ်ခြင်းနှင့်တူသောအရာတို့ကိုအားပေးကြောင်း Judeo-ခရစ်ယာန်ယဉ်ကျေးမှု exalting, ငြိမ်းချမ်းရေး, နှင့်ခွင့်လွှတ်. ခရစ်ယာန်တွေဟာသမ္မာတရားအလင်း၌ဤအမှုကိုတွေ့မြင်ရပါမည်, နှင့်အခုအရပျကိုယူပြီးကြောင်းစစ်ပွဲအော်ဟစ်နှင့်စုန်းအမဲလိုက်ခြင်းအတွက်မပါဝင်နိုင်. နှစ်ဦးစလုံးမိသားစုများဘို့ဆုတောင်းကြလော့. ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်အားလုံးအပေါ်သနားတျောမူပါ. ပြိုင်ပွဲအပေါ်ငါ၏အကြံအစည်များကိုပိုမို & ဒီနေရာမှာယဉ်ကျေးမှု: http://wp.me/p2C5Cy-VY ကျွန်မဧည့်သည်များနှင့်တုံ့ပြန်ချက်ကြိုဆိုပါတယ်.
ဖြစ်သူ Scott Lee က Sherwood • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:08 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရစျတျောထဲမှာသူချင်းညီအစ်ကိုကဲ့သို့, ကျွန်မပထမဦးဆုံးကျွန်မဒီတစ်ဖွဲ့လုံးကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုမအစစ်အမှန် resolution နဲ့အားလုံးကာလ၌ mired ရဟန်တစ်ခုရှုပ်ထွေးပြီးပြဿနာကိုသိသောပြောပါလိမ့်မယ်, ပင်လျှင် “ဖြေရှင်းချက်” (ယရှေုသညျ) ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ်ငါ့တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကိုပြသချင်ကြဘူး, အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုငါ့ယုံကြည်မှုများ.
သင့်ရဲ့ Blog ကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်, သင့်ရဲ့မှတ် GZ ရိုးရှင်းစွာသူဖြစ်သောကြောင့် 2nd ဒီဂရီလူသတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သင့်ကြောင်းညွှန်ပြပုံ “လူမျိုးရေးအရ profiled” TM. ဒါဟာတရားစီရင်ရေးစနစ်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမဟုတ်ပါဘူး. သင်တစ်ဦးပေးရမယ့်ဂျူရီမမေးလို့ရပါတယ် “ကိုယ်ကျင့်တရား” အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်သင့်ရဲ့အသားအရေရဲ့အရောင်ကိုကြိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနိုင်ရနှင့်ရိုးရှင်းစွာတရားမျှတမှုထွက် mete. အဆိုပါအချက်အလက်များ GZ မီဒီယာ / NAACP / Celebrity ဟောလိဝုဒ် / နှင့်ဗြာအယ်လ်ကိုသင်ယုံကြည်ချင်ပါတယ်အဘယျသို့ပေမယ့်အဖြူမဟုတျကွောငျးများမှာ. သူကဟစ်စပန်းနစ် / လက်တင်နွယ်ဖွားတစ်ဦးရောနှောလူမျိုးစုများ၏နှင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုထဲမှာကြီးပြင်း. သူ “profiled” ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြာသေးမီကန့်သတ်ထားထားပြီးရပ်ရွာထဲတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းဖောက်ထွင်း၏ TM. တစ်ဦးအပေါ် hoodie နှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူ, နောက်ကွယ်မှထံမှအောက်ပါတစ်စုံတစ်ဦးက, သငျသညျကိုသူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးရေးမပြောနိုင်. ငါဘောလုံးနည်းပြနှင့်ကဆြုံးအတွက် hoodies လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ဝတ်ဆင်, နှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ခွေးသူမကငါ့ကိုအသိအမှတ်မပြုဘူးဆိုတော့အပေါ်မှာငါ့ hoodie ဖူးတဲ့အခါမှာငါ့အိမျသို့ကွှလာငါ့ကိုမှာကျိုးပဲ့ဖြစ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦး hoodie ဝတ်ထားအများဆုံးဘဏ်များသို့မဟုတ်အကြွေးသမဂ္ဂများသို့မသွားမလာနိုငျပါ. သူတို့ကဖယ်ရှားပစ်ရန်သင့်အားရပ်တန့်နှင့်မေးပါလိမ့်မယ်. တူညီတဲ့အရှိဆုံးဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဦးထုပ်နှင့်နေကာမျက်မှန်အဘို့အသွား. သူတို့ Are “လူမျိုးရေးအရကို”? ဘယ်ဟုတ်မလဲ, ဒါပေမဲ့က “ကို”, နှင့်ဤမမှား. ကျနော်တို့အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖို့အားလုံးကိုအချိန်ကပြုပါ. ထိုအဟုတ်, ငါမတိုင်မီစတိုးဆိုင်လုံခြုံရေးအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီ, ငါမပြုမီရဲကရပ်တန့်ခြင်းနှင့်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြ, သည်စတိုးဆိုင်အများစုအထက်တန်းကျောင်းအနီး, သူတို့ကျောင်းသားများကကျောပိုးအိတ်နှင့်အတူမဝင်စေမည်မဟုတ်သူတို့သည် store မှာကျောင်းသားအရေအတွက်ကန့်သတ်ရန်. ငါကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်ငါအသက်ရှင်သည်မြို့ကိုယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါသည်. ငါ၏အဒေသခံ Safeway နှင့် Walmart ကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်အများစုအတွက်, လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်အရှုံးကာကွယ်တားဆီးရေးအဖွဲ့များအနက်ရောင်များစွာသောလူနည်းစုများ, အာရှ, ဟစ်စပန်းနစ်တိုင်းရင်းသား. သူတို့ဖြစ်နိုင်သည်တစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်၏တစ်စုံတစ်ဦးကိုသံသယရှိရင်, သို့မဟုတ်လျောက်ပတ်တဲ့ “ပရိုဖိုင်းကို”, သူတို့စတိုးဆိုင်န်းကျင်ကသူတို့ကိုအတိုင်းလိုက်နာသို့မဟုတ်သူတို့ကိုတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်လျှင်ကြောင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဖြစ်တယ်, သို့မဟုတ်ပင်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအနက်ရောင်လျှင်မေးမြန်းဘို့ထိုသူတို့ရပ်တန့် ..? ငါကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရပါတယ်, ဒါကြောင့်တရားဝင်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုင်.
ဒါဟာစီရင်ချက်နှင့်အတူစိတ်ဆိုးဖြစ်ကြပြီးအကြောင်းအရှိဆုံးအသံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရှေးရှေးအများစုနည်းနည်းနဲ့ TM အလိုအလျောက်ရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခဲ့ ranting ဖြစ်ကြောင်းငါထင်. ဒီနေ့နေ့နှင့်အသက်အရွယ်အတွက်, လူ့အသက်အဘို့အပြံ့နှံ့ရာဇဝတ်မှုများနှင့်အရေးမစိုက်နှင့်အတူ, ဂုဏ်အသရေညျမှုနှငျ့တူသောတရားစကားတစ်ပင်လယ်၌ရှုံးနိမ့်ထားရာ “ငါ့အဘို့အထဲတွင်ဘာ” ကာပြံ့နှံ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးစိတ်ဓာတ်, ဤအရှေးရှေးအများစုသင်တို့တွင်အသင့်လျော်သောအဓိပ်ပါယျကိုမပေးနိုင် “နိုင်ငံသားရေးအခွင့်အရေး”. သူတို့ကဗြာအယ်လ် Sharpton တူသော jackwagons နောက်ကွယ်မှတန်းစီခိုင်းတယ်, နှင့် NAACP နှင့်ရာခေလသည် Jeantel လိုလူကနေလူမှုရေးအဝိဇ္ဇာ exploit နှင့်သူမ၏သူတို့ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိစ္စများအတွက်ပိုစတာကလေးအလုပ်. အမှန်? ဤရှေးရှေးကတော့စစ်တိုက်ခြင်းငှါကောက်ယူများမှာ “နိုင်ငံသားရေးအခွင့်အရေး” အနက်ရောင်အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုစစ်တိုက်? ဤရွေ့ကားသင်နှင့်အတူရပ်လိုသူများမှာ? ကျေးဇူးပြု. ငါဒေါက်တာထင်. သူကဤကဲ့သို့သောဆပ်ကပ်ရှေးရှေးကတော့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတိုက်ပွဲလှည့်အရာကိုတှေ့မွငျလြှငျ, မာတင်လူသာကင်းငိုကြွေးရလိမ့်မယ်, သို့. အမှန်မှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအနက်ရောင်အမေရိကတိုက်များအတွက်တော့ဘူးအဓိကရန်သူမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်. ပင်ကိုအနီးကပ်မပေး. Black ကရာဇဝတ်မှုအပေါ်က Black, မိသားစုယူနစ်များ၏အစဉ်အမြဲပြိုကွဲခြင်းဖြင့် birthed, နှင့်အစိုးရသင်တစ်ခုခုကြွေးတင်နေသည်ဟုသူကပြောပါတယ်တဲ့စနစ်ဖြင့် catalyzed, သငျတို့သဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်, start ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, သင်အမှန်တကယ်အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီကြီးအနက်ရောင်အသိုင်းအဝိုင်းမျက်နှာများ hit ချင်တယ်ဆိုရင်. ဤအတောအတွင်း, အဲဒီမှာဖြေရှင်းချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောသူအချို့ရှိပါသည်နှင့်ဤအတွေးအခေါ်အချို့ကိုဖြေရှင်းရန်နေကြတယ်. ပြည်သူ့ပေါ်လစီသုတေသနနှင့်၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာမှာရှေးရှေး 21 Initiative မှငါနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် align နှင့်တနေ့လုံးကိုထောကျပံ့မညျဖွစျကွောငျးရှေးရှေးများမှာ.
နောက်ဆုံးတွင်, ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာအစဉ်အမြဲမ. ထိုသို့တစ်ကြိမ်နှလုံးဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်.
ငါ့ကိုငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနေ့စဉ်တည်ရှိခြင်းနှင့်ဖြစ်ပျက်ကြောင်းသိသောဟုအဆုံးသတ်ကြစို့. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ထက်ပိုကြီးများမှာ. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၏ညစ်ညူးကိုက်ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်သောမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုကျော်လွှားနှင့်မုန်းတီးမှုထက်ပိုကြီးဖြစ်သညျဘုရားသခငျအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထားသည်. အနက်ရောင်အမေရိကန်သမိုင်း၏အကြီးယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုအဓိကအားဖြင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသူတို့ကိုလောင်ခွင့်မရသဖြင့်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့မိမိတို့အမှတ်အသားလုပ်. သူတို့အခွအေနအထက်ထဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကြ. သူတို့ကတစ်ဦးဆင်ခြေဆင်လက်အဖြစ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်သုံးနိုင်ခြင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့မ. အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်ထံမှထိုဇွဲနှင့်ခွန်အားကိုအဘယျသို့ဆိုမျက်နှာနေပါစေသို့အသာပုတ်ပါဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုအဘို့လည်းမရှိ.
စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, နှငျ့ဘုရားသခငျကိုသင်ကောင်းကြီးပေး ..!!
alan_d • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:09 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ငါပညာတတ်တန်ဖိုးထား, nonpartisan, ဒီ post များ၏ခရစ်ယာန်ရှုမွငျခ. ရုံရှိသေးသူကထွက်ရဖို့, ငါ OK ကိုနေထိုင် AL ကနေ 26yr ဟောင်းအဖြူ grad ကျောင်းသားပေါ့. သို့သော်, Auburn မှဘွဲ့ရပြီးနောက်4လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ, ငါ D.R တှငျနထေိုငျသို့သှားကွ၏. အဘို့အကွန်ဂို2အနှစ်. ငါဝန်ခံ, ကြီးပြင်းလာသည်, ကျွန်မခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်မတိုင်မီ, ငါကဲ့သို့သောလူမျိုးရေးခွဲခြားအဖြစ်အများကြီးခဲ့သည် 85% ခံခဲ့ရပါတယ်ငါ့ကိုပတ်လည်ရှိဆင်ခြေဖုံးယဉ်ကျေးမှု၏. သို့သော်, ခရစ်တော်သည်ငါပေးထားတဲ့သစ်ကို-နှလုံးကြောင်းပြောင်းလဲသွားပြီ.
အဆိုပါအချက်ဖြစ်ပါသည်, ကွန်ဂိုတွင်နေထိုင်စဉ်, စာသားမဆိုပေးထားသောအချိန်ကငါ့ကိုလှည့်ပတ်လူတိုင်းအနက်ရောင်ခဲ့သည်. ကျွန်မပတ်ပတ်လည်နေထိုင်ခဲ့လူမျိုးကိုချစ်, ပတ်ပတ်လည်အလုပ်လုပ်ခဲ့, ကျွန်မတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းနှင့်လူတိုင်းနီးပါး. သို့သော်, ကြောင်းယဉ်ကျေးမှု၌, ငါ profiled လူတွေနေဆဲရှိကြ၏. ရောင်းဖို့ဘာမှမပါဘဲဈေးကွက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်လုလင်တို့သည်, ဘာမှမတွင်သို့မဟုတ်မည်သည့်အကျိုးစီးပွား, ဥပမာ. အကြှနျုပျ၏အိတ်ကပ်နှစ်ကြိမ်ရှင်းလင်းခဲ့သည်, ငါယောက်ျားတွေဖမ်းပြီးပြန်ငါ၏အ Nokia အုတ်ရရန်လုံလောက်အမြန်ခဲ့သော်လည်း. လည်း, ရဲ * ယေဘုယျအားဖြင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှု * ခဲ့ကြသည်. သူတို့ကိုငါငါယူနီဖောင်းအတွက်မည်သူမဆိုကိုမြင်လျှင်အခါတိုင်း profiled. ငါရပ်တန့်ခဲ့သည်, အဖမ်းခံရ, သို့မဟုတ်ငါရဲ / တပ်သားများကရေတွက်နိုင်ထက် ပို. အဆနှောင့်ယှက်, ငါသိကြှမျးသောဒေသခံများအများအပြားကဲ့သို့. သူတို့အနက်ရောင်ဖြစ်ဖြစ်ပျက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားငါ့ကိုလူတွေကသူတို့အမျိုးအစားများကိုယ်ရေးအချက်အလက်ရန်အဘို့အစေပါသလား? ဒီနည်းအတိုင်းပဲ, ငါသံသယဖြစ်ဖွယ်ကြည့်ထင်တဲ့လူဖြူအတိတ်လမ်းလျှောက်သည့်အခါငါသည်ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားဘက်ခြမ်းမှကျွန်တော့်ဇနီးရွှေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလူမျိုးရေးခွဲခြားဖြစ်ပါသည်? ၎င်း၏တူညီတဲ့အယူအဆ, ငါကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရကြောင်းတင်ပြ. အကြှနျုပျ၏အမှတ်ကိုသဘာဝလူ့ဗီဇသည်နှင့် * လူမျိုးရေးခွဲခြား * ခံရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး.
အဒေါ့ဖ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:09 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးရာဇဝတ်မှုဖြစ်ချင်မပါဘူးဆိုရင်, ဖြစ်ကောင်းသူတို့ကယူနီဖောင်းမဝတ်သင့်တယ်. ယနေ့တွင်, နီးပါး 70 ကမ္ဘာကြီးကိုစစ်ပြီးနောက်အနှစ် 2. သင်တစ်ဦးနာဇီယူနီဖောင်းဝတ်ထားသူတစ်ဦးဦး၏အဘယျထင်လိမ့်မယ်? ဒါဟာကိုယ့်ညာဘက်ကိုအဝတ်ရဲ့?
gdoggydog05 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
လည်း. ကိုယ်ကလူမျိုးရေးခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်. ဆုချီးမြှင့်သို့မဟုတ်စည်းကမ်းမှအပြေးပြိုင်ပွဲအပေါ်အခြေခံပြီး. နှင့်ဆိုပါကသင့်ရဲ့အဖြူရောင်သတင်းစာဆရာကြောင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ငါကဲ့သို့သော….သငျသညျအပြေးပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှားယွင်းတဲ့အရာလို့ပြောလျှင်သင်ပစ်ခတ်ရ. ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အနက်ရောင်သတင်းစာဆရာလျှင်သင်ပိုမိုအဖြူလေးတွေသေဆုံးရမည်ဟုဆိုနိုင်, နိုင်ရန်အတွက်အမေရိကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အဘို့အ (အောက်ခြေမှာ link ကို). ကြည့်ရှု, ဤအမှုသည်ငါ့အချက်ဖြစ်ပါသည်. ကိုယ်သာထိုအမှုအရာများသည်အပေါ်သမားများငါ, ကိုယ့်ခရစ်ယာန်တွေကိုအမြဲနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပြိုင်ပွဲကိစ္စများရှိပါလိမ့်မည်ကိုနားလည်ချင်သောကွောငျ့. ကိုယ်ငါတို့သည်ဤလောကကဲ့သို့တူညီသောလမ်းကြောင်းသွားနှင့်သူတို့ကိုအပေါ်တံခါးကျင်သင့်တယ်ထင်ကြဘူး. လူမည်းဆန့်ကျင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဥပမာ, သင်သည်အခြားလူမျိုးဆန့်ကျင်အချို့သောရှာတှေ့နိုငျ. ကိုယ့်ကျွန်ခံနေတဲ့ horrid အရာနှင့်ငါ၏ ancesters ခဲ့ကြောင်းနားလည်ကြပါသော်လည်း, အမှန်တကယ်, အဖြူအကြှနျုပျ၏အနက်ရောင်ညီအစ်ကို, ညီအစ်မဘိုးဘေး through.we ရန်ကြိုးစားရန်မည်သည့်လူမျိုးမှဖြည့်တင်းမနေသင့်ပြီနားလည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ် “ညီမျှ” အမှုအရာ. ပွိုင့်များတွင်သက်သေတဦးကိုမှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဤသို့ပြုဘယ်တော့မှမယ်လို့ဖြစ်ပါသည်!!! ပြိုင်ပွဲအပေါ်အခြေခံပြီးအနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည်လက်ကိုပညာသင်ဆုလို??? ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှ. ဒီတစ်ခါလည်းဝင်ငွေပေါ်တွင်အခြေခံ. သို့သော်ဘုရားသခင်ကပြိုင်ပွဲအပေါ်အခြေခံပြီးမျက်နှာသာပြသတော့မှ. ဣသရေလအမျိုးကိုရှေးခယျြခဲ့, မပေးဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုတစုံတခု၏, သာသျောလညျးဘုရားသခငျရဲ့ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များ. အကြှနျုပျ၏ “သူငယ်ချင်းဟောင်း” ဒီအမျက်သိုနေကြ, ထိုသို့သာသူတို့ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားအတွေးများကိုတိုးပွားစေ. “လက်ကမ်းစာစောင်” နှင့် “နှစ်ဆစံချိန်စံညွှန်းများ” အမျက်ဒေါသကသူတို့ကို. ထိုအမျိုး-၏ပြောပါတယ်သောအငြင်းအခုံ “ကိုယ့်ရုန်းကန်နားလည်အတွက်မရှိမဖြစ်” ငါ့ထံသို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆိုးဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်ကိုယ့်သာငါ၏အအနက်ရောင်ညီအစ်ကိုတွေနဲ့ဒါဝေးသွားရနိုင်သည်ကိုပြောပါတယ်… ကိုယ့်ကိုတကယ်သော်လည်း၎င်းတို့၏အစ်ကိုဖြစ်ဘယ်တော့မှ, ငါက၎င်း၏သူတို့ကိုဖြစ်လိုဘယ်အရာကိုနားမလည်ကြဘူးအကြောင်းမရှိ. အနက်ရောင်လူသား၏အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဝေယူကပြောပါတယ်, ထိုကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုမှီဝဲခြင်းထက်ပိုပြီး. ဒါကကျွန်မဒီဆောင်းပါးသတိလစ်ဟုတွေ့မြင်ကဘာလဲ. တကယ်တော့ဒါဟာ profiled ခံရဖို့နဲ့တူသောအရာကိုသိလား. တစ်ခါတုန်းကဆိခဲ့သည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်ခက်ခဲတဲ့ကြိမ်ဖြတ်သန်းသွား. သငျသညျကင်ဆာနဲ့ mom, တိုရန်၎င်း၏ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုမသိစေခြင်းငှါ, ငါကဲ့သို့သော. ဒါမှမဟုတ်သင်ကကိုယ့်အခါမကောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုနေရာဖြစ်သည်ထံသို့စလှေတျခံရဖို့နဲ့တူဘာမသိစေခြင်းငှါ 12 အသက်အနှစ်, ငါ၏အအဖြူရောင်အားဖြင့်လျစ်လျူရှု, ကြွယ်ဝသော, သူတို့သညျငါ့ကိုမချစ်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်တွေးမိဖို့ဆင်ခြေဖုံးမိသားစုနှင့်လက်ဝဲဘက်. ဤနေရာတွင်ရမှတ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမစတင်ကြပါစို့. ဒါကလုံးဝသူတို့အားထူးခြားသောအတွေ့အကြုံများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်အတိုင်မလျော်ကန်သောရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ကိုအတူတူလာနှင့်ကျွန်တော်အသေခံထိုက်တန်သည့်အခါကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ပေးထားပြီကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ကြစို့.
အဲလက်စ် Ericsson က • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ Highly ကြောင်းခရီးစဉ်ပြိုင်ပွဲများ၏အခြေခံပေါ်မှာညီအစ်ကို, ညီအစ်မကင်းကွာဖို့ရှာကြံနေသည်သံသယ. သူဟာမကြာခဏနှင့်ခေတ္တနားခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရာများအတွက်အများစုအဖြူအသင်းတော်၌အနက်ရောင်ယောက်ျားသည်င်. ဒါပေမယ့်တခြားယဉ်ကျေးမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူထူးခြားတဲ့နှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် incongruent ဖြစ်ကြောင်း America မှာအနက်ရောင်ဖြစ်ခြင်း၏ဒြပ်စင်ရှိပါတယ်!
ဒါဆိုကျေးဇူးပြုပြီး, ငါသည်သင်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့၏တောင်းပန်, စစ်မှန်သောစာနာမှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝကိုယ်ချင်းစာအကြားခြားနားချက်ကိုနားလည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကို, ညီအစ်မနှင့်အတူလမ်းလျှောက်အဖြစ်, ကျနော်တို့ shared အတှေ့အကွုံဘွားမြင်ရာအရပ်စာနာထံမှဆုံးမစကားကိုမှအနည်းငယ်အခွင့်အလမ်းများရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မကြာခဏစိတ်ရှည်ဖို့ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်, အဓိပ္ပါယ်ရှိသောကိုယ်ချင်းစာ၏အလုပ်မေတ္တာရှင်. ကျနော်တို့လူတွေတွေ့ကြုံပြီအခက်အခဲတွေကိုနားထောင်ဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်, သောတံပိုးမှုတ်ဖို့ဟာသူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံတန်ပြန်ဥပမာကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ဆငျးရဲဒုက်ခ၏တရားဝင်မှုအသေးအဖွဲဘယ်တော့မှ, နှင့်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွံဉာဏျကြောင်းယူဆ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအစေခံစေခြင်းငှါသော်လည်း, ၎င်းတို့၏နာကျင်မှု assuage တစ်ခုချက်ချင်း panacea လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ပျက်ယွင်းစေခြင်း, သို့မဟုတ်ပင်အမျက်ဒေါသ.
ကျွန်တော်တို့ကိုအသင်းတော်၌ (ESP. လူမှုရေးမီဒီယာကနေတဆင့်) ကမ္ဘာ၏အမှုအရာအပေါ်ဖယောင်းဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ပေမယ့်အဆုံးသတ်
ပိုပြီးယောဘ၏အာရုံမခံစားနိုင်သောမိတ်ဆွေတွေကိုများကဲ့သို့မြည်. အခုတော့လူတွေရှုပ်ထွေးပြီးအလွန်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အခါအချိန်ဖြစ်ပါသည်. အားလုံးအရောင်များ၏ပြည်သူ့ဤကိစ္စတွင်၏ရလဒ်ကိုနှင့်အတူညှိုးများမှာ. သူတို့ထဲကအများစုဟာသည်းခံခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောသက်သာခြင်းလိုအပ်ပါတယ်. မဥပဒေ system ပေါ်တွင်ဟောပြောပွဲသို့မဟုတ် “အကျင့်ပျက်မီဒီယာ”, မဟုတ်ငါးစာ-and switch ကိုဥပမာ, မဟုတ်အထင်အမြင်သေးသည့်နိုင်ငံရေး punditry. နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်တကွသင်နှင့်တူသညျယရှေုသူတို့ကိုထောက်ပြ.
ဒိနရော်ဘင်ဆင် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါလူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေးတုန်းက, မူလတန်းအသက်နှင့် ပတ်သက်., ငါလူမျိုးရေးအရထို့နောက် Eckerd မူးယစ်ဆေး Store ကဘာအတွက် profiled ခဲ့သည် (ယခု CVS). ငါဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုကြောင်းအသက်အရွယ်မှာမသိခဲ့ပါ, ဒါပေမယ့်ငါကမဖြောင့်ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်သိတယ်. ငါသည်ငါ့ mom, အတူရှိ၏နဲ့ကျွန်မရရှိခဲ့ဖူး $20. ငါရတတ်၏ထင်. ငါ store မှာအချို့သောသကြားလုံးနှင့်အခြားသောအရာတို့ကိုမဝယ်ချင်ခဲ့တယ်. ဒါပေမယ့်အရောင်းစာရေးများသည်တဦးသည်ငါ့ကိုတစ်ယောက်တည်းအတန်းမှာလမ်းလျှောက်မြင်သူမကကျွန်မခန့်မှန်းအမှားတစ်ခုခုကိုခိုးယူသို့မဟုတ်လုပ်ဖို့သွားခဲ့ပါသည်ယူဆ. သူမသည်ကျွန်မကိုစတိုးဆိုင်တစ်ဝှမ်းလုံးကိုနောက်တော်သို့လိုက်. ဒီအမျိုးသမီးငါ့နောက်သို့လိုက်ရှိသည်ဖို့နှောင့်အယှက်ခံစားခဲ့ရ. ငါနောက်ဆုံးတွင်အတန်းမှာ၏တဦးတည်းအပေါ်မှာငါ့ mom, ရှာတွေ့နဲ့ကျွန်မတော့ဘူးစျေးဝယ်များကဲ့သို့ခံစားမိခဲ့ပါဘူးသူမ၏ပြောသည်. ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစတိုးဆိုင် left သောအခါငါသူမ၏ပြောသည်နှင့်သူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ငါခိုးယူသွားခဲ့သည်ထင်ကပြောပါတယ်. ဒါဟာသူမအနည်းငယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးသူခိုးကဲ့သို့ကြည့်ရှုထင်ငါ့ကိုဝမ်းနည်းလုပ်. ကောင်းတဲ့စတိုးဆိုင်တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တူညီသောအရာဖြစ်ခြင်းမှအစာရှောင်ခြင်းရှေ့သို့. ငါအရာမျိုးဒီရက်ဒီလိုမဖွစျသငျ့တယျလို့ထငျမှနုံခဲ့သည်. သို့သော်ကံမကောင်းစွာ, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသေသညျမ. သည်းမခံသောလူအမေရိကန်တွေသို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေဟာရှိမရှိတခြားသူတွေရဲ့ကွဲပြားမှုအဘို့မဟုတ်, လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်ဖြောင့်, အဆီသို့မဟုတ်ဂျပိန်, ပညာတတ်သို့မဟုတ်အောက်မှာ-ပညာတတ်, ငွေရတတ်သောသူသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကို. အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကျင်းပနေ၏ကျနော်တို့များမှာ “သညျးခံ” တစ်ဦးကိုတစ်ဦး. ငါတို့ရှိသမျှသည်အခြို့သောအစွဲကိုဘွားနဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုချစ်သကဲ့သို့ငါငါသည်ငါ့အိမ်နီးချင်းမေတ္တာရှင်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသိကျွမ်း. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ပြောင်းလဲသွားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
“Pre-တရားသူကြီး” သင်နှင့်သင်မည်သို့ကြောင့်တုံ့ပြန်. ငါကအနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးသူတစ်ဦးသည်သားကို
Troy Frasier • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:12 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မတို, ကြှနျုပျကမကျြနှာဖွူပါ, ငါကလေးတစ်ဦးအဖြစ်နှင့်လူကြီးအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးတူညီသောအရာကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြ…. အဲဒီဖြစ်ရပ်မျိုးနွယ်ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဘူး. တကယ်တော့, ဟားဟား, အကြိမ်ပေါင်းများစွာစာရေးများသည်ဆိသကဲ့သို့ငါ့ကိုလှည့်ပတ်နောက်တော်သို့လိုက်, အပျိုပေါက်, စသည်တို့ကို. ယခုပင်ငါ Wal-Mart သို့လမ်းလျှောက်သည့်အခါကင်မရာများငါ့နောက်သို့လိုက်သေချာဖြစ်ကြောင်းကို, LP သို့အလုပ်လုပ်တယ်မူသောငါ့မိတ်ဆွေတစ်ငါကပုံရသည်သူခိုးကဲ့သို့လမ်းလျှောက်ပြောပါတယ်အဖြစ်…. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, . ဒါဟာဖြစ်ပျက်! :)
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:12 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤတဦးတည်းအပေါ်ချားလ်စ် Barkley နှင့်ဘီလ် Cosby နှင့်အတူဘက်… မီဒီယာအမျိုးသားရေးအဓိကရုဏ်းရှုပ်ထွေးသို့ဝမ်းနည်းဖွယ်ဇာတ်လမ်းမှုတ်. ငါ Zimmerman အား NBC နှင့် ABC ရုပ်သံအပေါ်ကဲ့ရဲ့ခြင်းတရားစွဲမှုနှင့်အတူရှေ့ဆက်လှုံ့ဆျောမျှော်လင့်ပါတယ်.
Antoine Mason ဆို • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:12 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျချားလ်စ် Barkley နှင့်ဘီလ် Cosby ညာဘက်အမှုပတျဝနျးကငျြကိစ္စရပ်များအပေါ်သဘောမတူဘူးကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြပါ?
ဂျော့ခ်ျ Lewis က • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဆိုပါဆွေးနွေးမှုအပေါငျးတို့သငါတို့သည်ပညတ်တရားတော်ကိုယ်တိုင်ကပယ်ဖျက်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်. moveon.org @ ငါ့အအားထုတ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးပါ . အဆိုပါ Trayvon လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတစ်ဦးကအသနားခံစာတွေ့နိုင်ပါသည်. WE လက်မှတ်ထိုး ကျေးဇူးပြု. လိုအပ်ချက်များနှင့်ကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်အမေး , စောင်ရေပေးပို့ , သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအားလုံး Retweet နှင့်မေးဖို့ , အတူတူလုပ်ဖို့မိသားစုနှင့်အဆက်အသွယ်. ဒီမကောင်းတဲ့တရားကိုကအပြောင်းအလဲမရှိဘဲဤအခွအေနေကိုထပ်ဖွစျနိုငျ.
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တီ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
“ယူဆချက်ဤမျိုးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်များနှင့်အယူမှားကြသည်. ဘုရားသခင့တန်ဖိုးနှင့်ထိုက်တန်နှင့်အတူသူ၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီအားလုံးလူသားတွေဖန်ဆင်း. သို့သျောလညျးကိုအားလုံးကိုအပွစျရှိဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်သင့်အဖြစ်ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်ဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်. ကျွန်တော်တို့ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတစ်ငါ​​တို့အပြစ်များကိုဖွင့်နိုင်, ခရစ်တော်ယုံကြည်စိတ်ချ, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်အားဖြင့်မှန်စေ. ဒီအမှန်တရားတွေမှလျှောက်ထားရပါမည်သည့်လူဒါပေမယ့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကရွေးခြယ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်း. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကပြောပါတယ်, "ငါသည်အဖိုးတန်နှင့်ကောင်းမွန်သောရယ်, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်လူဆိုးဖြစ်ကြသည်။” – သမ်မာကမျြး Up ကိုညီအစျကို Lee က!
နိုငျငံတျောအမေရိကန်ခရစ်ယာန်ဘာသာအတွက်စနစ်တကျဖိနှိပ်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖို့ blinders ချွတ်ကြာလာတဲ့အခါ, အထူးသဖြင့် White ကအာဏာ၏ပုံစံ, အရင်းရှင်စနစ်နှင့်ဖခင်အုပ်စိုး, ကျွန်တော်ကျွန်ခံရာသံကြိုးကနေချိုးမည်. ဤတရားစကားတော်၏ပြောတတ်မြင့်သောအရပ်တို့၌အထွဋ်အမြတ်နှင့်ဝိညာဉ်သည်ဒုစရိုက်များမှာ.
မစ္စတာ. 116 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သူမကသူမ၏ကြမ်းတမ်းခင်ပွန်းတိုက်ခိုက်ရန်မယ်လို့ကြောက်သောကြောင့်တစ်ဦးကအနက်ရောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖလော်ရီဒါအတွက်သတိပေးရိုက်ချက်များပစ်သတ်. သငျသညျဖြစ်ပျက်ကိုသိ, သူမအဘို့အကဉျြးထောငျကခြဲ့တယျ 20 အနှစ်.
George Zimmerman ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့လူငယ်တစ်ဦးအနက်ရောင်ဆိရိုက်, သူအပြစ်မဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်?!? အမှန်?? လူမျိုးရေးဝါဒ, အများဆုံးကျိန်းသေ, ဤကိစ္စတွင်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်. ထိုသို့စဉျးစားကွညျ့.
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:16 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
lewrites • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:16 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မဇာတိ / အဖြူအမေရိကန်ဖြစ်ကြောင်းကို, ငါ့ကိုအတွက် Native ဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း, ငါ့အရေသေံအလွန်မှောင်မိုက်သည်နှင့်ငါ Native တူသောအလွန်ကြည့်ရှု. ငါလူဖြူများကခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ကြရတယ်, လူမည်းများက, သငျတို့သ၏စဉ်းစားနိုင်မယ့်အကြောင်းကိုနေ့စဉ်ပြိုင်ပွဲအားဖြင့်.
DC အ Talk ကိုဖွင့်သီချင်းအသွေးအရောင်စုံပြည်သူ့အတော်လေးကြင်ငါ၏အကြံအစည်ကဉျြးရုံးဖျော:
မီဒီယာအပြစ်တင်ဖို့အလွန်ဖြစ်ပါသည်. သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရပ်တွေကိုမီဒီယာကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမွေးသောအရာကိုရှည်. ကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်အရောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည် ထောက်. , ငါတို့သည်ရူပသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များအပေါ်အခြေခံပြီးအခြားသူတွေအပေါ်လွန်သွားသည့်တရားစီရင်ပိုင်ကိုတွေ့မြင်လိုလျှင်, ကျနော်တို့တောင်မှသူတို့ကိုမသိရပါဘူးသည့်အခါ…ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့ကဤအတားအဆီးဖြိုဖျက်ဖို့အလုပ်လုပ်နှင့်မီဒီယာမဆိုပိုပြီးအစာကျွေးခြင်းကိုမပေးနိုင်.
Joanette: D. Clemons • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:17 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤကိစ္စတွင်မရသာ SYG ဥပဒေအကြောင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေးအငြင်းအခုံအကြောင်းကိုလည်းဖြစ်ပါသည်. ကလေးသူငယ်အခအနှစ်သာရအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့သည်. ဤကိစ္စတွင်တရားလူတစ်ဦး၏တာဝန်မည်သို့ရှုမြင်အကြောင်းကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်, GZ, အဘယ်သူသည်ပျက်ဆီးလမ်းအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထား. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်အဘယ်မှာမ, ဘုံအသိနှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုဒီအခြေအနေကိုအတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစား? ဘယ်အချိန်မှာရာခေလသည် Jenteal (စာလုံးပေါင်း၏သေချာမ) တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်, လို့သူကပြောပါတယ် “သံသယဖြစ်ဖွယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသငျသညျအောကျပါသောအခါ, သင်၏မိဘများသောသင်သင်ပေး, သငျသညျကို run သင့်တယ်. အဘယ်သူမျှမမိဘမိမိတို့၏ရပ်တည်ရန်မိမိတို့ကလေးသွန်သင်. သူတို့အမှုကိုပြုလိုလျှင်, သူတို့အဘယ်သူမျှမကလေးသည်ရှိလိမ့်မယ်။” TM အလိုအလျောက်ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်. သူကသူတို့ရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် GZ အားဖြင့်ရဲဖော်ပြထားခဲ့သည်. ဒီအကွေးမြားမဟုတျပါဘူး, ဤအချက်ကိုဖြစ်ပါသည်. Trayvon လူကြီးသို့ကြီးထွားလာကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်. GZ ရဲခေါ်သည့်အခါ, သူကညာဖက်အရာကိုပြု၏, သူကအခွင့်အာဏာ၏အလိုတော်ဆန့်ကျင်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်သောအခါ, သူကထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်အခြေအနေကအားလုံးမှားယွင်းနေထွက်လှည့်. ဝိညာဏဟောင်း။: ကျနော်တို့ကဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဆုတောင်းပဌနာခဲ့ကြပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအခွအေနကိုင်တွယ်ကူညီဖို့ဘုရားသခငျသညျဟုမေးနှင့်အကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်အမှီထက်ငါတို့အားဖြင့်ကြည့်ဖို့အခှငျ့အာဏာစစ်မှန်တဲ့အသံကိုနားထောင်ခြင်း. Trayvon ဤနေရာတွင်ခ / ဂ GZ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ကိုထောက်မဟုတျပါဘူး. သူလုပ်မအဘယ်သို့သောအကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စုံစုံညွှန်ကြားချက်ပေးထားခံရပြီးနောက်မိမိလက်သို့ကိစ္စရပ်များယူ. ငါစေတနာ့ဝန်ထမ်းရပ်ကွက်အတွင်းလက်ပတ်နာရီအရာရှိအဖြစ် GZ ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါဝင်သည်သောအရာကိုသိရန်လိုခငျြ. ငါမှာဤစာအုပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ http://www.usaonwatch.org/assets/publications/0_NW_Manual_1210.pdf စာမကျြနှာကိုဖတ်ပြီး ကျေးဇူးပြု. 27 အခန်း၏ 6. ဤသူသညျမိမိအဘောငျထက်အလွန်အကျွံနှင့်ဒုက္ခသို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်၏ညာဘက် OUT သို့ပွေးလေ၏. သူကတိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်မနာခံခြင်းနှင့်ထိတ်လန့်ကလေးသည်ရင်ဆိုင်, လုလင်တယောက်သည်နှင့်တစ်ဦးအားကစားသမားသူကိုခဲ့တယ်. သူဟာအခွင့်အာဏာ၏အလိုတော်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုပြင်ပတွင်တိုးမြှင်သောအခါထိုဝါးနိုင်တာထက်ပိုပြီးချွတ်ကိုက်. TM အလိုအလျောက် GZ ရဲ့သေနတ် ယူ. အစားသူ့ကိုသတ်သောအတွေ့အကြုံလူသတ်သမားခဲ့ဆိုပါစို့? ဤသည်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်ဆွေးနွေးတင်ပြခံရဖို့အကြောင်းအရာများတစ်အရေအတွက်တံခါးကိုဖွင့်လှစ်. အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, ကို, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်, အဆိုပါသင့်မြေပြင်ဥပဒေရပ်, မိမိကိုယ်မိမိကာကွယ်ရေးအစစ်အမှန်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကဘာလဲ, နှင့်ပြိုင်ပွဲလူတိုင်း၏စိတ်ထဲတွင်ကြည့်ရှုအားပေးရပါမည်ကိုမည်သို့အားလုံးပြန်လည်အကဲဖြတ်အများစု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်နှလုံးကို၏မှောင်မိုက်၌မြင်ကြအရာအားလုံးနောက်ဆုံးမှာအလင်းမှလာကြလိမ့်မည်. အမှားအယွင်းများ၏ဤကြေကွဲဖွယ်နှင့်ရယ်စရာကွင်းဆက်နားလည်မှုကြီးမြတ်သောအဆင့်အကြောင်းကိုဆောင်ကြဉ်းဖို့ရည်ရွယ်သည်, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့အသိအမြင်. ဤကိစ္စတွင်ကမ္ဘာအနှံ့ထိတ်လန့်လှိုင်းတံပိုးကိုစေလွှတ်ထားပါတယ်. ဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းပုံပြင်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါဟာသမိုင်းပုံပြင်က Black မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်လူသားတစ်ဦးနှင့်အရပ်ဘက်အခွင့်အရေးများဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်. အဘယ်သူမျှမကျပုံစံသဘောထားအမြင်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းအပေါ်မှာအခြေခံသေဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်.
BQPhotography • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:18 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
DUDE!! ဒီပို့စ်တင်ဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!! ငါသည်ငါ့ facebook ကိုမြို့ရိုးပေါ်မှာအလားတူတစ်ခုခု posted. ကျနော်တို့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကနေအပေါ်ကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်ခံစားရပေမယ့်သေးပဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်!! မည်သည့်လူမျိုးကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖို့ငြင်းခုန်ခြင်းနှင့်ဆက်လက်မ. ငါဘုရားသခင်၌ခိုင်မြဲစွာယုံကြည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ဤတိုင်းပြည်ကိုဘုရားသခင်အားပြန်ဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်. (2 ရာဇဝငျခြု 7:14) ကျနော်တို့သင်နှင့်ငါသည်တူသောပိုပြီးအနက်ရောင်လူတွေလိုအပ်ပါတယ်, အဘယ်သူသည်တက်ခြေလှမ်းနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်ပြောဆိုအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပညာပေးလို့ရပါတယ်. ကျနော်တို့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုနှိုးဆော်သောသူသည်လူတို့တဘက်၌ရပ်သင့်တယ်!! ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ. ငါအရမ်းအခြားသူများလူမျိုးရေးမှတ်ချက်များနှင့်လုပ်ရပ်များနှင့်အတူပွီ, ဒါပေမယ့်ငါခရစ်တော်အားဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူသည်သိသောကြောင့်ထိုသို့အပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုရမသွားပါစေပါဘူး!! ကြေးဇူးတငျစကား!!
အမှတ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:18 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမပါဘဲ, '' လူမျိုးရေးနှင့်အတူသူတို့အားရှိပါတယ်’ သူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုများအတွက်တွန်းအား – အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော. တချို့ကပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ melanin ၏အဆင့်အဆိုးဆုံးယူဆ. တစ်လူမျိုးရေးတဦးတည်းထက်ယဉ်ကျေးမှုကွာဟချက်ပိုမိုထုတ်ဖော်ပြသကြောင်းဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်သွားအခြားအရာတစ်ခုခုရှိမယ့်လျှင်မူကားငါတွေးမိ. ဥပမာ, ငါကအရမ်းတိုတောင်းသောဘောင်းဘီတိုအတွင်းလမ်းပေါ်ကိုဆင်းလမ်းလျှောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်လျှင်, အထဲကဆွဲထားရင်သားနှင့်အတူအနိမ့်ပိုင်းဖြတ်အကြံပေးအဖွဲ့-top, လုပ်-up, စာရေး, ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် (လမ်းလျှောက်ဘို့ကောင်းသောမဟုတ်), စသည်တို့ကို, ငါသည်ဤသူသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ယူဆပါလိမ့်မယ် – တစ်ခေတ်နောက်ကျစကားလုံးသုံးစွဲဖို့ – လျော့ရဲရဲ. ဤသည်ငါ့ကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်သို့မဟုတ်နှုတ်ဖြင့်ချေမှုန်းရေးသူမ၏မှသုညညာဘက်ပေးသည်, ပေးသောသဘောထားမှတ်ချက်အောင်, စသည်တို့ကို. အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ခါးပန်းနဲ့ Contrast – ကျိုးနွံ, ဒါပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုဘောင်းဘီ, ထမီ, အဝတ်အစား, စသည်တို့ကို. – ညာဘက်ပြည်ထဲက’ အဆုံး (သို့မဟုတ်သင့်စတိုင်ကောက်) စာရင်း. သူမသည်မိန်းမကဲ့သို့နည်းတူချောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် #1, ဒါပေမယ့်ငါကမဖြစ်နိုင်မယ့်ထင်တယ်.
ထိုနည်းတူ, ငါဆီသို့လမ်းလျှောက်လူငယ်တစ်ဦးအနက်ရောင်လူတဦး '' gangbanger အဖြစ်ဝတ်ဆင်တွေ့မြင်လျှင်’ – ငါဖယ်ရွှေ့ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောရ. ဒါဟာသူဒေသခံတစ်ဦးလူငယ်သင်းအုပ်ဆရာရဲ့ဆိုသည်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်မယ့်နှင့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်တစ်ဦးကိုဆိုးစကားလုံးဆိုသညျကားထက်ငါနှင့်အတူဧဝံဂေလိတရားဝေမျှမယ်လို့. သို့သော် '' အိုခါးပန်းနှင့်အတူအဘယျသို့င်? ပြောင်းပြန်, အတွင်းလမ်းပေါ်ကိုဆင်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့အနက်ရောင်ယောက်ျားသည် 1) အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်အဆုံးခါးပန်းကို 2) ရိုးရာအာဖရိကဝတ် 3) အဖြူရောင်တီရှပ်နှင့်အတူအလုပ်ဂျင်းဘောင်းဘီ / ဘွတ်ဖိနပ်… ကျွန်မရုတ်တရက်ငါ့အစိုးရိမ်မှုတွေအားလုံးလျော့ပါးပါပြီ.
အကြှနျုပျ၏အမှတ်ဝတ်စုံများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထုတ်ဖော်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်. ထိုမျှမကအားလုံးယဉ်ကျေးမှုတန်းတူများမှာ. အဘယ်အရာကို အကယ်. “အဖြူ” (သို့မဟုတ်အလင်းအညိုရောင်, အနီေရာင်, ဝါသော) အမရေိသီချင်းဗီဒီယိုများမြင်, ညနေပိုင်းတွင်သတင်း, newsweeklies, စသည်တို့ကို. ဒုက္ခအတွက်နုပျိုအနက်ရောင်လူသား၏အသိုင်းအဝိုင်း wear အဖွဲ့ဝင်များငယ်ရွယ်အနက်ရောင်ယောက်ျား upstanding သူကားအဘယ်သို့… တစ်ဦးပဋိပက္ခဖြစ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုပါလိမ့်မယ်.
ထိုနည်းတူ, တစ်လူဆိုးဂိုဏ်းများကဲ့သို့ဝတ်စားဆင်ယင်, သငျသညျတစျဦးနှငျ့တရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခါမှာအံ့ဩခြင်းမပါဘူး.
တစ်ဦး '' hoodie ဝတ်ထား’ တစ်ဦးတည်း / သင်တန်း၏ဤမပွုသငျ့သညျမဟုတျဘူး. ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဝတ်အစား / ဝတ်စုံများင်ထင်တဲ့သူရှေးရှေးမဆက်သွယ်ပါဘူးသို့မဟုတ် (ပိုဆိုး) အဲဒါကိုမခံပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးခြားနားချက်များထွက်အမဲသားဖို့လေ့လာသူအပေါ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေမိုက်သောသဘောရှိ၏.
အမှန်တရား • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:18 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဂျိမ်း Lee က • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:19 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျနော်တို့ faultfully ခေါ်အကြားကဒီ sensationalize နှင့်နောက်ခံပြဿနာနှင့်တူမြင့်မားပရိုဖိုင်းကိုအမှုပေါင်း “လူမျိုး။”
ဒက်ထရွိုက်၏ဆင်ခြေဖုံးကနေအဖြူကောင်လေးအဖြစ်, ငါဖြစ်ကောင်းငါ့ကိုအောက်ပါ Zimmerman မှတူညီသောလမ်းကိုတုံ့ပြန်မယ်လို့, မသက်ဆိုင်ငါမှတက်ခဲ့လှုပ်ရှားမှုများ.
Zimmerman ဝိညာဉ်ရေးရာပြည်နယ်သက်ရောက်မှုထာဝရဘုရား၏ကသူ၏အမြင်ပညတ်ကိုငါထား …”အဓမ္မလူကိုမဆီးတား။” ဖွယ်ရှိ, ဒီ command မှ Trayvon Martin ကန့်လိုက်နာမှုအဖြစ်ကောင်းစွာချို့တဲ့ခဲ့သည်. ခရစ်တော်၏တပည့်အဖြစ်, ငါတို့သည်ဤလောကကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည့်အခါအံ့သြသွားဖြစ်မအောက်မေ့စေခြင်း “ကမ္ဘာကြီးကို။”
Thabiti Anyabwile အတွက်အချိန်မီမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးခဲ့တယ် 2008 အကွောငျး “အဆိုပါပုံရိပ်စေ့စေ့စပ်စပ်”. ဒါဟာနားထောင်ရန်ရကျိုးနပ်သည် – http://t4g.org/media/2010/04/bearing-the-image-identity-the-work-of-christ-and-the-church-session-ii/
ကျနော်တို့လူမျိုးတစ်ဦးထက်ပိုသောသမ္မာကျမ်းစာဘာသာရေးဆီသို့ပြောင်းလဲသွားဖို့လိုအပ်လူအများစု၏အယူအဆနှင့် ပတ်သက်. ယူဆချက်အပေါ်အခြေခံခဲ့ကြကြောင်းအထောက်အထားတွေကိုနှင့်ဘဝတွေကိုရှိတယ် "ပြိုင်ပွဲ။ ". ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, စည်းကမ်းချက်များကိုသတ်မှတ်နှင့်စနစ်တကျသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, နှိုင်းယှဉ်အထူးသဖြင့် "ပြိုင်ပွဲ" "လူမျိုးစု။ " ဒီခရစ်ယာန်, အာဒံအတွက်လူသားရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်း, ခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်၌စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်အတူပြည်ထောင်စု.
သံခြေးတကျသော • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:19 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျနော်တို့အားလုံးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများလက်ခံရရှိအဆုံးပေါ်ခဲ့ပြီးပြီ, ဖြစ်နိုင်. အကယ်. မရ, ကြှနျုပျတို့လုပျနိုငျမညျ. အချို့သောအခြားမျိုးနွယ်ကနေတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်စေမယ့်, ကျနော်တို့ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်အသံကဘယ်လိုပေါ်အခြေခံပြီး.
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကကျူးလွန်၏အပြစ်ရှိကြောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်, လွန်း, တချို့အသေးဒီဂရီမှ. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ပြီးတရားသဖြင့်စီရင်စေဘယ်အချိန်မဆို–ဒါဟာပြည်တွင်းရေးထားရှိမည်ရဲ့ရင်တောင်–အဲဒီလူကိုကြည့်သို့မဟုတ်အသံဘယ်လောက်ပေါ်အခြေခံပြီး… ကြောင်းစှနျးကှကျရဲ့.
Antha REdNOTE • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:19 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဆိုပါ 911 အော်ပရေတာကပြောပါတယ် “ငါတို့သည်သူ့ကိုအကိုလိုကျနာသငျ့အားမလိုအပ်ပါဘူး” ဒါကငါ့အဘို့မလုံလောက်ပါရဲ့. အဆိုပါတရားခွင်လိုအပ်ခဲ့ဖူးပါဘူးမယ်လို့နှင့် Trayvon ဖြစ်ကောင်းသည်သူ၏အဖေကမှ ပို. အနမ်းရတဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်း (ရုပ်ပုံများတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်) Zimmerman သည်မိမိတည်းခိုလျှင် “တင်းပါး” ကားထဲတွင်နှင့်ဖုန်းသေးပါဘူးအပေါ်’ အဆိုပါရဲများက လာ. ,!!!
Louie • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:20 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ဒီဝေဖန်သုံးသပ်အချို့ကိုခရစ်ယာန်သူတို့ကိုယ်သူတို့မခေါ်ကြောင်း, ရှက်ကြောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို, ငါနီးပါးထိုသူအချို့တို့သည်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမျှော်လင့်ပါတယ်. ဤ blog ပေါ်တွင်သင်၏နှလုံးသွင်းဘို့သင့်ကိုသိပ်ခရီးစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျနော်တို့အကြောင်းကိုမသိသောသို့မဟုတ်နားမလည်စေခြင်းငှါသင့်ဘဝကိုအတှေ့အကွုံဆိတ်ကွယ်ရာ. ငါသည်တဝှိုက်ဖြစ်ကြောင်းကို, ယောက်ျားနှင့် 24 အသက်နှစ်နှင့်ငါအများကြီးအနက်ရောင်သူငယ်ချင်းတွေ, ခရီးစဉ်မှအလွန်ဆင်တူ, မှားယွင်း profiled ပြီငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုဆန့်ကျင်သောဤတိုက်ခိုက်မှု၏မျက်မှောက်၌ဖြစ်ရပြီတဲ့သူ, ထိတ်လန့်အတွက်, ခံစားချက်အကူအညီမဲ့. ငါဝေဖန်သုံးသပ်အချို့မိန်းမောခရီးစဉ်ရဲ့စကား misinterpreting သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များနှင့်နိုင်ငံရေးများအတွက်အသံဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်သူတို့ကိုအသုံးပြုနေသည်ထင်. ခရီးစဉ် Zimmerman တစ်လူမျိုးရေးခွဲခြားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဘာမှမပြောသေးပါဘူး. Zimmerman လူငယ်တစ်ဦးသောသူသည်မိမိအသက်တာကိုကုန်ကျတဲ့မှားယွင်းတဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ဖန်ဆင်းတော်, အစဉ်အမြဲတဦးတည်းမိသားစုပြောင်းလဲသွားပြီတဲ့တကယ်တော့, အနည်းဆုံးအား Zimmerman အသက်ရှင်တော်မူသည်နှင့်ရှူရှိုက်. နှင့်ဤဖြစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့များလူတိုင်းကသူတို့ဘက်လိုက်မှုဆနျးစစျဖို့နဲ့ငါတို့အားလုံးကိုနာကျင်ဖြစ်ကြောင်းဥပဒေများကိုကြည့်ဖို့ထားတဲ့အော်ဟစ်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်. ဒါဟာလူတွေရိုးရှင်းစွာ created ဥပဒေများကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့တူအချို့သောကာကွယ်ပေးရန်ကြောင်းမမွငျနိုငျငါ့ကိုနေမကောင်းစေသည် (ခဲတညျးရှာအခွင့်ထူးနှင့်အတူ) အဆိုပါအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်သောသူတို့အဖို့လျှောက်ထားကြဘူး “အခြား”. အချို့ကပညတ္တိကျမ်းဖော်ပြခဲ့တဲ့သူသံသယဖြစ်ဖွယ်ကြည့်ရှုသောကွောငျ့ Zimmerman Trayvon နောက်လိုက်ဖို့တရားမျှတခဲ့ပေမယ့်သူတစ်စုံတစ်ဦးကနောက်လိုက်ဖို့ညျဘုရားသခငျ၏မကျြမှောကျ၌ဖြောင့်မတ်ခံခဲ့ရသည်ဟုပြောပါပြီ. အဆုံး၌ငါ Zimmerman ကသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိကျွမ်းနှင့်နောက်ထပ်အနာပျောက်စေသောအဆောင်ကြဉ်းပေးဖို့ဘုရားသခငျကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင်းအပြုသဘောဆောင်တစ်ခုခုသို့မိမိအကြောက်မက်ဘွယ်သောရွေးချယ်မှုဖွင့်ဖို့လာဆုတောင်းပဌနာ. အဘယ်အရာကိုမျှဘုရားသခင်နှင့်အတူမဖြစ်နိုင်ဘူး.
Nathanial ဝင်ရိုးစွန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:20 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျ Zimmerman ပြီးသားခရစ်ယာန်တစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့ဘယ်လိုသိလား? သင်ရုံးတင်စစ်ဆေးကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ် soundbites ကိုနားထောင်ခဲ့ဘူး. ငါသည်သင်တို့ကိုလူတွေရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းကိုဒီ post တွင်တရားမှတ်ချက်များအများကြီးလုပ်ထင်. ငါသူတို့တက်တူးခဲ့သောကွောငျ့အဖြစ်ကောင်းစွာ profiled ခဲ့ကြသူလူငယ်တစ်အဖြူဆယ်ကျော်သက်သိကြ. ဒီပြိုင်ပွဲကိစ္စတွင်ခဲ့ကြောင်းယူဆချက်နှင့်အခြားသူများနှလုံးသားများနှင့် ပတ်သက်. ယူဆချက်အောင်ရပ်တန့်. Zimmerman မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့ပါပြီနိုင်ပေမယ့်လူတွေအပြည့်အဝဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနားမထောင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာမျှတရားခွင်ရှိဦးဆောင်, မီဒီယာတစ်ခုလူမျိုးရေးပြဿနာတက်စည်မှကစားသော spliced ​​သူတွေကိုမပေး. Zimmerman တစ်ဂျူရီရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှင့် Self-ကာကွယ်ရေးအောက်မှာတရားသေလွှတ်ခဲ့သည်. ဒီတစ်ခါလည်းတချို့လူတွေကအာဖရိကအမေရိကန်များငြိမ်းချမ်းရေးကျော်ကြောင်းမြှင့်တင်ရန်အကြမ်းဖက်မှုများကိုနားထောင်သောဂီတမေးခွန်းထုတ်ရန်စတင်သင့်တယ်. မာတင်ပြန်အိမျသို့သှားနိုငျခဲ့, အစားသူ Zimmerman တက်ရိုက်နှက်ရန်ကြိုးစားရန်ရွေးချယ်ခဲ့.
စိတ်ပျက် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:21 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ. ပထမနှင့် farmost ငါခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို. ဒုတိယအငါ afirican-American အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို. ငါဒီမှာမှတ်ချက်များကိုဖတ်ပြီးပြီသူတို့ငါ့ကိုအံ့သြပါဘူး. ငါသည်ဤတိုင်းပြည်အတွင်းအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့ပါ၏ (အနက်ရောင်ပေါ်တွင်အနက်ရောင်, လူမည်းဆီသို့တရားစီရင်ရေး,အထွေထွေလူထုဆီသို့ဦးတည်၏လူနည်းစုလူငယ်အချို့၏ရာဇဝတ်မှုဒြပ်စင်, minoriity လူငယ်အချို့ဆီသို့ယေဘုယျအများပြည်သူ). သမ္မာတရားကိုသင်တို့အားပြောပြရန်ကျွန်မကြောက်တယ်ဖြစ်ကြောင်းကို,နှင့်ဤအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်……….အဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်းအစွန်းအထင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုအုပ်စိုးလူ့အဖွဲ့အစည်းတောက်ပြောင်အဖြစ်ကြှနျုပျတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းပြန်လာ၏သင်္ချိုင်းကိုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်စေခဲ့ပါတယ်အခါ 50 ရဲ့၌ရှိ၏ကျောသောအရာအတွက်. ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်အမေရိကပြိုင်ပွဲအခမဲ့ Utopia အချို့ကိုပြည်နယ်ရောက်ရှိတော်မူကြောင်းကိုဒုတိယအဘို့အထင်သောအခါကြှနျုပျတို့အမြိုးကိုနှောငျ့သောတူညီနေမကောင်းထပ်ကျော့၏သင်္ချိုင်းကိုအန္တရာယ်ရှိပါတယ် 50 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. အဲဒါကိုရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူမယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကလူကကျော်ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုက်တယ်ထင်. ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အကပြိုင်ပွဲအရာမဖြစ်စေခြင်းငှါ,, သင်သည်သင်၏အကွီးအကဲမြားအသေးစိတ်မိမိတို့၏အသက်ငယ်သောကာလသတိပေးဘယ်လိုဆွေးနွေးရန်စကားကိုနားထောငျဖို့ရှိသည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့,သင်နှင့်ငါ၏အိပ်မက်မက်ဘယ်တော့မှနိုင်သောအရာတို့ကိုတွေ့ကြုံ
.သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းအနက်ရောင်အထီးဘွားဘယ်တော့မှမည်ဖြစ်ပြီးအံ့သြစရာသူကိုမြင်ရဖို့အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်တို့အဘို့အကပြိုင်ပွဲအရာမဖြစ်စေခြင်းငှါ, 21. သငျသညျ၏မျှသာကြည့်သည်နှင့်တစ်ဦးခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ခံရဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တို့အဘို့အကပြိုင်ပွဲအရာမဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ကိုယ့်သူတွေကို options များရှိခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်းအကြှနျုပျအဘို့အပြေးပြိုင်ပွဲအရာမဖြစ်လိမ့်မယ်. အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသမှုကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုရာဇဝတ်မှု၏သားကောင်များဖြစ်ခဲ့ကြပါပြီသောသူအပေါင်းတို့မှထွက်ဝင်. ငါနှင့်အကြမ်းဖက်မှုသညျးခံခှငျ့လှပါပြီဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှ. သို့သော်, ထို့အပြင်ပွဲအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ရိုက်ကူးလျစ်လျူရှုတဲ့စနစ်လွှတ်ပေးခြင်းဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်,သူတို့ညဥ့်အချိန်၌ထွက်ဖြစ်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများသို့မဟုတ်,. ငါသည်ငါ့ပိုက်ဆံယူပါလိမ့်မယ်တဲ့စနစ်ကလက်ခံသည်လွှတ်ပေးခြင်းဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်,ငါမူကားသို့မဟုတ်ငါ၏သားမဟုတျပါဘူး. သူတို့ဖြစ်ကြသည်သကဲ့သို့ငါအရာပြည်နယ်လွှတ်ပေးခြင်းဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်. အမေရိကအဘယ်သူမျှမ Utopia ဖြစ်ပါသည်. ငါနေ့တိုင်း America မှာလူနည်းစုဖြစ်ခြင်း၏သက်ရောက်မှုများကိုခံစားရပါ,ပင်အသင်းတော်၌.
bergyman • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မခရစ်ယာန်တစ်ဦးလွန်းတယ်. ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနေဆဲရှိကွောငျးသဘောတူ. အဆိုပါအမှန်တရား, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေပါလိမ့်မယ်. ရန်သူကပြုလုပ်၏သေချာစေမည်. ဒါပေမဲ့ဒီ “သငျသညျငါ့ဘက်၌နားလည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်” ခရီးစဉ်မကူညီဘူး. ကျနော်တို့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရှည်ကြောင်းအဖြူ Idiots ရှိ. ထိုသူတို့ကားအဘယ်သို့: မိုက်မဲလူမျိုးကြီးဝါဒ. ထိုအခါကိုအားပေးအားမြှောက်သောအသွင်မြင်လာအောင်ရှည်ကြောင်းအနက်ရောင် Idiots ရှိပါတယ်. အဆိုပါအာရုံကိုကြွင်းသမျှသောဤ Idiots အထက်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်အတူတကွကြွလာသောအခါ၌ဖြစ်နှင့်သွေးခွဲပြုပြင်သင့်တယ်. အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းကိုပြောင်း. ငယ်ရွယ်အနက်ရောင်ယောက်ျားသည်… ဝိုး. ကျွန်မအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဘယ်လိုမျှမစိတ်ကူးရှိသည်, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာအထဲကအဖြေကိုရှိပါတယ်သိကြ. ငါသည်ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်တစ်ခုနှင့်အဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်သိကြ… ထိုသို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုမြင်တွေ့ရပုံပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားမဟုတ်ပါဘူး. မိမိအဖြေရှင်းချက်စည်းလုံးမှုအကြောင်း, မေတ္တာနှင့်ပွနျလညျထူထောငျ.
စိတ်ပျက် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
bergyman hi. ကျွန်မနှင့်အတူရိုသေလေးစားခြင်းနှင့်သဘောတူ, သင့်ရဲ့အမြင်များ. တဦးတည်းမှတ်စုသော်လည်း- ကြှနျတေျာ့အမွငျမဟုတျပါဘူး “သငျသညျငါ့ဘက်၌နားလည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်” မဟုတ်ဘဲ၎င်း၏အဘယ်ကြောင့်ဒီအမအပေါ်အလင်းတစ်သွန်းလောင်းဘဲ “ငါ့ဘက်” သို့မဟုတ်သင့်အခြမ်း. ဒါက In-ရုံပုံစံများဒီတိုင်းပြည် rectify.This မှမရှိသေးပါအကြောင်းမရေိကလူနည်းစုအားပေးတော်မူကြောင်းကိုစာရေးတံဖြစ်ပါသည်. Jim ကျီးကန်းနှင့်အတူကြောက်ခမန်းလိလိအတွေ့အကြုံများ reliving အကွီးအကဲမြား. သူတို့တရားစီရင်ရေးစနစ်၏အချို့ကောက်ပုံစံအားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားပါလိမ့်မည်ကြောက်လန့်ကလေးများ. DWB အဘို့အနှောင့်အယှက်အထီးမိသားစုဝင်များ ''(အနက်ရောင်အနေဖြင့်ယာဉ်မောင်း) ငါရှေးရှေးစညျးလုံးနှင့်အသင်းတော်နှင့်ကို un-churched ရောနှောဖို့လူမျိုးရေးအသိအမြင်ဆောင်ခဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာမဆုပ်အနစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ. ငါသည်ငါ့ဘက် .I'm ကလေးစားဟုနားလည်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး. ငါဘာသာရပ်အပေါ်အလင်းကိုသွန်းငါ့အလုပ်ကိုဆက်လက်မညျ,ကြောင်းဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျကိုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်သောအရာကိုင်နှင့်အသင်းတော်ကလိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့. ကပြောသည်နှင့်အတူ- တရားမမျှတမှုများအယှက်တစ်ခုမျက်စိကန်းသောမျက်စိလှည့်ပါကလူမျိုးရေးဖြစ်,လူမှုရေးစီးပွားရေး,ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသို့မဟုတ်လိင်အသွားအလာနှင့် ပတ်သက်.,လည်းအလွန်မှားယွင်းနေသည်. ဒါဟာအစငါမပွုနိုငျတစ်ခုခုရဲ့. ငါသိမြင်တောက်ပမှတ်စုတွင် ,ဝန်ခံခြင်း, နှင့်ခရစ်ယာန်ဆုတောင်းပဌနာဖြစ်ရပ်များမှာအကြီးအကျယ်စကေးအပေါ်လူမျိုးအကြားခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ရိုသေလေးစားမှု၏လှပသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်, ဝန်ခံခြင်း,အပြစ်လွှတ်ခြင်း (နှစ်ဖက်စလုံးတွင်) OHHH ကကြည့်ရှုလော့တစ်ခုခု pslms နဲ့တူခဲ့ပါတယ် 133:1-3 အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်. ခြေကိုဆေးခဲ့ကြ,မျက်ရည်သွန်းလောင်းခဲ့သည်, လူအပေါင်းတို့ပါတီများ(အနက်ရောင်,အဖြူ,Latino,နှင့်အာရှ) အခြားဆန့်ကျင်သင့်၏အဘို့ဘုရားသခငျသညျရှေ့တျော၌နောင်တ. ငါလာသောအခါနေ့အဘို့တောငျ့ “အစ်ကိုမေတ္တာတော်ကိုလူအားလူကိုချည်နှောင်လိမ့်မယ်” ဝမ်းမြောက်သောစိတ်မှကြီးစွာသောဓမ္မသီချင်း ODE တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်. ငါအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရဖို့မအဆုံးဆုတောင်းပဌနာ.
bergyman • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:23 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သင်တို့အားငါလုပ်နေတာခဲ့ကြသည်ဆိုလိုဆိုလိုဘူး “သငျသညျနားမလညျ…” အရာ, ကိုယ့်ငါတုန့်ပြန်အဖြေဖြစ်ခြင်းချင်ကြပါဘူးအဓိပ်ပာယျ. ငါဒီပြဿနာတွေကိုအချို့နှင့် ပတ်သက်. စကားဝိုင်းမှာ join ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်သောအခါငါတစ်ကြီးမြတ်သဘောတူညီချက်နားမထောင်နှင့်မည်သို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်. ငါနှစ်ဖက်စလုံးတွင်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုခံရဖို့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ထင်တယ်. ကျွန်တော်သင်နှင့်သဘောတူသည်. ဒါဟာဖြစ်ပျက်နေသည်. ကိုယ့်အသက်ဆုံးရှုံးများနှင့်အလားအလာဆုံးရှုံးခဲ့ရပုံကိုတာရှည်တာနဲ့အပေါငျးတို့သ / ထိခိုက်မယ့်မုန်း … ငါဌာနခွဲနျး. ကောင်းမွန်သောရန်ပွဲတိုက်ခိုက်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါသည်သင်တို့ကိုငါစိတ်ခံစားမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဟန်ဆောင်ကြပါဘူးသင်သိရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်, ကိုယ့်လာမယ့်ခြေလှမ်းများနည်းလမ်းများရတဲ့ဖို့ကိုရှာနေပါတယ်… နာလန်ထူ, အနာရောဂါငြိမ်းစရာ, စည်းလုံးညီညွတ်ရေး.
စိတ်ပျက် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:23 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟုတ်ကဲ့. ကိုယ့်ကိုနားလည်ကျနော်တို့တိုက်ပွဲထဲမှာသင်လိုအပ် . ငါတစုံတယောက်သောသူသည်ဤပြဿနာများကိုဖို့စကားပြောဆိုမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းချက်ပေးရန်သင့်ပံ့ပိုးမှုများ devalued ကြောင်းစိတ်မကောင်းပါဘူး. ငါသူတို့သူသို့မဟုတ်သူမ၏အသားအရေအနက်ရောင်မဟုတ်ခဲ့လို့ဒီဆွေးနွေးမှုအတွက်အရေးမပါဘူးလျှင်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့လမ်းကိုကူညီရှာဖွေလိုသူကုသသူအကြှနျုပျတို့အားလုံးခွင့်လွှတ်သူတို့ရဲ့ behalf.Would အပေါ်တောင်းပန်. ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီသည်အခြားလူတစ်ဦးကိုအထောက်အကူပြုဖို့တစ်ခုခုရှိယုံကြည် ,ရရှိခဲ့ခံရဖို့အတွေ့အကြုံများ,shared ခံရဖို့ကိုချစ်,ရှိခဲ့ခံရဖို့အားပေးမှုနဲ့မိတ်သဟာယဖွဲ့ (အနက်ရောင်,အဖြူ,ဝါသော,ညိုသော,အပြာစသည်တို့ကို). ကိုယ့်ခိုင်မြဲစွာယုံကြည်ကြသည်. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျ bergyman ကောင်းကြီးပေးတော်မူ…..တနေ့ pslms 133:1-3 ဒီမှာမွကွေီးပျေါမှာအဖြစ်မှန်ပါလျှင်မရဖြစ်လိမ့်မည် ,ကျိန်းသေလာရန်အတ.
အာမင်, အာမင်. သင့်ရဲ့ကြင်နာစကားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သခင်ဘုရား, အမှန်ပင်တစ်နေ့နေ့မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာငှါငါပညတ်မည်သောအနာရောဂါငြိမ်းစရာကိုဆက်လက်.
Troy Frasier • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟေ့ခရီးစဉ်, ya Love အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသား… ဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲများ၏ပြဿနာအပေါ်တူသောအသံ, သငျသညျအခြို့သောခါးသီးမှုတို. ငါဖြစ်၏စိတ်မကောင်းသင့်ရဲ့အသားအရေအရောင်အချို့ကိုသင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများလက်ခံရရှိအဆုံးစေတော်မူပြီ. ငါ့အရေအရောင်ဟာအနက်ရောင်အသိုင်းအဝိုင်းထံမှအချို့သောခွဲခြားဆက်ဆံမှုများလက်ခံရရှိအဆုံးပေါ်မှာငါ့ကိုတားထားပါတယ်, (ငါရဲက tagged ခဲ့ဖူးဘူးပေမယ့်). အသက်တာ၏ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, လူကို. ကိုယ့်ငါလက်ဝါးကပ်တိုင်လူမျိုးအတန်းအစားခွဲခြားမှုခဲ့ကြသည်ဆန္ဒရှိ, မဟုတ်သူတွေကိုသာဓက၌ငါ့အရေပြားအရောင်အဘို့. ဒါဟာဖြစ်ပျက်, ဒါဟာအဆင်းလှမယ့်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကလုပ်ပေးသောသူတို့အားခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်သူ၏မေတ္တာနှင့်မတူကွဲပြားမှုအဘို့ဘုရားသခငျသညျအဘကိုချီးမွမ်းရန်ရှိသည်. ခါးမဖြစ်, လူကို. သူတို့အားအတိတ်ဖြစ်ရပ်၏သွားကြကုန်အံ့. သငျသညျမှားယှငျးစှာအခြားသူများကိုပြုမူဆက်ဆံမဖြစ်သင့်လိုပဲ, သငျသညျတရားသဖြင့်စီရင်ကြသောအခါသင်တို့ကိုသားကောင်များ၏သွေးဆောင်မှုကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်လွတ်ရမယ်. လူတိုင်းမသိနိုင်. အသားအရေအရောင်အားဖြင့်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့်, တည်နေရာ, အသက်အရွယ်, စသည်တို့ကို. ငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလော်ရီဒါကနေဖြစ်ခြင်းများအတွက်မရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်တရားသဖြင့်စီရင်ကြပြီ. နှင့်လူငယ်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်. etc. ကျနော်တို့ကအမြဲစီရင်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်, ya ကိုသိရ? ကျနော်တို့မသိဘဲနေသောသူတို့ကိုမေတ္တာခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ပြသရပါမည်. :) ဘုရားသခင့ ya ကောင်းကြီးပေးတော်မူ, ခရီးစဉ်ကို!
နီကိုးလ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:26 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအနက်ရောင်လူတို့တဘက်၌ရှိကွောငျးကိုထုတ်ညွှန်ပြခြင်းအားဖြင့်အနက်ရောင်ကလူလည်းခွဲခြားနိုင်မပယ်မထားဘူး. ကျနော်တို့ကပြိုလဲကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျမြားနှငျ့အပေါငျးတို့သလုပ်ရပ်များမှား. တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖွင့်ဖို့အလုပ်လုပ် unforgiveness ရှိကွောငျးမဆိုလိုပါ. (ဟယ်လို, ခရီးစဉ် Lee ၏ဇနီးအရမ်းရယ်ရတယ်အနက်ရောင်မဟုတ်ပါဘူး) သို့သော်, သမ္မာကျမ်းစာ, ငြိမ်းချမ်းရေး passive တူညီခြင်းမရှိပါ. ပုံစံအားလုံးကိုအတွက်မတရားမှုနှင့်ဖိနှိပ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတက်ကြွစွာဖြစ်သညျဘုရားသခငျ၏တရားစကားတော်အများအပြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရှိပါတယ်. ကျနော်တို့လူမှုရေးတရားမျှတမှုဆန့်ကျင်တက်ကြွဖြစ်သင့်, ဒီပြိုလဲကမ်ဘာပျေါတှငျသခငျယရှေုခရစျ၏လှပသောဆနျ့ကငျြဘဖေါ်ပြခြင်း၏အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူပုံစံအားလုံးကို.
gdoggydog05 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:26 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. ဉာဏ်ပညာကို. ငါ့ကိုပြစ်မှုထင်ရှား, လွန်း.
bergyman • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:27 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျနော်တို့လူစွမ်းကောင်းဖြစ်ဖို့လူတွေကိုတောင်းဆိုနေ. ငါတို့ရှိသမျှသည်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေများအပေါ်အခြေခံပြီးအချို့, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချို့တတိယပါတီ, တချို့တတိယပါတီစိတ်မချရ) ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်မြို့အချို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဘာလုပ်ရမှန်း, နှင့်တစ်ဦးအခြို့သောလမ်းကိုကြည့်ကြောင်းလူတွေန်းကျင်. ငါတို့ရှိသမျှသည် profile ကို. အောက်ကဆံပင်ရွှေရောင်မိန်းကလေး Lizzie ကလူသူမမြင်တွေ့ရပုံပေါ်အခြေခံပြီးမိုက်သို့မဟုတ်လွယ်ကူသောအဖြစ်သူမ၏ရှုမြင်ခဲ့ကြပေမည်. တရားမျှတသော? မဖြစ်နိုင်ဘူး. သူမသည်တစ်ဦးရှေးခယျြမှုရှိပါတယ်, သူမမတ်ဆောင်ရွက်ရန်ထွက်အဲဒီမှာအားလုံးအခြားဆံပင်ရွှေရောင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ, အဆိုပါအသွင်မြင်လာအောင်ရှည်မ OR သူမကရုံနှင့်အတူဆက်နွယ်နေမရရန်သူမ၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်မတ်ဖြစ် “ပုံစံ”. အကြှနျုပျ၏မှန်းဆ (ငါလမ်းကိုပိတ်ထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်) စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်လေ့ / ဒိန Robinson လိုပြုမူကွညျ့ရှုက shoplifted ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည် … တရားမျှတတဲ့? အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး. သို့သော်ထိုသို့တာဝန်မဲ့သရုပ်ဆောင်သူစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်? ဒီလမျးကိုအကြှနျုပျကပြောပါစို့… လူတစ်ဦးလျှင် #1 သူတို့ရဲ့ store မှာသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းရှိပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြသူတွေကိုတူသောရူပ / ဆင်မြန်း / လုပ်ရပ်များ. (ငါကဒီမှာမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့တက်အောင်ပါပဲ) ရည်ရွယ်ချက်မှာစာရင်းဇယားပြောပါ:7ထဲက 10 အဆဒီဖြစ်ပျက်သည့်အခါ, ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေသည်. သငျသညျဆိုသညျကားစေခြင်းငှါ, သူတို့နေဆဲကိုယ်ရေးအချက်အလက်မနေသင့်. ဒါပေမယ့်စာရင်းဇယားတှငျအဘယျမှာသငျသညျဆိုကြ, ငါနေဆဲဤပုဂ္ဂိုလ်၏အကောင်းဆုံးထင်သွားတယ်.9ထဲက 10? ဘယ်လိုလဲ 99/100? ဘယ်လိုလဲ 999/1000? သင်သည်သင်၏ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်အာရပ်မိသားစုရှိသည်နှင့်သင်သူ့ကိုသူ၏ကားဂိုဒေါင်သို့ဓာတ်မြေသြဇာ၏အိတ်များစွာချကြည့်ရှုပါလျှင်အဘယျသို့? ဒီတစ်ခါလည်းသူပဲမိမိမြက်တကယ်အစိမ်းရောင်ဖြစ် likes. ကျနော်တို့ကအမြဲလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးယူဆယူဆနေကြသည်?
ဒီအပျေါမှာငါ့အမြင်ကျွန်တော်တစ်ဦးလူမျိုးရေးအရ ခွဲ. နိုင်ငံရေးအရ ခွဲ. စီးပွားရေးအရကွဲပြားတိုင်းပြည်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့တကယ်ဘောဂဗေဒအကြောင်းအများကြီးမပွုနိုငျ… သမိုင်းအစဉ်အမြဲကျနော်တို့ဆင်းရဲချမ်းသာရှိသည်ကိုဖျောပွ. ဒါပေမယ့်နိုင်ငံရေးအရနှင့်လူမျိုးရေးအရကျနော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ် “အဘယ်သူမျှမ”. သူတို့ကအတူတူပင်တိုင်းပြည်ကနေလာကြပြီးအဲဒီနိုင်ငံ၏အစဉ်အလာများကိုမျှဝေဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရှိသောကြောင့်အကျိုးစီးပွား America မှာအတူတူ banding လူများ၏အိတ်ကပ်ရှိခြင်းနှင့်အတူပြဿနာကိုအဘယ်သူမျှမရှိသည်သို့မဟုတ်. ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီကျနော်တို့စုဝေးကြပြီတသူတွေကိုတစည်းရှိသောအခါအဖြစ်ပျက်သည်ထင် (ဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်ဘက်နှင့်အတွင်းပိုင်းအချက်များ) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပြင်ပမှာအပေါ်ကိုကြည့်မည်သို့, ကျနော်တို့သည်အထိပြဿနာများရှိသည်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ် “လူမည်း” တစ်မြို့လုံးစိတျအပိုငျးအတွက်တည်ရှိ, နိုင်ငံရေးအရဟာဘယ်အတန်းမှာနှစ်ဖက်စလုံးမဲပေး, အားလုံးကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်, အထူးငှားရမ်း / မဲပေးဥပဒေများအရ / မလိုအပ်ပါဘူး, တူညီသောနှုန်းထားများမှာကောလိပ်ကျောင်းကိုသွား, နှင့်အသားအရေအရောင်အပေါ်အခြေမခံသောလူလက်ထပ်ထိမ်းမြား. မီဒီယာအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာလိုလား. အဆိုပါပါတီများအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာချင် (အားကြီးသောမဲပေးသူဆွဲဆောင်လာခဲ့ပါတယ်). အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုငါတို့သည်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကစားရန်ခွင့်ပြုပြုဖြစ်ပါသည်… ဒီတစ်ခုကိုသူတို့နဲ့နှိုင်းယှဉ်အငြင်းအခုံမဖြစ်. ဒါကဖြစ်ပါသည် “ကျနော်တို့အတူတူအားလုံးကစားရန်လိုအပ်ပါတယ်”. ဒါကဖြစ်ပါသည် “ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ငါတို့ထင်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းယူဆလိမ့်မည်ဟုထွက်ရှိ Idiots ရှိပါတယ်လက်ခံရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါဖြစ်၏သူကိုသိသောကြောင့်သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုသွားတာပါ။”
ကျနော်တို့အနက်ရောင်မွေးစားကလေးတွေရှိခဲ့ (7 နှင့်9yrs အဟောင်းကို). အဆိုပါ7နှစ်အဟောင်းမိန်းကလေးကျွန်တော်တို့ကိုပြောသည် “လူတိုင်းအဖြူကလူအနက်ရောင်ကလူကိုမုန်းသောနှင့်အနက်ရောင်လူတွေအဖြူရောင်ကလူကိုမုန်းသောသိတယ်။” ဒါကငါ့ကိုဝမ်းနည်းလုပ်. တစ်စုံတစ်ဦးကစကားနှင့်သူမ၏သွန်သင်. တွင်7yrs အဟောင်းကို, ကြောင်းသူမ၏မိတ်ကပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာ. လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကိုကောက်စေတဲ့အခါမှာကျနော်တို့လူတွေအကြောင်းကိုကောက်ချက်မှခုန်မီဒီယာ / နိုင်ငံရေးအပြောအဆိုအောက်ပါရပ်တန့်ခြင်းနှင့်တံတားများကြိုးစားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မလိုအပ်ပါနှင့်, ကျနော်တို့အာဃာတကိုင်ပြီးသာလူမျိုးရေးသွေးခွဲမြင့်မားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောပယ်ကျစေရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤကောလဟလပြုပြင်ကြလိုအပ်ပါတယ်.
Rumplestiltskin • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တစ်ဦးကအလွန်-တရားစွဲဆိုရုံးတင်စစ်ဆေး, မဟုတျဘဲ w / o အကြောင်းပြချက်. ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဆက်ဆံရာတွင်, နှင့် “ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်” အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လွဲအတိတ်နှင့်အတူစှနျးပါလိမ့်မည်. ကျွန်မမိဘများခဲ့, ကြောင်း apparenty ခဲ့ကြသည် “အရောင်မခွဲခြားနိုင်ဖြစ်နေသော”, နှင့်ဤအဘို့ငါကျေးဇူးတင်ပါ၏. ကျွန်မအကြောင်းကိုသုံးစဉ်အခါက, နှင့် sandbox '၌ငါ့ရပ်ကွက်အတွင်းမိတ်ဆွေများကိုတစျနေ့ကအတူကစား, ဒီငါမြင်ဘာလဲ – တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်း, မိဘတစ်ဦးဖွင့်လာလိမ့်မယ်, နှင့်တူသောအရာတစ်ခုခုပြောပါ “ဂျော်နီပေါ်မှာလာ, ကြှနျုပျတို့သညျသှားဖို့ရရှိပါသည်” သို့မဟုတ်, “Suzy, သင့်ရဲ့မောအိပ်ဘို့အချိန်”. တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်း, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်လက်ဝဲ, တဦးတည်း မှလွဲ.. ငါသည်ထိုနေ့အကြောင်းကိုဘာမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး, သို့သော်အချို့သုံးဆယ်သို့မဟုတ်အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံးအကြာတွင်, ငါဖြစ်ပျက်သဘောပေါက်: ပြီးခဲ့သည့်ကလေးလေးအနက်ရောင်ခဲ့သည်. မင်းကိုပြောမယ်, ငါသည်ထိုနေ့ဖြစ်ပျက်အတိအကျ WHAT ကိုသဘောပေါက်လာသောအခါ, ကျွန်မအံ့အားသင့်ခဲ့, အမျက်ထွက် – အခြားကလေးတွေဖြစ်ခြင်းခဲ့ကြသည်ကြောင်းကိုကောင်လေး “protected” ကနေငါ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့သည်. အဘယ်သို့ငါမသိခဲ့ပါ “အနက်ရောင်” ခဲ့. သို့တိုင်အံ့သြဖွယ်.
ယခု, ငါဖြစ်၏ 71, ယရှေုသညျခရစ်တော်နှင့်အတူတစ်-on-one ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့, ဘို့ 37 အနှစ်. သော, မဆိုဆွေးနွေးမှုထက်ပို “လူမျိုး” တကယ်ငါ့မျက်စိဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်, ငါ့ကိုရှင်းပြပါစေ – ဧဖက်၏စာအုပ်ထဲတွင်, ဘုရားသခငျသညျကပြောပါတယ်, ယုဒလူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏, လည်းတပါးအမျိုးသားတို့, ONE လူသစ်. လူမျိုး, ဤသူသည်သင်တို့ကိုဆိုလိုသည်, ငါ့ကို, နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူကြောင်းကြားဆက်ဆံရေးရှိသည်အဖြစ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ထဲသို့ခြေလှမ်းလိုက်တဲ့အခါ, ကျွန်တော်တို့ “ဝတ်သည်”, သို့မဟုတ် “လာသို့” အဆိုပါ ONE လူသစ်. ဒါကြောင့်. ခရစ်တော်၏ပြင်ပတွင်, ကျွန်တော်တစ်ဦးလုပ်ရပ်ပေါ်တွင်တင်နိုင်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ဟာအကောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်, လက်ျာအမှုကိုပြု, စသည်တို့ကို. ဒါပေမယ့်အထဲကသဘာဝအအစွမ်းသတ္တိကိုအမြဲထွက်ပြေးကြလိမ့်မည်, ကျနော်တို့ကိုတဖန်ကျရှုံးမည်, အချိန်မရွေးငါတို့ “ခရစ်တော်၏အပြင်ဘက်တွင်”, သို့မဟုတ်မကသူ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ. သဘော Make?
ခရစ်တော်၏အပြင်ဘက်တွင်, NO ရေရှည်စည်းလုံးမှုရှိ IS – မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ဟိုအရင်တုန်းက. ဒါကြောင့်, ခရစျတျောသို့လာ, ငါမရှိတော့အဖြူဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်မှာ, ငါသည်သင်တို့၏အစ်ကိုရယ်, ငါသည်လည်းသင်တို့၏နောက်ကျောရရှိပါသည်.
Molly • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပြဿနာကြောင်းသဘောတူ. သို့သော်ထိုသို့သာအာဖရိကန်အမေရိကန်တွေဆန့်ကျင်ကြောင်းပြောနေမှားယွင်းနေသည်. ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုအများအပြားအကြိမ်ပေါင်းများစွာ profiled ပြီ. ငါလူငယ်တစ်ဦးအဖြူ girl.I ဆံပင်ရွှေရောင် curly ဆံပင်နှင့်မျက်လုံးပြာနှင့်တောင်ပိုင်းဝဲရှိပါ၏. သူတို့တစ်တွေသံသယရှိသူရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရဲများကနေဖြင့် cuffed ပြီ. ငါ့ကိုသတ်အံ့သောငှါရည်ရွယ်တစ်စုံတစ်ဦးကများကငါ့ဦးခေါင်းမှကျင်းပမယ့်သေနတ်ခဲ့ကြ. ငါမပါဘဲလုံးဝပြီ. ငါအဖြူဖြစ်ကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနက်ရောင်မိတ်ဆွေများကိုငါ့ထံသို့စကားပြောနုတ်ထွက်ခဲ့ကြပြီး “ဖြစ်နိုင်သမျှနားမလညျနိုငျပါသညျ”. ငါတို့ရှိသမျှသည်အတူတူပင်ရုန်းကန်မှုများရှိ. ငါတို့ရှိသမျှသည်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူရှေ့တော်၌အလွန်အနည်းငယ်သောလူကိုအကိုသိရန်ရရန်ကြိုးစားသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရင်ဆိုင်ရ. ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မငါးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကလေးများနှင့်အနက်ရောင်ဖြစ်ဖြစ်ပျက်သောမိမိဝမ်းကွဲ၏မကြာသေးမီကမွေးစားနှစ်ခုရှိ. ငါရိုးသားစွာသလောက်ကျနော်တို့တစ်မိသားစုအဖြစ်စတိုးဆိုင်ပါပြီအဖြစ်မရှိ, နက်ကလူအစဉ်အဆက်ကပင်အဝေးမှကျွန်တော်တို့ကိုကြင်နာခဲ့သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ကျနော်တို့ကဤနှစ်ခုကိုယောက်ျားလေးများမွေးစားသည်အထိကျွန်တော်တို့ကိုအသိအမှတျပွုကွောငျးကိုသငျသညျပွောပွနိုငျ. သူတို့အသားအရေရှိအရောင်ချယ်မှုအဆင့်အတန်းကိုအထဲကနေသူတို့ကိုကွဲပြားခြားနားသောစေသည်လျှင်အဖြစ်. ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျနော်တို့တန်းတူမဟုတ်ဖြစ်ကြ၏? ထိုအခါအဘယ်ကြောင့်ဒီအအနက်ရောင်အရာ vs အဖြူရောင်နေဆဲဖြစ်ပါသည်? အဘယ်ကြောင့်ရိုးရိုးလူအားလုံးတစ်အသိုင်းအဝိုင်းအတူတူလာမယ့်ကအဓိကနှလုံးပြဿနာနှင့်မမျိုးနွယ်ပြဿနာရဲ့အမှာကြောင်းအသိအမှတ်ပြုမထားဘူး? ငါ၏အမိန်းကလေးများကြီးပြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ခင်ပွန်း၏အဘို့အကြည့်ဖို့စတင်တဲ့အခါမှာသောလူသားအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူသို့မဟုတ် Min Nan Chinese လျှင်ငါဂရုမစိုက်မည်မဟုတ်. ငါသာအရာနှစ်ခုကိုမေးပါလိမ့်မယ်, သူကသူ၏စိတ်နှလုံး၌ရှိသမျှနှင့်တကွသခင်ဘုရားကိုချစ်ပါဘူး, သူသည်မိမိစိတ်နှလုံးထဲ၌ထိုသညျယရှေုရှိပါဘူး. ဤအရာနှစ်ခုမှအဖြေဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်လျှင်ထိုသူသညျငါ၏မိန်းကလေးငယ်များကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသိပါလိမ့်မယ်. သူတို့တစ်တွေသည်မယားကိုကြည့်ရှုသောအခါသူတို့ကတူညီတဲ့အကြှနျုပျ၏သားအဘို့အသွားပါလိမ့်မယ်. ပြိုင်ပွဲပြဿနာနေပါစေကဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဘေးထွက်အန္တရာယ်အရာအားလုံးကိုအောင်. ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်အထက်မြင့်တက်လာကြောင့်အဘယျကပဌနာပွုကွပါစို့….နှလုံးပြဿနာ.
LolaMitche2011 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
multi-လူမျိုးရေးမိသားစုရှိခြင်းငါလုံးဝအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုနားလည်. ငါပွောမညျ “အဖြူ” အမေရိကားဟာနားလည်ရုံရိုးရိုးဘယ်တော့မှလိမ့်မယ် “အရောင်” ရှုထောင့်. သူတို့ဘယ်လိုတတျနိုငျသ? လူတွေကသူတို့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်လူတို့နှင့်အတူပိုပြီးစာနာပြပါလိမ့်မယ်. လူမည်းအမည်ကိုနိုင်ပါတယ် 100 သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအသက်တာ၌လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအမှုပေါင်း, လူဖြူကိုလည်းနာမညျပေးမညျစဉ် 100 သူတို့ယုံကြည်သောအရာကိုယုံကြည်ဘာဖြစ်လို့များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများနှင့်မျှတမှု. မည်သည့်လူမျိုးထက်ထောင်ဒဏ်အရအေတှကျအားဖွငျ့ပိုပြီးလူဖြူနှင့်အတူ, ထို့နောက်ထောင်ဒဏ်နှင့်ပိုပြီးလူမည်းရာခိုင်နှုန်းပညာရှိသလူဖြူ, သိသာပြစ်မှုများမည်သူမဆိုဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ရဲ့. ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ့်ကျနော်တို့မြင်ချင်အဘယ်အရာကိုမြင်. သူကပြောပါတယ်ခံနှင့်အတူ, ကျနော်တို့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ကြိုးစားကြသည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောနှင့်သူတို့တက်ဆွဲထုတ်မယ်လို့. Black ကအမေရိကန်တွေယခုသူတို့လူဖြူကနေစာနာနားကိုမမြျှောလငျ့နိုငျကွောငျးကိုသိသင့်တယ်, နှင့်အဖြူသူတို့အတွေ့အကြုံတွေကိုနားလည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုအရောင်လူတွေကိုဖြတ်သန်းသွားကြောင်းသိသင့်. ထိုအရိုးရိုးသားသားကြောင့်အဆင်ပြေမယ့်.
Dave • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:29 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Lola, ငါကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစား “လူမည်း” & “လူဖြူ” သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရများ၌ဤပို့စ်တွင်ရှိသည်အဖြစ်အလွန် overstated ဖြစ်ပါတယ်. အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေကိုကော့ကေးဆပ်၏ရန်သူမဟုတ်. ကော့ကေးဆပ်အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေရဲ့ရန်သူမဟုတ်. မိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာအပြစ်တရားနဲ့တစ်ဦးချင်းစီအားမတရားအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်. ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသားအရေအရောင်မှတဆင့်ကြောင့်မာနထောင်လွှားကိုထုတ်အမဲသားဖို့ရှေးခယျြတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏မာနကိုလူမျိုးများ၏အားလုံးအမျိုးမျိုးအကြားမှာသူ့ဟာသူထွက်ကစား. ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာဤနေရာတွင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအိမ်နီးချင်းအာရှနိုင်ငံများအကြားမြင်. ဒါဟာဧကန်အမှန်အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေကန့်သတ်မယ့် & ကော့ကေးဆပ်. သငျသညျကိုထိခိုက်စေခဲ့တာလမ်းကိုဤအမှု၌ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၏မရှိခြင်း add ပါစေပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး. ပြောင်းလဲမှုကိုအမှန်တကယ်ဖွစျနိုငျ.
ခရစ်တော်အားအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအသေခံ. သင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သည်ဤအမှုအရာမှကြွလာသောအခါအပြောင်းအလဲကိုစတင်သည်ရှိရာထိုဖြစ်ပါတယ်. လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေသူတို့ရဲ့အဟောင်းတည်ရတဲ့တစ်ဦးချင်းစီ & ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်ဖို့အသစ်သောမျက်ကပ်မှန်ပေးထား. သူတို့မိမိတို့မာနရကလူတစ်ဦးအနေဖြင့်လူတစ်ဦးမှဖွစျမညျ, ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းခရစ်တော်အားငျ့နိုငျငံတျောလမျးဖွငျ့လှု.
KSStrong • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:29 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
@ gdoggydog05 ငါ့အလိုရှိသမျှအနက်ရောင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ "wrote
ညီအစ်ကိုတွေက Martin အာရုံစိုက်, ပင်ကနေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအလားတူ trajedys ၏ရာပေါင်းများစွာသူတွေကိုပိုပြီးအရေးကြီးသောအဖြစ်ဤ trajedy ရွေးချယ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဌာန၌မှားယွင်းသည်ဟူသောအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုကြဘူး။ "- သင် AA ကိုခရစ်ယာန်တွေကယူဆနေကြသည်
လူအပေါင်းတို့သည်အခြားသူများကိုအထက်ဒီအဖြစ်ဆိုးရှုမြင်. အမှန်မှာဤကိစ္စတွင်သတင်းအတွက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်, ထို့ကြောင့်, ဒါကြောင့်သဘာဝကိုပိုပြီးဒါလူများသတိမထားမိဖြစ်ကြောင်းအခြားအရာထက်စကားလက်ဆုံတစ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်. တမန်တော်ရှင်ပေါလုကို ရွေးချယ်., တစျခြိနျ, ဟေရုဒ်မင်း၏အပွစျကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန် (သူ့အစ်ကိုရဲ့ဇနီးလက်ထပ်) အဲဒီအခြိနျမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်အခြားအပြစ်တရားကျော်. သူကအထူးသဟေရုဒ်မင်းထွက်ကိုခေါ်.
ပေါလုကသူတို့အပြစ်သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်အပေါ်လူတွေအထဲကဖုန်းခေါ်တှနျ့ဆုတျမပြုခဲ့ကြောင်းကိုသိပေမယ့်, ကျနော်တို့အခြို့သောအမည်များကိုမှထွက်ခေါ်ဆိုသူ့ကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ကသာဖတ်ပါ. ဒီကားဒုစရိုက်ဖြစ်၏? အဘယ်သူမျှမ, သူဖြစ်သောကြောင့်, မိမိအဆင့်အတန်းနှင့်ရာထူးဟေရုဒ်မင်းထွက်ကိုခေါ်. သူကအထဲကပေတရု ဟူ. ခေါ်ဝေါ် (အားဖြင့်
နာမတျောကို) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၌သူ၏ခေါင်းဆောင်မှု. ဒါဟာဤကိစ္စတွင်ထောက်ပြဖို့အထပ်ထပ်ပြစ်မှားခြင်းနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆွေးနွေးရန်မဟုတ်ပါ. ဤကိစ္စတွင်မီဒီယာကိုအဓိကအဆင့်အတန်းရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်အကြောင်းပြောဆို.
gdoggydog05 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
im စိတ်မကောင်းကျပ်… ကိုယ့်ကိုပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်. ကိုယ်ယူဆမရင့်…. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိသောသူအပေါင်းတို့ကိုအနက်ရောင်ကခရစ်ယာန်တွေအပေါ်စကားပြောတာသို့မဟုတ်ဖတ်ရှုပြီး, စသည်တို့ကို….. နှင့်ဈသူတို့ကပိုကဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုဘူး…. အဘယ်အရာကိုကိုယ့်အဓိပ်ပာဤ: အနက်ရောင်ခရစ်ယာန်တွေကိုရာ၌ခန့်ထားပြီအပေါငျးတို့သမှတ်ချက်များ၏, ကိုယ့်မျိုးနွယ်၏အခြေခံပေါ်မှာ pedastool အပေါ်တစ်ဦးအခြို့သောအမှုချပြီးများအတွက်မီဒီယာဝေဖန်ဆိုမြင်ကြပြီမဟုတ်…. အကြောင်းတောင်းပန်ပါတယ်. သူတို့လုပျသို့မဟုတ်မပါလျှင်ကျွန်မမသိရပါဘူး. ငါမီဒီယာဒီအပြစ်ရှိသည်ထင်နှင့်ငါ၏အနက်ရောင်ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေအမှု၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအပေါ် commented ပြီအံ့အားသင့်မိပါတယ်နှင့်ထင်ရသောသူတို့ရဲ့ display ကိုအတွက်မီဒီယာထောက်ခံ, အစားသဘောထားကွဲလွဲခြင်းထက်, ပင်သူတို့၏စကားနှင့်အတူသာလျှင်.
စတိဗ် Burlew • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကြေးဇူးတငျစကား, ခရီးစဉ်ကို. အလေးအနက်ထား. ကျနော်တို့အတူတူရှိခဲ့သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်င့်ကတည်းကအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့. ငါသည်သင်တို့နှင့်သင်တို့အဘို့ကောင်းကောင်းလုပ်နေတာမျှော်လင့်ပါတယ်.
ဟဲလ် Mahnke Worrell • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:31 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဖြစ်၏ 32 နှစ်အရွယ်အဖြူအမျိုးသမီး. ကိုယ့်ကိုငါ့ထံသို့ Trayvon ရဲ့ဇာတ်လမ်းရှင်းပြခဲ့သည် 12 နှစ်အရွယ်သမီး. ငါကအားလုံးအကြောင်းကိုခံစားရပုံကိုရှင်းပြခဲ့. ငါမူကားအထက်သင့်ရဲ့ Blog ကိုဖတ်ပါ. ငါသည်သင်တို့ကိုလေးစား, ငါသည်လည်းဤကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရ. ငါသည်ငါ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားကဲ့သို့အကကိုကြည့်, တစ်လမ်းအတွက်… ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မတစ်ပဋိပက္ခရှိပါက, ကျနော်တို့အနေနဲ့ဥာဏ်ရှိသည်သည်အထိကျွန်တော်ထွက်အလုပ်မလုပ်. ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုသီးခြားအလောင်းများမှာ, ဒါပေမယ့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအားဖြင့်ငါတို့သည်တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ (ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မ), ကြှနျုပျတို့အားလုံးအမျိုးအစားထဲသို့သွင်းထားကြသည်နည်းတူ, ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်မ. ငါအရောင်အရေးမပါဘူးငါ့သားသမီးသင်ပေး, ဇာတ်ကောင်အရေးပါအရာဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်မည်သို့ပင်ဆိုစေကိုယ့်အဖြူဖြစ်ကြောင်းကို, သငျသညျအနက်ရောင်ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်မပြောင်းနိုင်ပါ. ဒါဟာကိုယျ့ကိုယျကိုအကြောင်းအချက်ဖြစ်ပါသည်, ပဲအခုအချိန်မှာတူသောငါအနီရောင်ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ထားငါနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအားလုံးအနီရောင်ရှပ်အင်္ကျီနေ့စဉ်ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင်, ကြှနျုပျတို့သညျဤအပေါငျးတို့သလွန်ရနိုင်, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအားဖြင့်တန်းတူဆက်ဆံ, လူအပေါင်းတို့ဟုခေါ်တွင်စေ “အနီရောင်ရှပ်အင်္ကျီကလူ”, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပျက်သွားမ. ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါ၏အလက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကြောင်းကိုတစ်ဦးနားလည်မှုလာရန်လိုအပ်ပါတယ်. ပဋိပက္ခများကို fixed ခံရဖို့လိုအပ်, “အမျက်ထွက်အိပ်ရာကိုသွားမနေပါနဲ့”. ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးရှည်လျားလွန်းဘို့ပဋိပက္ခအတွင်းပါပြီ. ကျနော်တို့ကယ့်ကိုတစ်ခုနားလည်မှုထံသို့လာဖူးပါဘူး, သို့မဟုတ်အပြည့်အဝတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုလေးစားရန်သင်ယူကြပါပြီ… ယခုစိတ်ခံစားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုလင်းသူတို့ရဲ့ဖိအားကန့်သတ်ထိမှန်ခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့ဆင်ခြင်မဲ့နှင့်အတူပေါက်ကွဲနေ. ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးကိုတကယ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလက်ထပ်ဖူးဘူး, ဒါကြောင့်စကားပြောဆိုရန်. လက်ထပ်ဖို့အချိန်ဒါဟာင်… သငျသညျစိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာ Trayvon Martin ကဖြစ်ရပ်မှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြအဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏ဘလော့ဂ်အတွက်ကရှင်းပြခဲ့သည်. ဤသူသည်သင်တို့နှင့် ပတ်သက်. ဇာတ်လမ်းကြောင်း, မင်းအဖေ, သင့်ရဲ့အဖိုး, သငျသညျလူမျိုးရေးအရ profiled ခဲ့ကြကြောင်း. ငါ့ကိုသင်တို့ကိုပြောပြပါရစေ, အဖြူရောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်, ကျွန်မမခွဲခြားဘဲသူတို့ရဲ့အသားအရေအရောင်၏သတိနဲ့တိုင်းတပါးအမျိုးသားပြုမူဆက်ဆံ. ငါသည်ငါ့တံခါးများသော့ခတ်, ငါ၏အပိုက်ဆံအိတ် clench, နှင့်ကလေးများတင်းကျပ်တဲ့ငါလမ်းပေါ်မှာအတိတ်လမ်းလျှောက်သူကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ. အန္တရာယ်ရှိတဲ့အဖြူအဓမ္မပြုကျင့်ရှိပါတယ်, အမှတ်စဉ်လူသတ်သမား, ပွနျပေးဆှဲခွငျး, စသည်တို့ကို. နေရာတိုင်းဖြစ်ပျက်ရာဇဝတ်မှုနည်းတူအများကြီးကိုအခြားအရေပြားအရောင်ရှိပါတယ်ကဲ့သို့ရှိ၏… ကျွန်မစိတ်နှလုံးတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ကူညီပေးလို. တစ်စုံတစ်ဦးက profiled ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့, ဒါဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားလုပ်မထားဘူး. တိုင်းအရောင်အတွက်နေမကောင်းမကောင်းသောအမိကျောင်းရှိပါတယ်လို့ပဲကျနော်တို့သတိထားရရန်ရှိသည်. ဒါကြောင့်, ကျွန်တော်တစ်ဦးလုံခြုံပျော်ရွှင်ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျခဲ့လျှင်လူတိုင်းအတွက်ကြင်နာခဲ့မေတ္တာရှင်ဘယ်မှာ, ကျွန်တော်ကျွန်မခန့်မှန်းစိတ်ပူဖို့ရှိသည်မဟုတ်ဘူး, ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံမဟုတ်ပါဘူး. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ, T.L. ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးသင်တို့နှင့်အတူအဖြစ်.
ခရစ္စတိုဖာ Zavala • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:31 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မြေတပြင်လုံး Zimmerman / မာတင်အမှုသည်ငါစစ်ကြောစီရင်တော်မူအပ်သည်တော်တော်လေးလွယ်ကူသည်ငါ့အားပြရုံအချို့လူတွေပဲဖြစ်ကြောင်းယူဆထားပါတယ်ငါထင် “ပြိုင်ပွဲကဒ်ကစားခြင်း။”
သို့သော်လည်းငါသည်ခရီးစဉ်လေးစား. ထိုအခါငါနှလုံးသညျစကားတျောကိုယူနှင့်အခြားသူများ၏အမြင်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုနှင့်အတူစာနာဖို့ကြိုးစားချင်. ငါသည်ဘုရားသခင်၏့အမြင်နှင့်ငါ့သနားခြင်းကရုဏာစိတ်ကိုချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်ငါဆုတောင်း. ထိုနောက်မှငါသည်ဧဝံဂေလိတရား၏တန်ခိုးအသင်းတော်စည်းလုံးနဲ့ခရစ်တော်နှင့်မအရောင်သို့မဟုတ်လူတန်းစားသို့မဟုတ်နိုင်ငံ၌အကြှနျုပျတို့၏အထောက်အထားတွေကိုတွေ့ရှိရန်ကြှနျုပျတို့အားလုံးကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆုတောင်းပဌနာ…
တီဂျေ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်ကအရောင်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်ယူဆနေ. သငျသညျ zimm နေထိုင်တဲ့အိမ်များသို့ခြိုးဖောကျငယ်ရွယ်အနက်ရောင်ယောက်ျားရှိခဲ့ဖူးမေ့လျော့ခဲ့သလား? ဒါကကိုယ့်ကြောင့်ဘို့အလိုငှါအရောင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခဲ့.
Laura Merrone • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟုတ်ကဲ့, ပေါ်ရွှေ့ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကွယ်ကဒီအားလုံးရပေးနိုင်ပါတယ်. ထိုနေ့ရက်သည်ဖြစ်ပျက်သမျှကို, သငျသညျခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်မေ့လျော့နိုင်ပါတယ်? ငါတို့ရှိသမျှသည်နိုင်သလား “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကိုချစ်” ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်မည်သူမဆို? ကျနော်တို့ရိုးရိုးသားသားပြောနိုင် “အမျက်တော်ကိုဖြေသခင်ဘုရား၏ဖြစ်ပါသည်” ငါတို့ဥစ်စာမဟုတ်? ငါအဖြူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုသို့သော်အချို့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံများမှတဆင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်ရပြီပေမယ့်ငါပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးပါတီများအပြစ်လွှတ်ခြင်းကကျော်ဆည်းပူးင့်. ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထက်ပိုသောမျက်ရည်မဟုတ်ငြိမ်းစေလျက်လိုအပ်ပါတယ်. ပိုမိုကျွန်တော်ခွင့်မလွှတ်, ချွတ်ပိုကောင်းကျွန်တော်ဖွစျလိမျ့မညျနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုခံစားချက်တွေကိုလည်းညှိုးနွမ်းပါလိမ့်မယ်. ယခု, သာလြှငျအယ်လ် Sharpton နှင့်သတင်းမီဒီယာဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပစ္စည်းပစ္စယတက်ဆောင်ခဲ့နှင့်အနာမဖွင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါလိမ့်မယ်, ငါတို့ရှိသမျှသည်လက်ျာဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်…
Sophia • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! ဤပြဿနာအပေါ်ဒမ်းရှုထောင့်နားထောငျဒါလန်းဆန်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ဒါအချင်းချင်းငြင်းခုံ၌ထပတ်ရစ်ရ, ကျွန်တော်သူထင်သောအရာကိုဘုရားသခငျသညျမေးရန်မေ့လျော့သော. ကျနော်တို့အဖြေကိုသူ့စကား၌ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းမေ့လျော့. ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူမျှမနှင့်ကိုယ်တော်ကိုပေမယ့်ဘာမျှမ၌ခိုလှုံသင့်ကြောင်းမေ့လျော့. နောက်ဆုံး, အဲဒီကိုယ်တော်ကိုရှာသောကြောင့်မေ့လျော့, အမှန်တရားကိုတွေ့တဲ့သူတွေကိုဖွစျလိမျ့မညျ.
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအတွက်အမှန်တကယ်ကဒီတိုင်းပြည်အတွင်းကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကျနော်တို့ထဲကနေ run မရနိုငျသောအရာတစ်ခုခုရဲ့, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ရနှင့်ပြောင်းလဲမှုရမည်ဟု. ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မပါဘဲမပွောငျးလဲနိုငျကွောငျးသိရဖို့ရှိသည်. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်တွင်ထင်ဟပ်သောအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားစဉ်းစားပုံ, ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပြုမူဆက်ဆံပုံ. အဆိုပါမုန်းတီးမှုငါတို့စိတ်နှလုံးကိုအနေဖြင့်ဖယ်ရှားသည်အထိ, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များသို့တွားဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်. လွန်ခဲ့သောအတိတ်ကာလဖြစ်လိမ့်မည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်၌မရှိတော့ပစ္စုပ္ပန်အခါ. ထို့နောက်သည်အထိ, ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပေါ်မရွှေ့သင့်တယ်.
Karla မိုးမခ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
စိတ်မကောင်းပါဘူး, ငါဆိုးဆိုးရွားရွားရှင်းပြတယ်! ကျနော်တို့ထိတွေ့ဆုံးရှုံး, ဒါပေမယ့်မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲ၏!
Karla မိုးမခ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:33 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အာမင်ခရီးစဉ်. ငါတစ်ဝက်ကိုလံဘီယာဖြစ်ကြောင်းကို, ဝက်အင်္ဂလိပ်, ငါအဖြူဖြစ်ကြောင်းကိုကြောင့်ငါ့အဘို့ဤမျှလောက်လွယ်ကူ, ငါအိုင်ယာလန်ကနေလက်သစ် natzi ခဲ့သူတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့မိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိခဲ့. သူကကျနော်နေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာတစ်ဝက်ကိုလံဘီယာခဲ့သည်မသိ. ငါသည်သူ၏ယုံကြည်ချက်သဘောပေါက်လိုက်တဲ့အခါ, ငါတစ်ဝက်ကိုလံဘီယာဖြစ်ခဲ့သည်သူ့ကိုပြောပြသည်, သူသည်ငါ့ကိုယုံကြည်ရန်ငြင်းဆန်. ကျွန်မမဲမှောင်အသားအရေခဲ့, သူကပထမဦးဆုံးဌာန၌ငါ့မိတ်ဆွေဖြစ်လာကြပါပြီဘယ်တော့မှ. သူသည်ငါနှင့်အတူမိတ်ဆွေများကကနျြရစျ. ငါသည်ဘုရားသခင်သည်သူ၏ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဒီကိုအသုံးပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်, ကျနော်တို့ကတည်းကနေ့ကအသက်တာကိုမှတစ်နေ့မှတစ်ဆင့်ထိတွေ့ဆုံးရှုံး, ဒါပေမယ့်မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသားအရေအရောင်၏. ငါကအစဉ်မပြတ်သင်၏အအသားအရေရဲ့အရောင်ကိုစီရင်ခံရဖို့ဘယ်လောက်နာကျင်နှင့်ထိခိုက်စိတ်ကူးမနိုင်. ငါ၏အသားတော်ကိုချစ် 116. သူသာလေးဖြစ်ပါတယ်သေးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိစိတ်ကူးရှိပါတယ်. နှစ်ဦးစလုံးသည်ငါ့သားတို့အားကြီးစွာအခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်များဖြစ်ခြင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသ၏အောက်ခြေကနေကျေးဇူးတင်ပါသည်. အဖြစ်ဝေးငါ၏အလေးနှစ်အရွယ်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်သကဲ့သို့, အဆိုတော်များတူသူကိုယောက်ျားတွေသညျယရှေုကိုချစ်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာ :)
ကေး • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:02 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ပိုမိုငါ Trayvon Martin ကအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖတ်ပါနှင့်နားမထောင်. ပိုမိုငါအရှိဆုံးအမြင်တစ်ခုလက်တွေ့ / လိုက်ဖို့အမှတ်ကနေကိုကြည့်လို့မရပါဘူးသဘောပေါက်. ကျနော်တို့မကြာခဏကိုယ်ပိုင်အတိတ်ထဲကနေအိတ်ကိုသယ်ဆောင်တဲ့ skewed မှန်ဘီလူးမှတဆင့်သည်ဤအမှုများမှာကြည့်ရှု. ငါသည်အဘယ်သူ၏အကြီးအ-အဘိုးမက္ကစီကိုမှတရားမဝင်လူဝင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဲ့သို့ဆို, သို့သော်လည်းအမှန်တရားဘက်လျက်ခရစ်တော်အားဖြင့်စိန်ခေါ်ထားသည်, မဟုတ်အမှန်တရားအဖြစ် “ငါ” တွေ့သည်. ခရစ်တော်အားကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးရေးအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဘေးဖယ်ထားကြောင်းတောင်း, လိင်, ဂိုဏ်းဆက်နွယ်မှု, စသည်တို့ကို (ဂလာတိ 3:28), ခရစ်တော်၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးတွေ့မြင်နိုင်ရန်အတွက်…သမျှအမှန်တရားကြုံးဝငျပတျသကျ.
Trayvon Martin က, သူ့မိတ်ဆွေရာခေလသည် Jeantel အဆိုအရလူမျိုးရေးအရ profiled George Zimmerman သူ့ကိုတောင်းဆို “Creepy တစ်ဦး ** Cracked,.” ပြီးတော့ချေမှုန်းရေး GZ brutally ဆက်လက်. နားလည်သည်, မိမိလက်သို့ပညတ္တိကျမ်းကိုယူသောကွောငျ့ငါ Zimmerman ခုခံခြင်းမရှိလမ်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကို, အရာမာတင်၏အသေခံခြင်းအဆုံးသတ်. ဤကိစ္စတွင်နဲ့ငါ့ပြဿနာ, မကြာခဏလူမျိုးရေးခွဲခြားမှတ်ချက်များနှင့်အပြုအမူများအတွက်လူနည်းစုအားပေးသောဖြတ်သန်းခဲ့. ဤကိစ္စတွင်အတွက်အမှန်တရားနှစ်ခုလုံးကိုယောက်ျားအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆီသို့မိမိတို့၏အပြုအမူအတွက်လိုင်းထဲကခဲ့ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, သူကအရောင်၏လူယောက်ျားဖြစ်သောကြောင့်သေး TM အလိုအလျောက်တစ် pass ရရှိသွားတဲ့. ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကထိုစိတ်ဓာတ်အားချီးမြှောက်ပါဘူး, ကလိမ်ခြင်းနှင့်မတရားကြောင်းတဦးတည်းသောကွောငျ့.
လူနှစ်ယောက်လုံးသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှတုန့်ပြန်ပုံအညီအမျှတာမှားခဲ့ကြ, သို့သော်လည်းကျနော်တို့အားလုံးအချက်အလက်များအကြောင်းကိုနည်းနည်းဂရုစိုက်. ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ထင်ချင်သောလမ်းကိုထောကျပံ့သောဖြစ်ရပ်မှန်များဂရုစိုက်.
ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာအမှန်တကယ်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ရှာဖွေတာငါ, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်ကယ့်အဖြူပြဿနာမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာအရောင်များ၏လူနည်းတူပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ပါသည်. လူမျိုးရေးဝါဒ, နေသမျှကာလပတ်လုံးသာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်အဖြစ်အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ် “ပိုင်ဆိုင်” လူထု. ငါအမှန်တကယ်ဒီသတင်းစကားကိုမာတင်လူသာကင်း Jr ယုံကြည်. တရားကိုဟောပြော, ကအယ်လ် Sharpton များ၏အကြိုက်ခြင်းဖြင့်အရောင်မှိန်ခင် & ယေရှဲ Jackson က. အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအမှန်တကယ်ခရစ်တော်၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့်မြင်သောအခါစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်တညီတညှတျတညျးသာဖွစျနိုငျ, ဂလာတိအဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 3:28 ကျနော်တို့အားလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ထောက်ပြ “IN” ခရစ်တော်. ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်တော်တို့ framework ကိုပြင်ပကိုယျ့ကိုယျကိုကြည့်ရှုရန်ရှေးခယျြခဲ့အချိန်မရွေးယုံကြည်, ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခုခုကိုသိလျက်သို့မဟုတ်မသိဘဲအတားအဆီးများနှင့် Divide စိုက်ထူထက်. အောက်ခြေလိုင်းကခရစ်ယာန်တွေ, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသင်နှင့်အတူရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အမှန်တကယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှုထောင့်ဘက်လျက်အဖြစ်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သင်နှင့်အခြားသူများအကြားအတားအဆီးစိုက်ထူရန်ဆက်လက်မိစ္ဆာအဖြစ်မှန်ဖြောင့်မတ်နှင့်အတူထွက်ခွာနေကြသည်.
ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်မေးရန်လိုအပ်ပါတယ်အမှန်တရားကိုချင်ကြဘူး, သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်မှန်ဘီလူးမှတဆင့်မြင်နေသာစိတ်ဝင်စား, အမှန်တရားဆွေမျိုးရှိရာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဘောင်သို့ကိုက်ညီလျှင်သာလက်ခံသည်?
LaRone • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 4:35 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုဘာမှထက်ပိုဝမျးနညျးဖတ်နေပုံ “အချို့သော” ဒီအံ့သြစရာက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပို့စ်၏, ငါက hard ဒီနေရာမှာအကြားခြားနားချက်ကိုမြင်ရမှရှာတွေ့, YouTube ကိုသို့မဟုတ်ရှေးရှေးပဲသူတို့ရဲ့ရမှတ်ငြင်းခုန်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းပယ်ချလိုဘယ်မှာမဆိုအခြား site ကို. နေဆဲ, ခါတိုင်းထက်အများကြီးပိုကောင်းမှတ်ချက်များ. အဘယျသို့ခရီးစဉ်သိရှိစေရန်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့မှတ်ချက်များအများစုအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရဆည်းပူးခဲ့ကြပုံရသည်.
အဖြစ်ဝေး Trayvon ၏သတ်ဖြတ်မှုအဖြစ်, ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုယင်း၏နီးပါးဘယ်တော့မှအရောင်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုသတိပြုမိ, အထူးသဖြင့်အနက်ရောင်, ကြောင်း Zimmerman ၏ကာကွယ်ရေးမှကြွလာ. ယခု, အရာအားလုံးပြိုင်ပွဲနှင့်အတူလုပ်ဖို့မရှိပါဘူး, ဒါပေမယ့်ပြုကြသောအမှုအရာဒီတော့အလွယ်တကူမှတ်မဖြစ်သင့်. အမေရိကရှိအဆိုပါအနက်ရောင်အတွေ့အကြုံကိုဒါ downplayed ဖြစ်ပါတယ်. အဘယ်ကြောင့်? လူမည်းတွေပဲသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်ကဤတိုင်းပြည်တွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏ပိုင်ဆိုင်မှုခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုကျော်ရသင့်တယ်? သင့်အစိုးရဝါဒဖြန့်စာသားတို့၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုခေါ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမေ့နေတာလားခံရ? သူတို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာသားသူတို့သာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားကြောင်းမေ့လျော့သင့်တယ် 3/5 လူ? တန်းတူအရေးပါမှု, ဖိနှိပ်မှုစနစ်များရှိသေးမဟုတ်လျှင်အဖြစ်ကယ့်ကိုအရောင်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ကြသူတွေကိုအမေရိကန်သမိုင်း၏ဤတူညီသောအချက်များကိုမေ့မေ့လျော့လျော့ပြုမူသင့်တယ် (မရင့်ကို) ကြောင်းတိုက်ရိုက်အနက်ရောင်အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အခြားလူနည်းစုအုပ်စုများဖြစ်ပေါ်လာအောင်? ဒါဟာသမိုင်းဝင်လူမျိုးရေးခွဲခြားနိုင်ငံတွင်ပြိုင်ပွဲဆက်ဆံရေးထိခိုက်စေရန်ကြိုးပမ်းမှု၌ကျော်ရရှိရန်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်အောင်မြင်မှုထောက်ပြဖို့လူအားပြောပြရန်ဒါလွယ်ကူသည်. သင်တို့မူကား, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများလှူဒါန်းသူများမှာသည့်အခါ (ပင်မသိဘဲလျှင်) သငျတို့သအနုတ်လက္ခဏာကအကျိုးသက်ရောက်စေကြသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့် Racing မှကြွလာသောအခါသင်တို့ကိုမလွှဲမရှောင်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်ခုခံကာကွယ်တဲ့ရှုထောငျ့ရှိ. ခရစျတျောအားလုံးလူတွေ unifies သောသခင်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်. သို့သော်နေဆဲ, အသင်းတော်များ America မှာအများဆုံးအသားအရောင်ခွဲခြားသောအရပ်တို့ကိုဆက်လက်တည်ရှိ. စာဖတ်ခြင်းအဘို့သင်တို့ရှိသမျှကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်အပေါင်းတို့နှင့်မင်္ဂလာဖြစ်.
thefollower • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 9:51 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤတစ်ခုလုံးကိုအရာကနေတဆင့်မှတ်ချက်တွေကိုဖတ်ပြီးကြပါပြီ, အငြင်းပွားမှုများ, ကိုယ်ချင်းစာထုတ်ပြန်ချက်များ. ဒါဟာအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုဤအရာအလုံးစုံနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကအရမ်းအံ့သြစေတယ်. အစအဦးခရီးစဉ်အတွက်အကြောင်းပြောနေတာကိုရပ်တန့်ကြဘူးဆိုပါတယ်လိုပဲ, သို့သော်, ငါသူငြင်းခုန်မဆိုလိုခဲ့ပါဘူးအတော်လေးသေချာပါတယ်.
ငါဖြစ်၏ 18 နှစ်အရွယ်အဖြူမိန်းကလေး, ကြှနျတေျာ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် 18 နှစ်အရွယ်လူမည်းမိန်းကလေး, ကိုယ်မပါအနက်ရောင်ဆွေမျိုးသားချင်းများ, ငါ့အသင်းလုံးဝအဖြူရောင်ဖြစ်ပါသည်, ကိုယ်အများအပြားအနက်ရောင်သူငယ်ချင်းတွေ, ကိုယ်ကပိုထက်ဝက်ကျော် campers အနက်ရောင်များမှာဘယ်မှာနွဲ့သောသားသမီးတို့အဘို့တစ်စခန်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့….ကိုယ်သင်တို့ရှိသမျှလူတွေဒါသူတို့အားငါ့အသက်ကိုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်အချက်အလက်များဖြစ်ကြသည်ပိုကောင်းသငျသညျကိုနားလည်စေရန်သင်၏အသက်တာအကြောင်းကိုအချို့သောအချက်အလက်များတက်ထားလမ်းကိုမြင်ကြပြီ…ငါလူမျိုးရေးပြဿနာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပြီးပြီကြောင့်တချို့လူတွေကတဆင့်သွားပြီထားသောရုန်းကန်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ကြားနာရသောအခါယင်း၏ပင်အမှုအရာရှုပ်နေခဲ့သည်မှငါ့လက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ငါ့ကိုအရူးလုပ်ငါ့ကိုနှောင့်အယှက်. လူသတ်မှုကဲ့သို့အမှုအရာတို့ကိုကျော်ရူးသွပ်ရရန်၎င်း၏အဆင်ပြေ, လူမျိုးရေးဝါဒ, မုသာစကား, နှင့်လျှို့ဝှက်, ဒါပေမဲ့ကမလေးစားတဲ့နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆက်ဆံဖို့ကျိန်းသေအဆင်ပြေမဟုတ်ပါနှင့် '' ဈပိုကောင်းကိုသိရ’ ကိုယ်ကဒီမှာအပေါ်မြင်ကြပြီသဘောထားများ. ငါသည်ဤလောက၏နှင့်၎င်း၏ရုန်းကန်မှုများတွေအားလုံးရဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီးမသိစခွေငျးငှါပေမယ့်ကိုယ့်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုငါသိ၏. ရှိသမျှတို့ကိုငါဘုရားသခင်၏ပထမဦးဆုံးတန်းတူအားလုံးလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ကုသသူတို့၏အမျိုးအမိတ်ဆွေအဖြစ်ကျွန်တော်နှင့်ထိုသူတို့အဘို့ကိုတက်ကပ်သင့်ပါတယ်နိုငျကွောငျးကိုသိ. ငါသညျလညျးဘုရားသခငျသညျဖွောငျ့မတျတရားသူကြီးကြောင်းကိုငါသိ၏, ဒီမှာအပေါ်စောဒကတက်တဲ့သူကိုသင်အများအပြားသင်ကခရစ်ယာန်ဘာသာပြောသည်…ရှက်ပြီးလဲသေဖို့ကောင်းတယ်… ဤကိစ္စတွင်ထိုကဲ့သို့သောဌာနခွဲယူဆောင်နှင့်မယ့်သူ / သူမသူတို့နှင့်အတူသဘောတူပါဘူးသူကိုလူတိုင်းကထက်ပိုကောင်းသိတယ်ထင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြားအဖြူ / အနက်ရောင် / ဟစ်စပန်းနစ်ပြည်သူများအကြားလိုက်ပါတယ်. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏, တကယ် Treyvon အသတ်ခံခဲ့ညဥ့်ဖြစ်ပျက်ကိုသိသူတစ်ဦးတည်းသာ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အမှားအမှန်သူငြင်းခုန်ရန်နေသော?
ယောဟနျသ 8:7 ဒါကြောင့်သူတို့ကသူ့ကိုတောငျးဆိုဆက်လက်သည့်အခါ, သူကမိမိကိုမိမိချီးမြှောက်ခြင်း, သူတို့ကိုကလညျး, “သင်တို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူမူ, သူ့ကိုပထမဦးဆုံးသူမ၏မှာကျောက်ကိုချပစ်ကြကုန်အံ့။”
ငါသည်သင်တို့ကိုအမှုအပေါ်ကျွန်တော့်အမြင်အားပြောပြရန်မကြားတာနဲ့ကျွန်မသင်သည်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းငှာမကြားတာ. ငါလက်ျာဘက်သို့မဟုတ်မှားယွင်းတဲ့ကျနော်တို့လူမျိုးကိုချစ်မှခေါ်တော်မူကြသည်ကိုသင်သတိပေးမဖြစ်မနေခံစားခဲ့ရနှင့်ငါတို့အနိုင်ရမဟုတျကွောငျးအငြင်းအခုံအနိုင်ရကျော်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မာနသွားလာရင်းစေ. ယောဟနျသ 8:7 ပထမဦးဆုံးတဆယ်မှတ်ချက်များအတွင်းစိတ်ထဲထံသို့ လာ. အဆုံးတိုင်အောင်ထိုပြည်၌တည်းခို. သင်တစ်ဦးမတ်ေတာရှိတဲ့လမ်းအတွက်လုပ်သို့မဟုတ်ငြင်းခုန်သွားနေတယ်ဆိုရင်, ဒီမှာရယ်စရာအတွေးင်, သင်နေတုန်းပဲငြင်းခုန်မလေးစားသောလမ်းအတွက်ငြင်းခုန်မနိုင်ကြောင်းသိလျှင်! ဒါဟာတူသောဆောင်ရွက်ရန်အခမဲ့မည်သူမဆိုနှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးက၎င်း၏ထုံသောအပြစ် တင်. သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်နေသည်မဟုတ်ပါ. တစ်ဦးရပျတညျနှင့်သင့်ထင်မြင်ချက်များမျှဝေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ငါသည်သင်တို့အားလုံးအသိဉာဏ်များနှင့်ပျော်စရာလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ပေမယ့်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိလူများခရစ်ယာန်ဘာသာကျွန်ုပ်တို့သည်၏ကျန်ထံမှကွဲပြားခြားနားသောပြုမူကြဘူးသည့်အခါကျိုးနပ်သည်ထင်လိမ့်မယ်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်များအားဖွငျ့ဘုရားသခငျ၏မတ်ေတာတျောမပြဘူးဆိုရင်ကြောင်းသေချာပါတယ်ဆိုပါတယ်လိုပဲ ကမ္ဘာကြီး?
က • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 11:31 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျနော်တို့ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ပုံသဏ်ဌာ၏ဆောငျသူမြား, ကျွန်တော်နှင့်အားလုံးလူတွေလူဆိုးဖြစ်ကြကြောင်းနားလည်သူတွေကို, အကုသိုလ်များသော, ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဘခမည်းတော်၏အမျက်တော်ကိုယူတဲ့သူ, ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တရား၏, ငါတို့အဘို့အလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်. ငါတို့သည် ထောက်. , သမ္မာမပါဘဲအဘယျသို့ရှိဘူး? အမှန်တရားဤစကားဝိုင်းအုပ်ချုပ်သောအရာကိုဖြစ်သင့်, မဟုတ်အမြင်. ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းဇာတ်လမ်းပြောထားသည်နှင့်ကျွန်တော်ရိုးသားဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်အဖြေကိုထောက်ပံ့ပေး.
ငါတောင်ငါ့အလူမျိုးရေးဝိသေသလက္ခဏာများကိုမည်မဟုတ်. ဒါကြောင့်ဒီဆွေးနွေးမှုမှဆီလျှော်သောကွောငျ့. ငါသည်ထာဝရဘုရား၏ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကို, နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုဥပဒကိုလေ့လာတဲ့သူ, တရားစီရင်ရေး, လူမှုဗေဒ, နှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး.
ယင်းအချက်အလက်များနှင့်စာရင်းဇယားကိုကြည့်ပါ. အမေရိကန်တရားရေးစနစ်ကဝေး colorblind နေ. သူမသည်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖိနှိပ်မှု၏အပြစ်များ reeks, လူမျက်နှာကိုထောက်, ဆိုး. Classism နည်းတူအများကြီးကတစ်အကြောင်းမရှိလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမတည်ရှိပါဘူးပြော, သို့မဟုတ်ဤကိစ္စ၏ရလဒ်ကိုအတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမကစားခဲ့ဘူး, အမှားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလုံးဝကစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ချင်ပါတယ်အရာကိုမျက်နှာသာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားမျှတမှုစနစ်၏သမိုင်းကိုလျစ်လျူရှုဖို့ရှေးခယျြထားတဲ့အမြင်ဖြစ်ပါသည်.
ကျေးဇူးတင်စရာ, ကျွန်တော်တို့ဟာအရာရာကိုသိတယ်သူတစ်ဦးဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြု. ကိုယ်တော်ကိုပါစေမယ့်သူတွေကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေအစွမ်းထက်သူကားအဘယ်သူ. ခါးသီးမှုနှင့်နာကြည်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသစ္စာတော်သူကားအဘယ်သူ. အဘယ်သူဆုတောင်းခြင်းနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပါဝါပေးတော်မူပြီ.
အမှန်တရားအတွက်သင်၏သားသမီး Disciple. သမ္မာတရားကိုသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်, (တချို့လူတွေကသူတို့ကိုရှုမြင်ကြလိမ့်မည်ကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်ရန်) နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အသက်ရှင်သည်အတိုင်းများအတွက်.
PastorNorm • သြဂုတ်လ 24, 2013 တွင် 10:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ကျနော်တို့ကြားဆက်လက်သူအပေါငျးတို့ကတခြားသူတွေနဲ့အတူလုပ်ဖို့လိုလားသည်ဟုယုံကြည်ရာခရီးစဉ်ကဆိုသည်ကားအဘယ်သို့. ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုထဲကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ကြပါလျှင်ညာဘက်ရရဖြစ်စေရန်ပါဝင်သမျှသောပါတီများအဘို့ဆုတောင်းပဌနာ. အဘယ်အရာကိုလူတိုင်းလွဲချော်ထားပါတယ်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည်သူရှိခဲ့သမျှအကြောင်းပြချက် Trayvon ရဲ့နံပါတ်တစ်ဟုချေါသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဘယ်သူမှထိုညဉ့်ကြောင်းကိုပြောင်းသွားခဲ့သည်. ဘုရားသခင်က, “Trayvon, ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အကျော်” သူ Tupac နှင့်အခြားသောဘို့ထိုသို့ပြုရုံနဲ့တူ. Trayvon သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါသည် IF, ဘုရားသခင်အားဘုန်းအသရေကိုသူယေရှုနှင့်အတူယခုရှိ. အကယ်. မရ, ဝမ်းနည်းစွာသူဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံအတွက်လည်းမီးလောင်နေသည်. သတိရ, ဒေ. 12:13 ” ကျွန်တော်တို့ကိုမြေတပြင်လုံးကိစ္စ၏နိဂုံးကြားပါစေ: ကြောက်လန့်သညျဘုရားသခငျ, ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေ: ဒီလူကိုမြေတပြင်လုံးတာဝန်ဖြစ်ပါသည်.
muchneededmoderator • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 5:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤ website ကိုဝင်ကြ၏, posted အမျိုးမျိုးသောဘလော့ဂ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ငါဒီတစ်ခုဆီသို့ရောက် လာ. , သည်အထိအမျိုးမျိုးသောပို့စ်များကိုအားပေးအားမြှောက်ခဲ့သည်. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလာတော့သည်သောမှတ်ချက်ချည်စိတ်ပျက်စရာနှင့်နှလုံး wrenching နှစ်ဦးစလုံးခဲ့. အဲဒီအစားအေးဆေးဖတ်နေ၏, လူနာ, ပညာရှိသောသူနှင့်ဘုရားသခင်မှတ်ချက်များဗဟိုပြု, ကျွန်မရုတ်တရက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့်မုန်းတီးမှုတစ်ဦးစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းအတွက်လွှမ်းတွေ့ရှိခဲ့. ထိုလူအပေါင်းတို့ကဤကသူသို့မဟုတ်တစ်ခရစ်ယာန်များသည်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်ဖြစ်စေမသူတို့၏ပဌနာသညျဘုရားသခငျ၏နားရွက်ကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ် Marvin ကဝတ်အတိုင်းအသီးအသီးကတခြားပြောပြရန်သင့်လျော်သောင်ထင်ဟန်သူကိုထင်ခရစ်ယာန်များ: “…သင့်ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့မျက်နှာကျက်အတိတ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။” သင်တို့တွင်အတျောမြားမြားကိုသင်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်မဟုတ်နှင့်မည်သူမဆိုမှားယွင်းစေရန်ဆန္ဒရှိမထပ်တလဲလဲပြောပါ, သငျသညျရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆရှိသည်နှင့်အဟုတ်ကြောင်း, သူတို့ခွန်အားဖြစ်ကြ၏. ကောင်းသော, ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆရှိသည်နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်သဘောတူတဲ့သူကိုအခြားသူများကိုရှာဖွေဖြစ်စေမသေချာသောကိစ္စများအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရ. အဲဒီခံစားရန်ခွင့်နှင့်ကျနော်တို့အမေရိကန်တွေကဲ့သို့ငါနေတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဖြစ်ပြီးငါကကျွန်တော်တို့ဆီကယူဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်. သို့သော်အဆက်မပြတ်ခရစ်တော်အတွက်အခြားအစ်ကိုသို့မဟုတ်အစ်မ Bash နှငျ့သငျကိုယ်ကိုကိုယ်အကောင်းဆုံးသန့်စင်သောလျှို့ဝှက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်သိလျှင်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှာဟောပြောဖို့. ခရစ်ယာန်တွေဟာအဖြစ်ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာလူ့ဖြစ်ကြောင်းမည်သူမဆိုထက်ပိုကောင်းတဲ့သိသင့်, ကျွန်တော်အမှားတွေလုပ်, ကျွန်တော်မာနထောင်လွှားမာနထောင်လွှားလုပျဆောငျ, ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးဘယ်လောက်ခက်ခဲနေပါစေနေဖြင့်အချို့သောကိစ္စများမှမြင်နိုင်ကြသည်, ကျနော်တို့ပြိုလဲကြောင့်သူတို့အား blinders အမြဲရှိလိမ့်မည်, အကုသိုလ်များသော, လူသားမြားသညျ. ဒါဟာဘုရားသခင်သည်ငါတို့တရားသူကြီးကြောင်းကိုအကြောင်းပြချက်အဘို့ဖြစ်၏. ဒါဟာအရေးပါသောငါတို့ထင်မြင်ချက်များမဟုတ်ပါဘူး, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ရဲ့နှငျ့ဘုရားသခငျရဲ့တစ်ဦးတည်း. ဒါကြောင့် hatefully တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆီသို့ဦးတည်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်သေးကိုယ်ကိုကိုယ်ခေါ်ခြင်း “ညီအစျကို” အကောင်းဆုံးမှာသနားစရာဖြစ်ပါသည်.
Marvin, ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့ဆကျဆံဖို့ဆက်လက်လမ်းကိုအစာအိမ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရိုးရှင်းစွာတိုင်ဆင်းတစ်ဝက်လမ်းအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းရပ်တန့်ခဲ့ရသည်ရိုးသားဖို့ “ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေ” လူအပေါင်းတို့သည်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့သေနတ်မှကပ်, ပို. ပို. ရောင်ဖြစ်လာပြီးနောက်သင်စိတ်ဆိုးမဟုတ်ခဲ့ဟုဆိုကာ. သင့်ကိုယ်ပိုင်ရေးသားချက်များကိုဖတ်ပါ, ခင်ဗျား. ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူသို့မဟုတ်မသဘောတူပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးမပါဘူး, အဘယ်အရာကိုအရေးပါသင်သည်သင်၏အစ်ကိုလိုဆကျဆံပုံ. တိုင်မှတဆင့် Read, သငျသညျဝေးနေဖြင့်ခဲ့ကြသည် (ငါနှိမ့်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖတ်နေရပ်တန့်ကအနည်းဆုံးသည်အထိ) ဒီချည်ပေါ်အရှိဆုံးမတည်ငြိမ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး. သငျသညျကိုသူတို့ဘယ်လိုဆုတောင်းရန်သင်ပြောပြရန်မပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ပြီးတော့သင်သည်ဘုရားသခင်တောင်မှသူတို့ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မမူကြောင်းအကြံပြုအခြားသူများကိုပြောပြ. သငျသညျထိုသို့သောအမှုကိုအအကြံပြုသူကားအဘယ်သူဖြစ်ကြ? သငျသညျဘုရားသခငျသညျမဟုတျပါ. သင့်ရဲ့ရာဇပလ္လင်ကိုချွတ်ချလာကြပြီးတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌သင်၏အစ်ကိုတို့အားဟောပြောအစားစိတ်မရှည်ခြင်းနှင့်အမျက်ဒေါသ.
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရုပ်ဆိုးသည်နှင့်ငါနေရာတိုင်းနှင့်အဆက်မပြတ်မြင်ရ. ငါဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ပေါ်မှာမုန်း. အားလုံးနှစ်ဖက်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသင့်ရဲ့အသားအရေကဘာလဲဆိုတာအရောင်နှင့်သူတို့၏အသားအရေသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကှာခွားသောကွောငျ့မဟုလူအပေါင်းတို့အားရိုးရိုးအခြားလူကိုမုန်းသောနေပါစေရှိကွောငျးကိုအသိအမှတ်မပြုသည်အထိဒါပေမဲ့ဒီရောဂါအနာမပျောက်ရှိလိမ့်မည်. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်မလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုငါ့ညီအစ်ကို, ညီအစ်မထိခိုက်လျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုရန်အလွန်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်. ကျနော်တို့တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရန်ရှိသည်ကြောင်းဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းကို “လူမျိုးရေးဝါဒီ” တိုင်းထောင့်ပတ်လည်မှာပဲသူတို့ရဲ့အသားအရေအဖြူရောင်ကြောင့်လူပေါင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားဖြစ်ကြောင်းယူဆ. ကျနော်တို့အများကြီးအရောင်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အတူတခြားခရစ်ယာန်တွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်. အော်ဟစ်ရပ်တန့် “လူမျိုးရေးဝါဒီ” တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှာရိုးရှင်းစွာပြောပါ “အစ်ကို”. ငါကပိုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းဘေးထွက်သို့မဟုတ်အခြားအော်ဟစ်နေသောကြောင့်နေ့ရက်တိုင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတွေ့မြင် “လူမျိုးရေးဝါဒီ” ပင်သူတို့ addressing ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘဲ. သင်တစ်ဦးလူမျိုးကြီးဝါဒလမ်းအတွက်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအစ်ကိုသို့မဟုတ်အစ်မကိုမြင်ရလျှင်ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်ကဖြေရှင်းရန်နှင့်လူတစ်ဦးအားဟောပြော, ပုဂ္ဂလိကပိုင်. အဘယ်သူမျှမဝံပုလွေလည်းမရှိသည့်အခါဒါပေမယ့်ဝံပုလွေငိုရပ်တန့်.
ဖေါ်ပြ: မျက်မှောက်မမြင်ဘဲ, မပေးနှစျသိမျ့အားဖြင့်: သူများသည်ပေါင်းစပ်ခြင်းအသင်းတော်များများအတွက်အားပေးမှု : အဆိုပါတပ်ဦးဆင်ဝင်